Balanitis: လိင်တံ၏ယားယံခြင်းနှင့်နီခြင်း | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
စတိုင်လ်အမျိုးသားများ | | ကျန်းမာခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်တံတွင်အမျိုးသားများခံစားရနိုင်သောရောဂါများသို့မဟုတ်ပြproblemsနာများသည်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများဖြစ်ပြီးအချို့မှာများသောအားဖြင့်နာကျင်သော်လည်းအချို့မှာလုံးလုံးနာကျင်မှုမရှိသော်လည်းအခြားသူများမှာမူ ပို၍ စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်၊ ကျောက်ကပ်, လိင်တံအတွင်း paraphimosis တစ်ခုသို့မဟုတ်ကင်ဆာ။ ဒီဆောင်းပါးမှတဆင့်ယနေ့ Baleitis သို့မဟုတ်လိင်တံ၏ယားယံခြင်းနှင့်နီခြင်းကဲ့သို့သောမျှမျှတတအဖြစ်များသည့်အရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့သိရန်ကြိုးစားရမည်။.
များသောအားဖြင့်မသက်မသာဖြစ်လာနိုင်သောဤပြproblemနာကိုခရင်မ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်၊ သို့သော်အရာအားလုံးရှုပ်ထွေးလာပါကခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်သည်ဟုယူဆရလျှင်၎င်းသည်သင်ခံစားနေရသည်ဟုခံစားရလျှင်သို့မဟုတ်ရောဂါရှိပြီဟုထင်လျှင်အလွန်သတိထားပါ။ ။
2 Balanitis ၏အကြောင်းရင်းများ
3 Balanitis အမျိုးအစားများ
3.2 ဘက်တီးရီးယားကြောင့် Balanitis
3.5 balanitis ပျံ့နှံ့
3.6 Premalignant ကိုတွေ့ရှိရပါသည်
3.8 ယားယံ (မတည့်) balanitis
4 balanitis ၏ရောဂါလက္ခဏာများ
6 ငါ balanitis ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ စိုးရိမ်ပူပန်သငျ့သလော
7 Balanitis ဖြစ်နိုင်ခြေရှုပ်ထွေးမှုများ
Balanitis ၎င်းသည်လိင်တံ၏နောက်ဆုံးပိုင်းသို့မဟုတ်အဘလန်းတွင်တူညီသောအရာနှင့်အတူတူဖြစ်ပြီးရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒီရောင်ရမ်းမှုကိုလည်းအသားစမှာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ balanoposthitis အကြောင်းပြောလိမ့်မယ်။
ရောင်ရမ်းခြင်းက၎င်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည် သင့်ရဲ့လိင်တံအရွယ်အစားတိုးပွားလာခဲ့သည်ဤရောဂါတိုးပွားခြင်းသည်ရောဂါကြောင့်သာဖြစ်မည်ကိုသတိရပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်မြန်မြန်ကုသရန်အရေးကြီးသည်။
pen သင်၏လိင်တံအရွယ်အစားကိုသင်မနှစ်သက်ပါက၎င်းကိုတိုးမြှင့်ရန်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာနိုင်သည် ဤနေရာမှ Penis Master စာအုပ်ကိုကူးယူပါ
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နာကျင်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသောအခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်ယားယံခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဂလန်းနှင့်အသားအရေနီများနီခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နာကျင်မှုတိုးပွားစေသည့်အရည်ကြည်ဖုများ၊ တိုက်စားခြင်းသို့မဟုတ်အစက်အပြောက်များကိုလည်းခံစားရနိုင်သည်။ ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအတွက်။ သို့သော် Balanitis အမျိုးအစားများစွာရှိသည် အဲဒါဟာဒီထက်ပိုနာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီရောဂါအကြောင်းသင်တစ်ခါမှမကြားဖူးပေမဲ့၊ သူကပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိပြီးယောက်ျား ၁၀၀ မှာ ၁၀ ယောက်မှာ ၁၀ ယောက်မှာတွေ့တယ်။ ၎င်းသည်လူကြီးများကဲ့သို့ကလေးငယ်များကိုလည်းထိခိုက်နိုင်သည်။
အများအားဖြင့်အရေဖျားလှီးခြင်းမခံသောလူနာများတွင်သန့်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်း Balanitis သည်အကြောင်းတရားများစွာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားအသုံးအများဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ဥပမာ၊ glans ကိုအမျက်ထွက်စေသောပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုသောကွန်ဒုံးများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြမယ် Balanitis ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာအများအားဖြင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်ငါတို့ပြီးသားပြောနိုင်ပေမယ့်သူတို့ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။
မှို, သင်ဤသုံးနိုင်သည်သော မှိုမုန့်.
ဗိုင်းရပ်စ်။ ဤအထဲမှကျွန်ုပ်တို့သည် Herpes သို့မဟုတ် Human Papilloma ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်
စတီဗင် - ဂျွန်ဆင်ရောဂါ
သူတို့ကဘာလဲဆိုတာသိရန်မီ Balanitis ၏လက္ခဏာများနှင့်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ကုသမှု ဤအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းများစွာရှိသကဲ့သို့၎င်းသည်ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အကြောင်းရင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော balanitis အမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရည်ညွှန်းကိုးကားခြင်းသည်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်အကောင်းဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ထဲမှမည်သည့်ရောဂါမဆိုခံစားနေရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့်တိုက်ရိုက်သွားပြီးအထူးသင့်လျော်သောကုသမှုကိုညွှန်ကြားမည့်အထူးကုဆရာဝန်တစ် ဦး မှရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဓိကဒဏ်ရာများမှာတစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်းတိုက်စားခံရနိုင်သော macules နှင့် papules များဖြစ်သည်။
ခေါင်းစဉ်တွင်ဤ balanitis အမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ ဘက်တီးရီးယား၏အသွင်အပြင်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်, အရာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအလှည့်အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်:
ဤ balanitis အမျိုးအစားသည် c ဖြစ်သည်အဓိကအားဖြင့် HSV-2 ဖြစ်နိုင်သည်ဒါခေါ် HSV-1 လည်းပေါ်လာလိမ့်မည်ပေမယ့်။
သင်၏လိင်တံ၏ glans ပေါ်မှာ အဖြူရောင်ဖြူပြားများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်းအသားဓာတ်ကိုထိခိုက်နိုင်သည်, အများဆုံးပုံမှန်အရာသင်တစ် ဦး sclerosing balanitis ခံစားရသည်။
၎င်းသည်အလွန့်အလွန်ပြင်းထန်သည့်ဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည့် baleitis ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤ balanitis အမျိုးအစားသည် ရောင်ရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်, ကံမကောင်းအများဆုံးကွဲပြား၏အခြားရောဂါများကိုကြီးစွာသောလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အများအားဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသောအဖြူရောင်အစွန်းများနှင့်အတူ glans တွင်မီးခိုးရောင် - အဖြူရောင်တွေ့ရှိခြင်းများပါဝင်သည်။
ဒါ အန္တရာယ်အရှိဆုံး balanitis တစ်ခု အားလုံးအမျိုးအစားများနှင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ကင်ဆာဖြစ်ထွန်းဖို့အခွင့်အလမ်းအရေးကြီးတယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည်အနီရောင်အရောင်ကိုတွေ့ရပြီးကတ္တီပါပုံပန်းသဏ္withာန်ရှိပြီး circinate balanitis နှင့်အတူအလွန်ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောနယ်နိမိတ်များရှိသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာမှန်ကန်သောရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။
ဤ balanitis အမျိုးအစားများတွင်ကာယပိုင်းစစ်ဆေးမှုကိုမလွှဲမရှောင်သာပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ခန္စရွမ်သည်လိင်တံ၏ကင်ဆာကဲ့သို့အဓိကရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖယ်ထုတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
သင်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုအရေဖျားလှီးခြင်းအထီးဤအမျိုးအစားသည်သင်ဤရောဂါများကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်း ၃ ခုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်သောကြောင့်သင်ခံစားရဖွယ်ရှိသည်။
၎င်းတွင်အများအားဖြင့်အနီရောင် - လိမ္မော်ရောင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အများအားဖြင့်ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသောနယ်နိမိတ်များရှိပြီးအနီရောင်အစက်အပြောက်များလည်းရှိသည်။
ယားယံ (မတည့်) balanitis
ဤ balanitis အမျိုးအစားအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ယားယံစေသောထုတ်ကုန်၏ရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့်သို့မဟုတ်ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည် ငါတို့လိင်အင်္ဂါကိုသန့်ရှင်းအောင်ဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ခရင်မ်ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း.
ဤ balanitis အမျိုးအစား မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆေးသောက်ပြီးနောက် ၂၄ မှ ၄၈ နာရီအကြာတွင်ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်တိကျသောအနားများနှင့်အနီရောင်အရောင်များရှိသည့်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသော macules များဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်နာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအချို့သောအဆင်မပြေမှုများဖြစ်စေနိုင်သောအရည်ကြည်ဖုများသို့မဟုတ်အနာများပေါ်လာနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးကိုယခုအထိဖတ်ရှုပြီးနောက်သင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ balanitis ရှိသည်ဟုထင်စေနိုင်သောအသုံးအများဆုံးလက္ခဏာမှာသားအိမ်၏လိင်အင်္ဂါနီခြင်းသို့မဟုတ်လိင်တံနီခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါပတ် ၀ န်းကျင်ပေါက်ကွဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသံသယဖြစ်စေနိုင်သည်။
ငါတို့ balanitis ခံစားနေရသောအခြားရောဂါလက္ခဏာများသည်သားအိမ်၏ယားယံခြင်းသို့မဟုတ်ယားနာခြင်းများဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်လည်းဖြင့်ပြောပြနိုင်ပါတယ် တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်ပြင်းထန်သောပုပ်နေသောအနံ့သို့မဟုတ်နာကျင်မှုများကိုအနာနှင့်လိင်တံမှထုတ်လွှတ်နိုင်သည်.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ balanitis ၏အဓိကလက္ခဏာများကိုသင်မှတ်သားထားရန်၊
အဆင်မပြေတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သော glans ၏နီ။ ဤသည်ကိုလည်းသားအိမ်အထိတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်
လျှောက်ထားခံရဖို့ကုသမှု, ၎င်းသည်ခံစားခဲ့ရသော balanitis အမျိုးအစားပေါ်များစွာမူတည်လိမ့်မည်ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ငါတို့ပြောနိုင်သည်
ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော Balanitis ကိုပantibိဇီဝဆေးများသို့မဟုတ်လိမ်းဆေးများဖြင့်ကုသလိမ့်မည်။
များသောအားဖြင့်အရေပြားရောဂါများမှဖြစ်ပေါ်သော Balanitis သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemနာကိုလျင်မြန်စွာသက်သာစေမည့် steroid creams များဖြင့်ကုသသည်
မှိုကြောင့်ဖြစ်ရလျှင်အထူးကုဆရာဝန်များသည်များသောအားဖြင့်ဆေး antifungal creams များကိုသတ်မှတ်ပေးသည်
Balanitis အမျိုးအစားများစွာရှိခြင်းကြောင့်ကုသမှုအမျိုးမျိုးသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သည့်လူကမျှ၎င်းမှ balanitis ကိုကုသရန်မတိုက်တွန်းပါ။
ငါ balanitis ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ စိုးရိမ်ပူပန်သငျ့သလော
ဤအရာသည်ဆရာဝန်ကသူ balanitis ဝေဒနာသည်သို့မဟုတ်သဘောပေါက်ကြောင်းပြောသောအခါလူတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမေးသည့်မေးခွန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံကောင်းတာကဒီနေ့ခေတ်မှာအလွန်အဆင့်မြင့်သောရောဂါများ မှလွဲ၍ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမျှ balanitis ဝေဒနာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး ၎င်းတို့အများစုကိုတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့်အတူဆေးဝါးကုသမှုခံယူသူများကထိန်းချုပ်နိုင်သည်.
ယေဘူယျအားဖြင့်အချို့သောအမျိုးအစားများတွင် balanitis သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလွန်အမင်းမစိုးရိမ်သင့်ပါ။ သို့သော်ဤရောဂါနှင့်၎င်း၏ပျောက်ကင်းသွားသောရောဂါများကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်သတိထားရန်လိုအပ်သည်။
Balanitis ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောရှုပ်ထွေးမှုများ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်တံတွင်ကြာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ကူးစက်ခြင်းများနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာအောက်ပါဖြစ်ကြသည်။
တခါတရံလိင်တံ၏အစိုင်အခဲကိုအပြည့်အဝဖော်ထုတ်ရန်အတွက်အသားကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်ခက်ခဲပြီးအထူးသဖြင့်နာကျင်စေသည်။ ၎င်းအခြေအနေကို Phimosis ဟုလည်းသိကြပြီး၎င်းသည် paraphimosis ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်
La ခန်ဓာကိုယ် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရောဂါအမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်အမြန်ဆုံးထိန်းချုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဘာမျှမဖြစ်သကဲ့သို့သွားခြင်းကိုမပြုရန်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသောကုသနည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့အရင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေရှိရင် သူသည်ပြီးပြည့်စုံသောစာမေးပွဲဖြေ ဆို၍ ရောဂါလက္ခဏာပြနိုင်စေရန်အတွက်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအထူးကုဆရာဝန်ထံသွားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့ balanitis ခံစားရသည်ဟုနိဂုံးချုပ်ပါက၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့ကုသနိုင်သည့်ကုသမှုကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » ကျန်းမာခြင်း » Balanitis: လိင်တံ၏ယားယံခြင်းနှင့်နီခြင်း
400 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဒါကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာကောင်းပေမယ့်တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်လောက်သာမဟုတ်ဘဲအမြဲတမ်းတော့စဉ်းစားတာကမကောင်းတာကိုရှောင်လို့မရအောင်ရှောင်တာပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကစပြီးကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်များသည်ယားယံလာပြီးမကြာခဏဆိုသလိုငါ့ကို empaz မထားခဲ့ဘဲသူတို့သည်အစွန်အဖျားမှအသင်းအဖွဲ့များကဲ့သို့ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် pikazon အတွက်ဆီမွှေးတစ်ချောင်းကိုကျွန်ုပ်သယ်ပြီးသွားပြီ ဖြစ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှမပေးပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ခုခုပြပါ
Bernardo Yáñez Stumptner ဟုသူကပြောသည်
အထူးသဖြင့်သင့်တွင်လက်တွဲဖော်ရှိလျှင်ရောဂါကို balanitis ဟုခေါ်သည်။ ဆီးချိုရောဂါကိုသင်အန္တရာယ်မကြီးမြင့်ပါကကုသသင့်သည်။
မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားပြီးသူတို့ဘာတွေပို့လိုက်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပါ။ သူတို့က picason ကိုဖယ်ရှားဖို့ဘာကိုပို့ရမယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်။
hahaha hahahahaha လိင်တံအတွက်မီးယပ်အထူးကု hahahahaha ကျွန်ုပ်သည် ၁၆ နှစ်သာရှိသေးသည်။
Jos Sanch ပါ ဟုသူကပြောသည်
သင်ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်ကိုယူပြီးသင်နောက်ထပ်ဘာမှမလိုချင်ဘူး၊ အသင်းတော်နဲ့ပေါင်းသင်းပြီးသမ္မာကျမ်းစာကိုစဖတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာကိုစာဖတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဘုရားသခင့်ဗိမာန်တော်ဖြစ်သည်ကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။
Jos Sanch ကိုပြန်ပြောပါ
အမျိုးသမီး ၄၀ ကိုရှာပါ
နှစ်ခုရှာပါ၊ တခါတရံတွင်တစ်ပတ်တည်းသာသင်တစ်ပတ်လုံးမဖုံးပါ။ !!
မင်္ဂလာပါ၊ နှစ်ပတ်ကြာမှကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းများယားလာပြီးအဖြူရောင်အနာဖေးရလာသည်။ ကျွန်တော်ဆေးကြောသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်လည်းယားယံသလိုခံစားရတယ်၊ သူတို့ကအစစနည်းနည်းအနာစိမ်းနဲ့ထွက်လာပေမဲ့ကျွန်တော်ဆေးကြောတဲ့အခါသူတို့ကငါ့ကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ် ဆီးသွားသည့်အခါမီးလောင်ခြင်းနှင့်ငါ့လိင်တံတွင်အနံ့ဆိုးမရှိခြင်းတစ်ခုတည်းသောအရာ ... သင်ကူညီနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားမည်။
သင်၌ရှိသောအရာကိုမင်းအားဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သောခရင်မ်နှင့်သန့်ရှင်းမှုရှိသော balinitis ဟုခေါ်သည်။
ငါကွန်ဒုံးမရှိဘဲမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပြောသောကြောင့်ပိုးအိမ်တွင်အနီရောင်အစက်အနည်းငယ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၌ယားယံခြင်းများရှိသည်။ ငါအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်သွားတခါကြောင့် kandidiasis အဘို့အအပြုသဘောထွက်လာ။ ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကတည်းကငါ Canestan ဆီမွှေးကိုလျှောက်ထားပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ပျောက်ကွယ်ဖို့ပိုကုန်ကျသည်။ မဆိုထောက်ခံချက်?
ကျွန်မရဲ့နီညိုရောင်အစက်အပြောက်တွေလည်းပျောက်ကုန်ပြီ။ တစ်ပတ်အကြာတွင် Canestan ဆီမွှေးသုံးပြီးလိင်မှုကိစ္စမပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ cunducts မှာအနည်းငယ်ယားခြင်းနှင့်အဆင်မပြေတာကိုသတိထားမိဖို့အဆင်သင့်ပြင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သင်မှန်မည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်နိဂုံးချုပ်ဘိုဘ်ဖြစ်သည်၊ ဘာကြောင့်သင်မပျော်တာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှန်းမသိတာ၊ မျောက်ဂျေရို
သငျသညျ KE ကပြောတယ်အဖြစ်, သူတို့ထွက်သွားဖို့သွားလျှင်, ငါ့သွားဆုံးရှုံးမှုကြောင့်
ဘရိုင်ယန် w ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာငါမှာယားယံခြင်းနှင့်အနီရောင်တွေသာရှိသည်။ glans ငါအနားယူနေပြီ၊ ပုံမှန်အရာအားလုံးရှိတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်
brian w မှပြန်ကြားခြင်း
သင် chamomile ဖြင့်မကြာခဏဆေးကြောပြီး ၇ ရက်ဆက်တိုက် ၇ ရက်အတွက် ၁၂ နာရီလျှင် "doxycycline hyclate" ဆေး ၁ လုံးကိုသောက်ရမည်။
၎င်းကိုဆေးရုံရှိဆရာဝန်တစ် ဦး ကပြခဲ့သည်
သတိထားပါ၊ pus သည်ဆစ်ဖလစ် (သို့မဟုတ်) GONORRHEA ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဒါကစိုထိုင်းဆရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်သင်လိင်တံကိုရေချိုးဆပ်ပြာဖြင့်ဆေးကြောပြီးရေများများနှင့်ဆေးကြောပြီးရင်ရေချိုးပြီးတဲ့အခါ၊ ဆီးသွားပြီးနောက်သင့်ရဲ့လိင်တံကိုခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ဖို့သေချာစေဖို့လိုအပ်တဲ့လိင်တံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ မကြာခဏဆီးသည်ဤမုန့် (Clotrimazole) ကိုသင်မည်သည့်ဆေးဆိုင်တွင်မဆိုဝယ်ယူနိုင်ပြီး ၁၅ ရက်ရေချိုးပြီးနောက်တွင်အသုံးပြုပါ။ သင်၌ရောဂါကူးစက်မှု၊ အနံ့ဆိုးနှင့်နာကျင်မှုအမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အသင်းဝင်တိုးတက်လိမ့်မယ်
ငါကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ အောင်မြင်မှုများ =)
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်သင်လုပ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအရာမှာသင်လုပ်လိုသောအရာအားလုံးကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ ဘယ်တော့မှတစ်ယောက်တည်းနေဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားပါနဲ့၊ Ahem ။ စာအုပ်ဖတ်ပါ၊ ပျော်ဖို့ထွက်ပါသို့မဟုတ်အားကစားတစ်ခုခုလုပ်ပါ။ သင်ရှောင်သင့်သည့်နောက်တစ်ခုမှာလိင်အကြောင်းပြောခြင်းဖြစ်သည်။ စသည်တို့
အလက်ဂျန်းဒရို ရူဇ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းမရှိဘဲမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏အရေပြားသည်အရေပြားအပြင်ဘက်ရှိအနီရောင်ပွိုင့်ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်၎င်းသည်ခြောက်သွေ့။ လက္ခဏာများသို့မဟုတ်လက္ခဏာများမကျန်တော့ပါ။ ရောဂါ, ထို့နောက်ငါရေချိုးထဲကထွက်လာသောအခါ, ငါ့ meatus ငါ့ကိုမူရင်းပုံသဏ္losingာန်ကိုဆုံးရှုံး၏အချက်အထိအလွန်အမင်းစိတ်ဆိုး, ဆိုလိုသည်မှာအလွန်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်လည်းနီဖြစ်လာသည်, ပြီနောက်ဟင်းငါနောက်တဖန်ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းသောကွောငျ့ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့စိုက်ထူမှုကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကုန်ကျစေတယ်။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားလာရင်ငါဟာငါ့ရဲ့မြဲမြံမှုကိုမြန်မြန်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ ငါ့မှာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်။ လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်ငါရပ်တန့်အများအပြားဆင်းအကြာတွင်ငါစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသူတွေကိုသနားသောကြောင့်များစွာသောဆင်းရပ်ရန်ဆင်းခဲ့ရသည်တိုင်အောင် ... .. အခုအခုငါရေချိုးဖို့ထွက်သွားသောအခါငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိမိဖို့အတိတ်၏အမှတ်တရ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာအသုံးပြုရန်ကြိုးစားခြင်း……………… .. ဒါပေမယ့်အသုံးမ ၀ င်ဘူး၊ ငါ ၂၅ နှစ်သာရှိသေးတဲ့အတွက်အရမ်းဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ဒါဟာအကြီးအကျယ်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားပြီးအခုငါစိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊ ဆရာဝန်သုံးယောက်ဆီလည်ပတ်ပြီးပြီ။ သုံးယောက်လုံးကငါ့မှာမတူညီတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ ငါ့လိင်တံကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကမဟုတ်ဘဲစိုက်ထူဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့ဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကူညီပေးပါ
alejandro ruiz သို့ပြန်သွားရန်
Miguel Ramon ဟုသူကပြောသည်
miguel ramon အားပြန်ကြားပါ
သင် Baleitis ခံစားရသည့်ရောဂါကိုကုသရန်အတွက်သင်အား chamomile နှင့်မကြာခဏဆေးကြောပြီး ၇ ရက်ဆက်တိုက်လျှင် ၇ နာရီအတွင်း ၁၂ နာရီတိုင်း "doxycycline hyclate" ၁ ဆေးလုံးကိုသောက်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်သင်၏ပုံသဏ္formationာန်ပျက်ခြင်းနှင့်စိုက်ထူခြင်းအားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
သင်၏ PN ပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးနောက်သင်၏စိုက်ထူမှုသည်အလွန်ပြင်းထန်ပြီးသင့်ကိုနို့စို့စေလိမ့်မည် ။, jaa (သင်ပြနေသည့်ပြက်လုံး) စိတ်မပူပါနဲ့၊ စိတ်မပူပါနဲ့အနာရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်သောရောဂါတစ်ခုမျှသာရှိသည်မဟုတ်ပါ။ ။ ကံကောင်းတယ်
ရောဂါကူးစက်မှုကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်စိုက်ထူခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ခြင်းရပ်တန့်ရန်ဆရာ ၀ န်သို့သွားပါ။ အားလုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ။ ရိုးရှင်းသောရောဂါကူးစက်မှုသည်လိင်တံ၏ကြွက်သားများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ သင်စိတ်ပူပြီးရပ်တန့်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ပြန်ကောင်းလာမည်။ သင့်တွင် ၂၅ နှစ်တာကာလအတွင်းစိုက်ထူခြင်းပြproblemနာရှိနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ မင်္ဂလာပါ
ဖိုရမ်တစ်ခုတွင်ကြိုတင်စီစဉ်မည့်အစားဆရာ ၀ န်သို့သွားရန်သင်တစ်ခါမျှမဖြစ်ခဲ့ဖူးပါ၊ ၎င်းတွင်သူတို့သည်သင့်အားကြိုတင်လေ့လာမှုမပြုလုပ်ဘဲသင့်အားပြောပြသည်။
Mariano franco ဟုသူကပြောသည်
သင်သည်သင်၏လိင်တံပြုတ်ကျပြီးသင် Boob များလာသောလအနည်းငယ်အတွင်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ သင်ကအကန့်အသတ်ဖြင့်သာစကားစပြောမည်၊
Mariano Franco အားပြန်ပြောပါ
ခရစ်တော်ကိုရှာဖွေပါ၊ သူသည်သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်စွဲလမ်းစေသောဆေးဖြစ်သည်။ ဖျက်ဆီးသည်…… ..
alexander jose သို့ပြန်သွားရန်
PEPE PEREA ဟုသူကပြောသည်
PEPE PEREA သို့အကြောင်းပြန်ပါ
pene လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ဘာမှမရှိဘူး၊ လူ၊ မင်းဘာမှားနေတာလဲ ... ... ကြက်ရဲ့လည်ပင်းကိုဆက်နင်းပါ။ ဆန့်ကျင်ဖက်မှာတော့သူကအရမ်းသေးပြီးပါးလွှာတယ်ဆိုရင်ပိုပြီးကြီးထွားလာမယ်၊ ပြီးတော့သူကသင့်ကိုထူပြီးခိုင်မာအောင်လုပ်မယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ဒါကပဲ နံနက်တိုင်း၊ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကြောင့်ငါအရမ်းကြီးတယ်။
pene lopez အားပြန်ပြောပါ
ငါခဏတာရပ်တန့်မသွားဘူးဆိုရင်မင်းကအဲဒါကိုဆွဲနေတုန်းပဲလို့ blowjobs ကိုမပြောပါနဲ့
လိင်ကိုနှစ်သက်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတွေ့ပါ
ဘာမှမမှားဘူး၊ မင်းနောက်လိုက်လိုက်တာငါမှာအသက် ၅၅ နှစ်ရှိပြီးအနှစ် ၂၀ ကျော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်
သင်၏ကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းထက် သာ၍ ကောင်းသောအရာဟူသည် IT ကိုချန်မထားပါနှင့်။
ငါက 14 မှစ။ ငါလုပ်အရှိဆုံးပျော်စရာကောင်းတဲ့ IS မစော်ကားပါဘူး
လက်ရှိငါအသက် ၅၅ နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်ုပ်ကို ပို၍ ကောင်းသည်ဟုခံစားရစေနိုင်သောမိန်းမမရှိ။
KE TENGAS RIKICHICHIMAS သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်း
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အကောင်းဆုံးအရာမှာသင်၏လက်ကိုရိုက်နှက်သောသံတူနှင့်ရိုက်ခြင်း၊ သင်ဘာမှမဖမ်းနိုင်သို့မဟုတ်သင်၏လိင်တံကိုမထိနိုင်စေရန်၊ သင်တို့ထိလျှင်၊
ကောင်းပြီ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမင်းတို့ရဲ့ကြက်ကိုပိုပြီးနို့စို့စေတယ်။ နောက်တစ်ခုမသိဘူး
Juan (လိင်ပညာရှင်) ဟုသူကပြောသည်
တစ် ဦး fuck ဆိုတဲ့နှင့်သန့်ရှင်းသောကိုးကွယ်ရာဖြစ်လာသည်
juan (sexologist) အားပြန်ပြောသည်
..and ဘာလို့လုပ်နေတာကိုရပ်တန့်သင့်တာလဲ။ အဲဒါကိုနာကျင်စေတာ၊ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာလားဒါမှမဟုတ်ပျော်မွေ့နေတာလား? မဟုတ်ရင် .. .. ရပ်တန့်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။
ဘုရားသခင်ကိုရှာပါ။ သူသည်သင့်အားဖျားနာမှုများနှင့်ဆိုးညစ်မှုများမှကင်းဝေးစေလိမ့်မည်။ သူဟာအရာရာကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ဝါသနာပါပြီးအိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းနေဖို့မကြိုးစားနဲ့၊ မင်းရဲ့အခန်းထဲမှာတောင်စာအုပ်တစ်အုပ်တောင်ရှာလို့မရဘူး။
မေးစရာရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၁၅ ရက်ကကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးထိုအရပ်မှကျွန်ုပ်၏လိင်တံနှင့်အဖြူရောင်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ယားယံခြင်း၊ ဘာဖြစ်လိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကိုယူရန်အကြံပြုသနည်း၊ ဆရာဝန်။ ငါအဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ ၂၃ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုစုပ်ပြီးနောက်နေ့တွင်လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းသည်နီလာပြီးကျွန်ုပ်ကိုဆေးကြောပုံမပေါ်သောအဖြူရောင်ရုပ်ရှင်ကားအဖြစ်ထွက်လာသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနီးပါးအနေဖြင့် MASTURBATION ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့သည့်နေ့ရက်ကို ၅ မှ ၆ သို့အထိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယေရှုခရစ်၏ဗဟုသုတအားဖြင့်သာ ကလေးကအခမဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သမ္မာကျမ်းစာကအခမဲ့ပြောလိမ့်မယ်။ မသာစတာဘရိုရှာသည်ဝိညာဉ်ရေးချည်နှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများကိုသိမ်းယူကာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာလျှင်အမေရိကန်ကိုကူညီနိုင်သည့်စာတန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အယ်လ်ကိုဟော၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆင်တူသည်။ ယေရှုကိုရှာသောအခါသင်လွတ်လိမ့်မည်။
Semen ဆိုသည်မှာသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အားအသက်ကိုပေးသည်၊ မပျောက်စေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်အားကစားများစွာပြုလုပ်သောစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဒါကိုစိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒါကပုံမှန်အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်မှာလက်တွဲဖော်မရှိရင်တောင်ပိုဆိုးပါတယ်။ သင်သည်အဖော်သို့မဟုတ်လိင်လုပ်သားကိုမကြာခဏရှာဖွေခြင်းကိုရပ်တန့်လိုပါကမကြာခဏပြုလုပ်ပါက၎င်းကိုလျှော့ချသင့်သည်၊ သို့သော်ပိုမိုစိတ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်အားကစားကစားခြင်း၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ဝေးဝေးနေခြင်းတို့ကြောင့်လုံးဝမစွန့်ပစ်သင့်ပါ။ သင် (ဗီဒီယိုများနှင့် Porn မဂ္ဂဇင်းများ) ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေပြီးသင်ထပ်မံပြုလုပ်သည့်အရာများရှိသော်ငြားလည်းဆက်ကြိုးစားပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအားအင်များ၊ အလိုဆန္ဒများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ အားကစားများမှတဆင့်လျော့ချခြင်းနှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိစုဆောင်းထားသည့်စွမ်းအင်များကိုဖြုန်းတီးရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအကြောင်းရင်း
ဟိုင်း၊ ငါဟိုဆေး။ ငါနားလည်တယ်၊ သူငယ်ချင်း၊ ဒါကစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမင်းကိုဆေးကြောပါ။ အဲဒါကငါ့ရဲ့ဒုစရိုက်နဲ့တူတယ်၊ ငါအထက်တန်းကျောင်းမှာရှိသူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်စဉ်းစားမိတယ်၊ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းအရူး
အချစ်ဆုံး, တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်မနေပါနှင့်။ အချမ်းသာဆုံးသောနေရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်မိန်းမများစွာ၊ ပါးလွှာသော၊ အဆီ၊ အဆင်းလှသော၊ ရုပ်ဆိုးသော၊ သန့်ရှင်းသောမိန်းမများရှိခဲ့ဖူးသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့နောက်ဆုံးပြည်တန်ဆာအဖြစ်ဘုရားသခင်ကဘာကောင်လဲဆိုတာသိတယ် .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့အရေခွံနှင့်ဂလန်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကောင်းတဲ့အချက်ကဘယ်လောက်ယောင်ယောင်ယောင်ယောင်နဲ့ငါ့ကြက်ကကြီးမားတာကြောင့်ငါထလာတဲ့အခါမှာငါဟာပိုပြီးချမ်းသာလာတယ်။ အိုလမ်းဖြင့်သင်ခြေထောက်ပေါ်ကိုလက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါသင်ခမ်းနားထည်ဝါစွာခံစားရလိမ့်မည်။ .. လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းအစ်ကိုအသက်ရှည်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏လူရှုပ်နေသည့်နေ့များအထိထိတ်လန့်နေမည်။
Fidel Pajero အားပြန်ပြောပါ
ဟဲလို၊ ဖရန်စစ်၊ ငါမှာထပ်တူပြproblemနာရှိခဲ့တယ်၊ ငါ ၅ ရက် ၇ ကြိမ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်၊ သင်လုပ်တဲ့အကြိမ်ကိုနည်းနည်းချင်းစီပြီးအောင်မလုပ်သေးဘူး၊ ဒီဆေးထိုးတာကအဆင်ပြေတယ်၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသူတစ် ဦး သည်သင်ကိုယ်တိုင်အားတက်ကြွစွာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါပြင်းထန်စွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုသည်
ကားလို့စ် အင်နရစ် ဟုသူကပြောသည်
ကိုလံဘီယာတွင်အမျိုးသားနှင့်တင်သွင်းသောကုန်ပစ္စည်းများကို penile ကျန်းမာရေးအတွက်ရောင်းချသောကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိသည်။ အနံ့ဆိုးခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ 100% အကြံပြုခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ virtual store ဟာ "Men's Health" လို Facebook ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးသူတို့က ws 3102860240 တွင်အကြံပေးသည်
Carlos Enriquez အားပြန်ပြောပါ
ကိုလံဘီယာတွင်အမျိုးသားများ၏ရင်းနှီးသောforရိယာအတွက်လိမ်းဆေးနှင့်မုန့်အမျိုးမျိုးတို့ကိုရောင်းချသောကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိသည်။ သူတို့က balanitis နဲ့လိင်တံရဲ့အရေပြားရဲ့အခြားရောဂါများကိုကုသပေးတယ်။ 100% အကြံပြုခဲ့သည်။ fb တွင်သူတို့သည်“ အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး” အဖြစ်ပေါ်လာပြီး ws 3102860240 မှအကြံဥာဏ်နှင့်တက်ရောက်သည်
ငါပြaနာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်၊ မနေ့ညကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီး glans တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ တစ်ဝက်ပဲထွက်လာပြီ၊ အခုငါ glans (အကျဆုံးဆုံးnarrowရိယာ) ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နေရာမှာနာကျင်မှုနဲ့ / သို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံ rexona ဆပ်ပြာဖြင့်ဆေးကြောပြီးလျှင်၊ လက်ချောင်းများပေါ်တွင်ဆပ်ပြာကို တင်၍ glans x အလှည့်ကိုပြုလုပ်ပြီး dsp ကိုသုတ်ခြင်း၊ အရေပြားကို၎င်း၏နေရာတွင်ထားလိုက်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုအီးမေးလ်ပြန်ပို့ပါ lean_k-po1994@hotmail.com
ကျွန်တော်တို့ကို ဦး စွာကြည့်ပါ၊ ဖွတ်နိုင်သောအရုပ်များကိုဝယ်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုရပ်လိုက်ပါ။ precos aja အတွက်သင်ဘာဖြစ်သွားသည်ကိုသင်မြင်သည်
ကြည့်ပါ။ rexona ဟာကျွန်တော့်အတွက်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတယ်။ ဒါကမင်းရဲ့ကိစ္စဖြစ်မလားဆိုတာငါမသိပေမယ့်အခြားကံတစ်ခုအတွက်လဲကြိုးစားကြည့်ပါ ဦး
TOLA မင်းဟာပိုကောင်းမယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်၊ မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမသိဘူး၊ မင်းအသက် ၂၀ ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းကခွဲစိတ်ကုသမှုပဲ။ မဟုတ်ရင် .. , ။ , ။ , ။
သင်၏အ ၀ တ်လျှော်စက်များအတွက်အဆင်ပြေသော်လည်းအဆုံးတွင်ရေများများနှင့်ဆေးကြောရန်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါ။ နာကျင်မှုအတွက်ကြောင့်သင်၏အရေခွံ (phimosis) ၏တိကျမှုကြောင့်
PN ၏အသားအရေမှာလည်းအလွန်ကျယ်ဝန်းသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် glans များများတဖြည်းဖြည်းနှင့်ပိုမိုထွက်ပေါ်လာစေရန်သင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောထိုနာကျင်မှုများမရှိခြင်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်တူသော်လည်း PN သည်နူးညံ့သောကြောင့် သင်နာကျင်မှုများသောကြောင့်တစ်ကြိမ်သာပြုလုပ်ပါရက်ပေါင်းများစွာနှင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်သင့်သည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာမလိုပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရုံဖြင့်၎င်းသည်အလွန်ဆန့်နိုင်ကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါသင်သုံးကြိမ်တိုင်တစ်ကြိမ်ကြည့်ရှုသောအခါသင်နာကျင်မှုခံစားရတော့မည်မဟုတ်ပါ
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်ဖတ်နေပြီးကျွန်ုပ်၌ပြaနာတစ်ခုရှိနေသည်မှာအမှန်တရားမှာတစ်ညတည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်တစ်ပတ်အကြာတွင်မီးစတင်လောင်လာခြင်းနှင့်အနီရောင်၏အနီရောင်စများစတင်လာခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်မည်သို့ကုသသင့်သည်ကိုသိလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမှန်တရားကကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ပြmanyနာများစွာကိုဆောင်ကျဉ်းပေးတယ်
မင်္ဂလာပါ ... ဒီမှာအကြံပြုချက်အချို့ရှိပါသည်။
၁- အကယ်၍ သင်သည် Balanitis ကို Mycotic ရောဂါကူးစက်မှု (candidiasisis) နှင့်ထိုးထားပြီးဖြစ်လျှင် Neutral Soap (သို့) Chamomiles များဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်ဆေးကြောပါ၊ ထို့နောက်စက္ကူဖြင့် (NO towels မပါ ၀ င်ပါနှင့်) ခြောက်သွေ့ပြီး ANTIMICO Cream ကိုဘေးဒဏ်သင့်ဒေသများတွင်အသုံးပြုပါ။ (Canesten Cream ရှိနိုင်ပါသည်)
2.- သင်areaရိယာကိုသွေးရည်ကြည်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များစွာမရောက်ရှိဘဲမည်သည့်ဆေးဆိုင်တွင်မဆို ၀ ယ်ထားသောဇီဝကမ္မဆားဖြင့်သန့်ရှင်းနိုင်သည်။
2.- တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံခြင်းကိုအလွဲသုံးစားမပြုပါနှင့်။ (စိတ်ကျေနပ်မှုရရန်အင်အားကိုမသုံးပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်ထိုအရာကိုပျက်ကွက်လျှင်ရေအခြေခံသည့်ချောဆီကိုသုံးပါ။ )
4.- သင်သည် Homeopathy ကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးကို သုံး၍ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သောအရေပြားလိမ်းဆေးများဖြစ်သော Calendula သို့မဟုတ် Llanten ကဲ့သို့သော homeopathic creams များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ (၂ ပတ်ကြာလျှင် ၂ ပတ် + ၁ အပိုရက်သတ္တပတ် ၁-၁ ယားယံခြင်း၊ ဆီးသွားသည့်အခါနာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်အရေဖျားလှီးခြင်းမခံရန်အတွက်အသားတင်ခေါက်ခြင်းကဲ့သို့သောအဓိကလက္ခဏာများကိုပြီးဆုံးပြီးနောက်ကုသပါ။ )
၅.- တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွဲလမ်းသည်ဟုပြောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအရာမှာသူတို့၏လက်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုမီ shamanic နည်းလမ်းနှင့်အညှာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဘာကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းနှင့်ကွင်းဆက်အားဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်များ၏။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်သေစေနိုင်သောအပြစ်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သဘာဝဖြစ်သောကြောင့်၊
Doc ။ Cone
ငါအမှတ်6မေ့လျော့
6.- သကြားဓာတ်ကိုစားသုံးခြင်းကိုရပ်ပါ။ သကြားဓာတ်သည်အရေပြားကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်၊ CANDIDIASIS ကဲ့သို့သောရောဂါများမှစတင်သည်။ သွေးထဲတွင်သကြားများသည်ဤမှိုများကိုပေါင်ပေါင်များပြားခြင်း၊ လိင်တံ၏အခွံများ၊ ပြင်ပမှဖြစ်စေ၊ အတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ ရင်သားနှင့်လက်မောင်းအောက်တွင်လည်းကောင်း၊ ပါးစပ်နှင့်လည်းကောင်းယောနိကိုလိင်အင်္ဂါ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်တွေ့ပြီးလျှင်အချို့သောရောဂါများတွင် Clotrimazole သည်ဝါးဆေးပြားများသို့မဟုတ်ဆေးတောင့်များတွင်သတ်မှတ်သည်။
7.- များသောအားဖြင့်များစွာသောဆရာဝန်များသည်နာမည်ကြီးသော "CORTICOIDES နှင့်အတူရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ရေးဆေးများ" ကိုမကြာခဏညွန်ကြားလေ့ရှိသော်လည်း corticosteroids သည်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများဖြစ်သည့်ယားနာခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အရေပြားအခွံကဲ့သို့သောအရေပြားကိုရောင်ရမ်းခြင်း၊ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၈။ - ထိခိုက်နစ်နာသောဒေသများရှိဖိအားများတွင်မိနစ် ၂၀ ခန့်အသုံးပြုထားသော BUROW ရေဖြင့်ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်ကောင်း၏။
၉.- နောက်ထပ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာအိုင်အိုဒင်းသည်ပူနွေးသောရေတွင် (ပျော်ဝင်နေသောပလပ်စတစ်ဖန်ခွက်တွင် ၂၀ ခွက်) နှင့်ကလိုရင်း ၂ ပေါက်နှင့်အရက်တစ်စက်ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်လိင်တံကိုတစ်မိနစ်မျှစိမ်ပါ၊ ဖြစ်ပျက်မှုများကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်နည်းသောအစက်များကိုကုသပါ။ အိုင်အိုဒင်း၊ အရက်နှင့်ကလိုရင်းတို့သည်မှိုနှင့်ဘက်တီးရီးယားများကိုဖယ်ရှားရာတွင်ထိရောက်ကြောင်းသတိရပါ။
10.- ပြီးတော့လိင်တံနှင့်လိင်အင်္ဂါ၏အပြင်ဘက်အရေခွံပေါ်ရှိအစက်အပြောက်များသည်အဝါရောင်အစက်များဟုအဓိပ်ပါယ်ဖွင့်ဆိုသောသူအားမေးသည်။ သူတို့သည်သာမန်ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့အားလုံးသည်ငါတို့အားပေါ်လာသည်။
BALANITIS ၏လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပုံများ (ကြောက်စရာမလိုပါကရောဂါသည်ကုသမှုရှိသည်)
ဆရာဝန်ကကျွန်တော့်ကို diflucan အကြံပြုတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ သူမှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအများကြီးရှိတယ်လို့ငါဖတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကနာကျင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကအိပ်ရာမဝင်ခင်ညမှာပဲသုံးဖို့ပြောတယ်၊ တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်များစွာအသုံးပြုရန်ပိုကောင်းပါ။ သင်၏အဖြေကိုကျွန်ုပ်စောင့်နေပါသည်
ဒုတိယပုံတွင်ဖော်ပြထားသောရောဂါအတွက်မည်သည့်မုန့်သည်ကောင်းသနည်း။ အဲဒီမှာအဲဒီမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းသာဤအ ami အဖွဲ့ဝင်ငါ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်လာသည်။ ငါဘော်စတွန်မက်ဆာချူးဆက်မှာနေတယ်။ ဒီမှာဘယ်မှာရှာရမလဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ မင်းရဲ့အကူအညီကိုတောင်းပါလိမ့်မယ် .. မင်းရဲ့ Gmail ကိုအမြန်ဆုံးဖြေနိုင် Geuretions@gmail.com ကြေးဇူးတငျစကား
အလွန်ကြီးစွာသောဆရာဝန် !!! SPECTACULAR ငါသည်သင်တို့ကိုငါကျေးဇူးတင်စကားသံသယအားလုံးကိုယူ။ သင်အားကြီးသောပွေ့ဖက်ပေးပို့သည်။ ရမ်မိုင်
oiiiiie အိုမင်းရင့်ရော်သောငါသည်ငါ့၏ glans တွင်ကျောက်စရစ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်၎င်းသည်၎င်းနှင့်အတူလိုက်သော spiniya တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာသို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိသောကြောင့်၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။ del glanse အောက်ပိုင်းမှ granite နှင့်သင်၏ချက်ချင်းပြန်ကြားချက်အတွက်မဆိုအဆင်မပြေပါဘူး
ကြည့်ပါ ... ပြaနာတစ်ခုရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကနေ့စဉ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်။ ငါနုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အခါ ... ပုံမှန်အတိုင်းထက်ပိုပြီးယားယံလာတယ်။ နှင့်ငါ glans အပေါ်ဝက်ခြံရှိသည် ... ငါကဘာလဲဆိုတာမသိရပါဘူးငါ့ကိုနှောင့်အယှက် ... ငါဆရာဝန်တစ် ဦး ကိုသွားချင်ကြဘူး ... ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီ ...
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည်ကကောင်းကင်တမန်ပါ၊ နီရဲတာအကြိမ်ကြိမ်ကြုံခဲ့ရတယ်၊ ပျောက်သွားတာပါပဲဒါပေမယ့်အဲဒါကဆိုးတာလား၊ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေရှိရင်သိချင်ရင်၊ သင့်ချက်ချင်းတုန့်ပြန်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဇွမ် amaro ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မပါဘဲစအိုလိင်ဆက်ဆံပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည် ၄၅ နှစ်ဖြစ်ပြီးပြandနာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ Glans တွေကတော့အဖြူရောင်ဖြစ်နေတာမို့ cream လိုအနီရောင်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ ငါဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရေပြားက crann တွေဖုံးအုပ်ထားတဲ့ငါ့ကို crack လိုက်တယ်။ အဲဒါဘာလဲ၊ ဒါကိုငါဘယ်လိုကုစားရမလဲ။
juan amaro သို့ပြန်သွားရန်
မင်္ဂလာပါ၊ သင်သည်အသီးတွင်သဘာဝသကြားဓာတ်ပါသောသကြားသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသောသကြားကိုရည်ညွှန်းခြင်းရှိ၊ မသိလိုပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆရာ ၀ န်ထံသို့ သွား၍ သူသည်ကျွန်ုပ်အား Falgenase 400, canesten V နှင့် soyaloid ကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်၊ ဤရောဂါကူးစက်မှုအမျိုးအစားအတွက်၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာဆရာဝန်၏အဆိုအရ ၁၀ ရက်ကြာကုသမှုခံယူပြီးနောက်၊ အနာဂါတ်မှာကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပါသလား၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂ ရက်ကုသမှုခံယူပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးနေ့ကဲ့သို့ယားခြင်းမခံစားရတော့သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ prepusis သည်ယိုယွင်းနေပြီးကောင်းစွာခံစားရသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ မနေ့ကကျွန်တော့်ရည်းစားနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေ့မှာကျွန်မဟာကျွန်တော့်ခေါင်းကိုအနီရောင်အစက်အပြောက်တစ်ခုသတိပြုမိခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ မနာပါဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ glans များတွင်ယားယံခြင်းနှင့်ဝက်ခြံအနီများရှိသည်။ ၎င်းသည်မနာကျင်ပါ၊ သို့သော်ယားယံခြင်းကစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
အရိုးမှို၊ ဘက်တီးရီးယားများနှင့် BALANITIS ကိုထုတ်လုပ်သော CANDIDIASIS၊ အလားတူရောဂါနှစ်မျိုးဖြစ်သော်လည်းကုသမှုအမျိုးမျိုးဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာရောဂါအထူးပြုအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ထံသင်သွားရမည်။
သို့သော်အများစုသည်ယင်းကိုအနည်းငယ်ရှက်တတ်ကြသဖြင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော SOLUTIONS နှင့် CANESTEN cream တို့ဖြင့်ဆေးကြောနိုင်ပြီးရလဒ်ကောင်းများရနိုင်သည်။
သတိရပါ၊ ကွန်ဒုံးမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံရန်အချိန်ကောင်းမရှိပါ၊ အကာအကွယ်မပါဘဲလုပ်လျှင်တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ပြုလုပ်ပါ။ နှစ် ဦး စလုံးသည်ရောဂါအခြေအနေပိုများလာခြင်းမရှိဘဲကျန်းမာရေးအခြေအနေတွင်ရှိနေသည်ကိုသတိရပါ။
လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်စိတ်တိုခြင်းသည်သဘာဝဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် NORMAL ဟုမသတ်မှတ်ထားသည့်ပြွန်များကိုသုံးလျှင်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများသည်ဘက်တီးရီးယားပိုးများစွာသယ်ဆောင်ထားခြင်းကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ (လိင်တံသည်သန့်ရှင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ဆီး၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်၎င်းကိုမယုံသော်လည်းဗက်တီးရီးယားနှင့်မှိုတို့၏အဓိကလမ်းကြောင်းကိုသန့်စင်ပေးသဖြင့်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ၂ လီတာအရည်ကိုသောက်သုံးသင့်သည်၊ နွေရာသီတွင် ၄ ရက်ခန့်ခန့်သောက်သုံးရန်အကြံပြုသည်။ ။
သကြားနှင့် ပတ်သက်၍ မူ၎င်းသည်မွှေးသောအသီးများဖြစ်လျှင်၎င်းသည်မတူညီသောရောဂါများမှကျွန်ုပ်တို့အားကာကွယ်ပေးသောကိုယ်ခန္ဓာအားသဘာဝဓါတ်တိုးစေသော်လည်းမသဲကွဲသေးကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သကြား၊ ချိုသောသကြားလုံးများ၊ သကြားလုံးများနှင့်သန့်စင်သောသကြား၊ ကိတ်မုန့်၊ စသည်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်မှိုများမွေးမြူခြင်းကိုသာနှစ်သက်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သံချေးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်တစ်ခုလုံးသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
အစိမ်းရောင်၊ အဖြူရောင်တုပ်၊ ဂလင်းတွင်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အရေခွံ၊ အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်အစက်အပြောက်များနှင့်အတူရှိပါကလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါနှင့်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုသာညစ်ညမ်းစေပြီးရောဂါသည်လုံးဝလုံးဝအဆုံးသတ်တော့မည်မဟုတ်ဘဲပိုမိုဆိုးရွားသွားနိုင်သည်။ မိန်းမတို့သည်ငါတို့ထက်ယောက်ျားများထက်ပialိဇီဝဆေးများရှိသည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၀
ကောင်းသောနံနက်ယံ၌, ငါသည်သင်တို့ကိုပြောပြရန်လိုအပ်ပါတယ်မုန့် glans အတွက်ယားယံခြင်းအဘို့ကောင်းသောသည်ငါ canesten နှင့်ဘာမျှမသုံးခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အားအရေးတကြီးကူညီရန်သင့်ကိုလိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားတွင်အမြှေးပါးရောင်ရောဂါရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရသည်၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ပြင်းထန်သောယားယံခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးသူ၌ယားယံခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁% canesten မုန့်ကို ၀ ယ်သော်လည်း၎င်းသည်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်အကျိုးရှိသည်ကိုမသိရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည် faaa vorrr အတွက် canesten V cream ကိုဝယ်ပါကကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ
ကယ်ရိုလိုင်းနားငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့လို့ရပါတယ် parentroberto1@yahoo.com မင်းဘာဆေးသောက်ခဲ့တာလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့အကူအညီလိုအပ်သနည်းကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်လိင်တံနှင့်အခြားလိင်တံ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအလွန်ယားယံစွာခံစားနေရပြီးကျွန်ုပ်၏ parefa သည်နှုတ်ခမ်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းခံရသည်။ ယောနိသည်ယောနိနှင့်ဆီးအိမ်ကိုလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ပျောက်ကွယ်သွားသောနေ့ရက်များရှိသော်လည်းဆက်သွယ်မှုရှိပြီးနောက်ပြန်လည်သက်တောင့်သက်သာပြန်လာခြင်းကျွန်ုပ်ဘာလဲသို့မဟုတ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်တွန်း
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်မရဲ့အသားလွှာကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြူရောင်အစက်တွေနဲ့အနီရောင်ရှိပြီးကျွန်တော့်အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ထိတွေ့ရင်သူက mebo လို့ခေါ်တဲ့မုန့်နဲ့ fluconazole နဲ့ကုသမှုပေးခဲ့တယ်။ အဆိုပါ glans ဖုံးအုပ်ထားရာအရပ် ... မုန့်ငါ့ကိုအများကြီးမကူညီပါဘူး .. သင်ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုကူညီနိုင်ဘူး
မင်္ဂလာပါ ငါသံသယအချို့နှင့်ပတ်သက်။ တိုင်ပင်ချင်ပါတယ်
လိင်တံ၏ ဦး နှောက်ကိုဆေးကြောရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြီးတိုင်းအချိန်တိုင်းတွင်ခေါင်းလျှော်ရည် (အကယ်၍ ငါ့ရည်းစားကအသုံးပြုသည်) ကိုအသုံးပြုလျှင်ကောင်းပါသည်။
ထိပ်မှာသူတို့ကကြားနေဆပ်ပြာအကြောင်းပြောတဲ့အခါသူတို့အဝတ်လျှော်အဝတ် (အဝိဇ္ဇာစိတ်မကောင်းပါဘူး ... ) အဖြူကိုရည်ညွှန်းသောအခါ, ဘက်တီးရီးယားပိုးဆပ်ပြာလည်းအကြံပြုနိုင်သလဲ
ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်သန့်ရှင်းရေးအတွက်၊ အိုင်အိုဒင်း၊ အရက်နှင့်ကလိုရင်းတို့နှင့်ဆေးကြောနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ အချိန်ကာလတစ်ခုကြောင့် ... အကယ်၍ သင်သည် glans များကိုအရက် (နည်းနည်းအနည်းငယ်) ဖြင့်သာဆေးကြောခြင်းကပညာမဲ့ရာရောက်သည်။ ''
စာမျက်နှာစူပါဖြစ်ပါတယ် ... ဂုဏ်ပြုလွှာ
ah မေ့သွားတယ်၊ အမြဲတမ်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အနေနှင့်၊ ကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးသောအချက်အရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂယက်ရိုက်ခတ်မှု၊ စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနောင်တရခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
အခြားအချက်များလည်းမေးခွန်းတစ်ခုအတွက်တစ် ဦး ချင်းကိုထိခိုက်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအဖြစ် ...
သင့်အားတစ်ခုတည်းသောအရာသည် ၄- ရက်နေ့နှင့်နေ့ရက်တိုင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချုပ်တည်းနိုင်ပါကဤသို့မပြုလုပ်ပါကသင့်အားအသေးအမွှားလေးများမှားစေပါက:::;;; တစ် ဦး ကောင်းချောဆီနှင့်အတူ။
ငါနှစ်ပေါင်း (၂၀) ​​ကျော်ကြာသောကာလနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကာလပတ်လုံး ပိုမို၍ ခက်ခဲသောနေ့ရက်များကိုဖြတ်သန်းပြီးအပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါနှင့်အိုင်အယ်လ်အို ၂ နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ အချိန်တန်တဲ့အခါအစက်အပြောက်များ၊ အနီရောင်အစက်အပြောက်ထွက်လာပြီးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောအနီရောင်အစက်အပြောက်ရှိသောအနီရောင်အစေ့များ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေပါ။ သို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းစေခြင်း၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာနဲ့၊ ဆရာ ၀ န်ဆီကိုသွားခဲ့တယ်။ ငါ ၁၀ ရက်ကွာ quadriderm NF x လျှော့လိုက်တယ်။ အပြောင်းအလဲကိုချက်ချင်းတွေ့တယ်၊ ငါ ၁၅ ရက်အကြာမှာငါကုသမှုကိုပြီးဆုံးသွားတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်လား ဆပ်ပြာနဲ့တစ်နေ့ကို ၂ ကြိမ်ကျွန်မရဲ့ဂလင်းတွေအလုပ်လုပ်တယ်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်သံသယဖြစ်နေဆဲ၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါ .. MACRIL ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ၊ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ပြီးနေ့များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းအဖုအပိန့်များဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကျောဘက်မှကြီးမားသောဝက်ခြံလည်းကျွန်ုပ်၌ဘာရှိသနည်း။ ငါသံသယသောအခါငါအဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သောကြောင့်၊ နောက်တစ်နေ့ကျွန်ုပ်ဆီးသွားသောအခါကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏အရောင်မှာအနီရောင်အစက်အပြောက်များနှင့်အချို့သောအစက်များသည်အရေပြားပေါ်ရှိအစက်အပြောက်များနှင့်အတူရှိနေကြောင်းသတိပြုမိခြင်းဖြစ်သည်။ , ထိုနေ့၌ကျွန်တော်ကွန်ဒုံးကိုသုံးတယ်၊ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်တစ်ခါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးကွန်ဒုံးကိုပြန်သုံးခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တွင်တူညီသောအရာရှိနေသေးသည်။ prepus ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်အနီရောင်လည်းဖြစ်သည်၊ အချို့သောရက်များကပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ အခြားသူများထက်အသည်းမနာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ရေနှင့်ဆပ်ပြာဖြင့်နေ့တိုင်းဆေးကြောပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဇနီး မှလွဲ၍ မည်သူနှင့်မျှဆက်ဆံခြင်းမရှိပါ၊ သူမအဆင်ပြေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤတွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ထားသောအရာသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကိုက်ညီပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ပထမဆုံး ၀ င်ခွင့်ပြုပါ။ ဒီစာမျက်နှာကိုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့များစွာကိုအထောက်အကူပြုသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ပထမဆုံးကျွန်ုပ်သည်ရေယုန်ဟုထင်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်အားမီးလောင်စေသောအနာများရရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အလားတူစာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူသွားခဲ့သည်။ betamethasone ကိုအချိုမှုန့်ပိုများစေတဲ့အတွက် resmet reset ကိုသုံးပြီး reset လုပ်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ငါနောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုမှာသွားပြီး Baleitis လက္ခဏာတွေရှိနေပြီးကတည်းကဆေးပြားနဲ့ထိုးဆေး tabam scarpett, ketorolokaco, simofil, dixil xa သီတင်းပတ်မှာဆေးပေးတယ်။ , ငါ့ glans လက်ဝှေ့သမားနှင့်ငါ့ကိုထိမိသောအခါ, ကလေးဆပိုကြီးကအများကြီးနာကျင်ပေမယ့်ရက်သတ္တပတ်ကုန်လွန်သွားပြီးလုံးဝ deflated, ယခုငါကမီးလောင်သော glans အပြင်ဘက်တွင်အနာရတယ်, သူတို့ကငါ့ကို TEDRADERM အကြံပြု, ငါ့မေးခွန်းဖြစ်လိမ့်မယ် ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်လား ကောင်းပြီ။ ဒီကြီးမားတဲ့အပိုင်းကနေလိင်တံရဲ့ ဦး ခေါင်းကိုနည်းနည်းလေးနာကျင်နေတုန်းပဲ။ ငါသူတို့ကအရေဖျားလှီးခြင်းကိုဖြတ်လိုက်တဲ့နေရာလား။ tabn ငါအရေဖျားလှီးဖို့လိုမလိုသိလိုလား? mmm ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ တကယ်ကိုငါ့ကိုအရမ်းကြောက်ခဲ့တယ်၊ ဒါ့အပြင် DVRL စာမေးပွဲများလည်းလုပ်နိုင်မှာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ရက်
ဒီစာမျက်နှာဘယ်လောက်ကောင်းပါသလဲ၊ ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်တော့်မှာ glans and scrotum မှာအရည်ကြည်ဖုတွေများလာတယ်၊ ငါ့ကိုအရမ်းစိတ်ပူမိတယ်၊ ငါကလိမ်းဆေးများစွာထည့်ပြီးသူတို့ပျောက်သွားတယ်၊ အရိပ်ရပေမယ့်ဒီမနက်မှာကျွန်တော်မခံနိုင်လောက်တဲ့ယားယံမှုရပါတယ်။ ဒီမနက်မှာငါစစ်ဆေးပြီးအရည်ကြည်ဖုတွေထွက်လာတယ်။ ဒါကြောင့်သူကမုန့် (သို့) တစ်ခုခုကိုအကြံပေးတဲ့အတွက်အရမ်းစိုးရိမ်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
candidisis အတွက်ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရှိ၊ မရှိသိလိုသည်။ အရေခွံသည်စိုထိုင်းသောကြောင့် calendula သို့မဟုတ် Plantain ဆီမွှေးကဲ့သို့ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်တွင်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါသလား။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၅ မှ ၄၀ ခန့်ကဆရာ ၀ န်တစ် ဦး သည်ဆာလဖာကဲ့သို့အဝါရောင်အမှုန့်များရရှိပြီးသည်နှင့်၎င်းသည် master formula ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည် glans များအားခြောက်သွေ့စေသောကြောင့်၎င်းသည်ဆီမွှေးများထက်သာလွန်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မင်္ဂလာညနေခင်းပါ ။ ငါ့မှာ Balanitis (သို့) မှိုရှိရင်ငါမသိဘူး။ အသားလွှာရဲ့အနီကသိပ်မနီသေးဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်က glane ပေါ်ကနေဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ၎င်းကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အပေါ်တွင်ထည့်ထားသောခရင်မ်တစ်ခုသည် ergies စားရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အရေခွံ၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများတွင်ယားယံနေပြီး၎င်းကိုထိသောအခါတစ်ခါတစ်ရံသူတို့ကကျွန်ုပ်အားအကြံပေးခြင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါပtookိဇီဝဆေးကိုသောက်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုဖြစ်စေ၊ ကွန်ဒုံးကငါ့ကိုဓာတ်မတည့်စေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ်ငါက burps တွေမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်နေရာချထားနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်။
Q နှုတ်ဖြင့်ဆေးဝါးများကို BALANITIS အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ မည်သည့်ဆေးဝါးမဆို ANTIBIOTIC (သို့) မည်သည့်ဆေးဝါးမဆိုမူးယစ်ဆေးဝါးကိုသုံးနိုင်သည်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ တကယ်တော့အကောင်းဆုံးကတော့အထူးကုဆရာ ၀ န်တစ်ယောက်ဆီသွားဖို့ပါ။ သူကငါတို့ကိုအကူအညီတောင်းမှာသေချာတာပေါ့။ နည်းပညာရှင်တွေကသာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာသိတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်ကတော်တော်လေးဆင်တူတယ်။ ငါကလေးလလောက်အရက်သောက်တတ်တယ်။ အဆက်မပြတ်ကုသနေပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကုသနိုင်သေးဘူး။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းမှိုတွေကစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်။
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းဆရာ ၀ န်။ ငါ glacans မှာအဆင်မပြေဖြစ်တာကြောင့်အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ဆီကိုသင်မရောက်ခဲ့ဖူးဘူးဆိုရင်၊ သင်ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ Caracas ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်။
ဆီးသွားဆရာဝန်ဆီသွားပါ။ အဆိုပါ bullshit နှင့်မိုက်မဲသောဖြတ်တောက်မှုကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ဆီးရောဂါပါရဂူမှာရက်ချိန်းများအတွက်မိသားစုဆရာဝန်ကိုသွားပါ။ ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲဘောင်းဘီကိုတခါတရံမှာငါတို့လို asshole တစ်ခုလိုမျိုး။ သင်၏လက်နာကျင်ပါကသင်သည် glans တွင်ယားယံနေပါကသင်ကငြင်းပါလိမ့်မည်။ JHahahahahahaha ။
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်မှာပြhaveနာရှိပြီးကျွန်ုပ်၌ဘာရှိသလဲဆိုတာမသိပါ။ ဤအကြံပေးမှုအားလုံးကိုဖတ်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပျက်သောအရာသည်မည်သူ့ကိုမျှမဖြစ်ပျက်ကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်အားအဖြေတစ်ခုပေးနိုင်လျှင်၊ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက်ငါဆီးသွားချင်တယ်၊ အဲဒီလိုလုပ်ရင်၊ ဆီးကဆီးလမ်းကြောင်းထဲကနေထွက်လာတယ်။ ဒါကငါ့ကိုယားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ လိင်တံပါးစပ်ဟာအဲဒီမှာသာယားယံပြီးငါနဲ့လုံးဝမတွေ့နိုင်တော့ဘူး မကြာခဏဖြစ်တတ်သော်လည်း၎င်းသည်ဖြစ်တတ်ပြီး၎င်းသည်ယားယံတတ်သည်။ ၎င်းကြောင့်ငါ့ကိုဆီးသွားစေချင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အားပိုမိုယားယံစေသဖြင့်၎င်းသည်အဝေးသို့မရောက်မှီ ၁၀ မိနစ်သို့မဟုတ် ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ကြာသည်။ အချို့သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါအချို့သောအဏုအက်ကွဲသည့်အခါထိုသန္ဓေသားမှထွက်လာသည့်အရာနှင့်ဤကဲ့သို့သောဆီးကိုဖြတ်သန်းသောအခါ၎င်းသည်ယူရစ်အက်စစ်နှင့်ယူရီးယားဆားရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည် (ဂလန်း၏နှုတ်) ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုညှစ်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်သင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီအစက်အပြောက်များသို့မဟုတ်အနီရောင်အစက်အပြောက်များသည် Urethral တူးမြောင်း၏ထွက်ပေါက်ကိုသာယားယံစေသည်။ Urethral ပြွန်သည်ကျွန်ုပ်ကိုထိမိစေသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ဆီးသွားသည့်အခါထိုနေရာကိုအိမ်သာစက္ကူဖြင့်ခြောက်သွေ့အောင်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါwhenရိယာကိုပျက်စီးစေသဖြင့် frenulum အလွန်ဆွဲဆောင်။ Urethral канал၏ပါးစပ်ကိုပိတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ထွက်လာရင်သုတ်ရည်ကကွဲသွားလိမ့်မယ်။ ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြပြီးပြီလားမသိဘူး၊ ငါဆရာဝန်ဆီသွားသင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်တယ်၊ ပြheနာ၏အရင်းအမြစ်ကိုကုသရန်သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်သူတို့ပြောပြနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောသူများကိုကယ်တင်ခြင်းသည်ဆရာဝန်ထံသို့သွားပြီးစာမျက်နှာအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဟဲလို, ငါ့လိုအပ်ချက် crotches အတွက်နီခြင်း၏ပြaboutနာကိုသိရန်ဖြစ်ပါသည်, picason ထုတ်လုပ်သောနှင့်၏သင်တန်းနှင့်အကျိုးဆက်များကိုအတူတူပင်သူ၏အကျိုးဆက်များ, ခြစ် ardeson ထုတ်လုပ်သည်, ငါသိရန်လိုအပ်သည်အရာ, ဒီရောဂါအရေပြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါသည်, ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်သာမကအခွံမာများနှင့်ဝှေးစေ့များတွင်ချုံ့ချဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်အနီရောင်အရင့်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ နာရီများနှင့်အတူမှန်ကန်ခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ခြေထောက်နှစ်ဘက်စလုံးမှထုတ်လုပ်သည်ကိုလည်းမေ့ခဲ့သည်။ မင်းကိုငါ့ကိုထည့်ပြီးချက်ချင်းတုန့်ပြန်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လှိုင်းငါလိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းအောက်မှာအနီရောင်အစက်အချို့ကိုယူ။ ငါကဘာလဲဆိုတာသိလိုတစ်ခါတစ်ရံယားယံခြင်း, သင်ပြောပြနိုင်မလား
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်အရေပြားကဒီဂလင်းကိုဖုံးအုပ်ထားတယ်၊ အိုင်နီကနီလာဖြစ်လာတယ်၊ အိုင်အက်စ်အက်ကွဲခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တွင်ယားယံသော glans ရှိပြီးဆီးသွားသည့်အခါကျွန်ုပ်နာကျင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
ဟယ်လို!!! ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ရာကျွန်ုပ်တွင်ရှိသောအရာသည်အတိအကျမသိသော်လည်းထွက်ပေါ်လာသောအရာများသည်လွန်ခဲ့သော ၁ လခန့်ကဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အဖြူရောင်ပစ္စည်းတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည် SMEGMA သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနေ့တိုင်းကောင်းစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာဆေးကြောသည်။ ယခုပစ္စည်းဖြူကိုထုတ်ယူသောအခါလိင်တံ၏ ဦး ခေါင်း၏အောက်ပိုင်းသည်အနီရောင်ဖြစ်လာပြီးတစ်ခါတစ်ရံဆေးကြောသောအခါအနည်းငယ်ယားခြင်းနှင့်တူသည်ဟုခံစားရသော်လည်းခဏကြာသွားသည်။ .. ငါဘာလုပ်ရမလဲ၊ ကျွန်ုပ်မလိင်အင်္ဂါနီဖြစ်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်ခေါင်းတွင်theရိယာသည်ဆေးကြောသောအခါတွင်နာကျင်သော်လည်း၊ ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပြီး၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ အကူအညီပေးပါ။ ကျွန်ုပ်ကြောက်သည်။
အက်ကြောင်းများအတွက် hypoglos ကိုသုံးသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုယားခြင်း၊ ကုတ်ခြင်းများကိုနာခြင်း၊ မီးခိုးထွက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံနာကျင်ခြင်းကိုဆေးကြောပြီးအနီရောင်ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်မှာဘာရှိလဲသိချင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၌အနီရောင်ဝက်ခြံအချို့နှင့်အခြားသူများ၏အရေပြားအရောင်မှာအလွန်သေးငယ်သော်လည်း၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားအစားအစာများစွာပေးသည်။ ဒါပေမယ့်ငါသူတို့ကိုမသုံးတော့ဘူး၊ တစ်ခါတစ်လေပြန်လာတယ်။ ပါးစပ်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ရတယ်။ ငါဂေါ်လီလုံးထဲမှာအဖြူရောင်အစက်တွေပြတယ်။ ဟုတ်တယ်ဆရာဝန်က Streptococcus လို့ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမလေ့လာရသေးဘူးငါဆေးယူလိုက်တယ်။ , ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့လိင်တံဟာအစာအနည်းငယ်စားပြီးဆက်လက်စားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ကျွန်တော်ဟာအခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့သွားနေပြီး၊ ကျွန်မမှာလိင်ဆက်ဆံပါတယ်။ ပြproblemနာကသူတို့ပြန်စားတာ၊ လည်ချောင်းထဲကပြားတွေ = = ငါအရမ်းစိတ်ပူမိတယ်၊
ဘာဖြစ်နိုင်လဲ ??? ကျွန်တော်အီးမေးလ်ထားခဲ့ပါ elramis16@yahoo.es
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အနီရောင်ရှိပြီးယားယံနိုင်သည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်နိုင်ပါသနည်း။ ပြီးတော့ဘယ်ကောင်းကျိုးကိုသုံးချင်ပါသလဲ။ ဘယ်ကျေနပ်မှုရှိပါသလဲ။ ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအဖြေကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၂ လခန့်ကကျွန်ုပ်ဆေးကြောသောအခါလိင်တံနီခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းကိုသတိပြုမိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏အရေပြားကိုအပြည့်အ ၀ ခြောက်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအကြေးခွံအနီဖြစ်စေသည်သို့မဟုတ်သိသာစွာလောင်ကျွမ်းသည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသလား။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် canesten vo ကဲ့သို့သောအခြားဆေးတစ်လက်ကိုလိုရင်းနှင့်အိုင်အိုဒင်းဖြင့်သုံးနိုင်သည်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ချက်ချင်းတုန့်ပြန်ရန်မျှော်လင့်ပြီးသင်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သည်။
OLA BUENAS.LES ငါပြPROနာကိုပြောပြသည်ငါဟာကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့်ငါနောက်နေ့ရက်အကြာမှာအနီရောင်အစက်အပြောက်အချို့ကိုရေခဲမုန့်ပေါ်တွင်ငါဖူးမြင်ဖူးတဲ့အဖြူရောင် MOCHIE ကဲ့သို့ပင်ဂလိုဘယ်လ်သမားများရှိသည်။ အိုင်တီသုံးရက်ကြာ၏သုံးရက်မြောက်နေ့ ALCAVO ငါအင်ဂျင်နီယာများရှိသည်! (ဒီဟာကိုမမြင်ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး) ပြီးတော့အိုင်တီကငါ့ကို DOCTOR ဆီကိုသွားဖို့အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းစေခဲ့တယ်။ တောင်းဖို့တောင်းခံတယ်။ ဘရိတ်ကိုငါဖွင့်လိုက်တာနဲ့ငါက COCOON ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာငါအများကြီးထိခိုက်သွားတယ်။ !! KE ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား ??? ကျေးဇူးတင်ပါသည်!!
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၂ လခန့်ကကျွန်ုပ်၏လိင်တံတွင်ယားယံနေကြောင်းသတိပြုမိပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံ၏သရဖူပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အဖြူရောင်အဖုများရှိနေပြီးအချို့သည်ကွဲထွက်လာပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏အရေပြားထလာသည်၊ အကယ်၍ သင်သည် resistol ကိုသင့်လက်ထဲမှထုတ်ယူလိုက်သကဲ့သို့၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားဘာပြောရမည်ကိုသိလျှင်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ မဟုတ်ဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရက်အနည်းငယ်လောက်ကိုင်ထားသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကြောင့် ၂၅ နှစ်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆီးသွားသည့်အခါနှင့်ကျွန်ုပ်ဆီးဆီးကျိတ်၌ရှိသောလိင်တံသည်နာကျင်ပါသည်။ ဂျက်လေယာဉ်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ငါလိင်တံကိုအနည်းငယ်နှိပ်ပါ၊ သို့မှသာ Urethra တွင်ကျန်သောအရာများထွက်လာသည်။ pus ရ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုထိလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အနာပေါက်သောအခါ၌နာကျင်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ urethra လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းအောက်၌စတင်ပြီးအဆုံးသတ်သည်။ ငါ့ကိုဆရာဝန်များကငါ့ကိုထောင်နှင့်ချီသောလေ့လာမှုများအကြောင်းပို့ပေးသောကြောင့်သူတို့ကမည်သည့်ပြproblemနာမျှမတွေ့သောကြောင့်သင်သောက်ရန်တစ်ခုခုပြောနိုင်သလား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
PUS သည် PN တွင်ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းနှင့်ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းရောဂါ (STD) မှကူးစက်နိုင်သည်။ သင်သည်ဘေးဥပဒ်ကိုသေစေရန် ၁ သန်းဘီလီယံအထိ PENISILIN ကိုယူရန်သတိထားပါ။ တစ် ဦး UROLOGIST နှင့်အတူတိုင်ပင်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ယားယံခြင်းနှင့်ဤအရာအလုံးစုံကိုမိန်းကလေးတစ် ဦး မှရရှိခြင်းရှိမရှိသိလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်မှာဘာလို့တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်မရှိတာလဲ။ ပြီးတော့ငါမှာကြွက်နို့လည်းရှိတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ငါဆံပင်ရွှေရောင်အနားပတ်ပတ်လည်မှာပြaနာရှိနေတယ်။ ငါအချို့ကျောက်ခဲများကဲ့သို့ထွက်လာပေမယ့်အောက်ဘက်ခြမ်းရှိ ligazon တွင်အချို့သောအဖြူရောင်ကျောက်ခဲများကဲ့သို့တစ်ဖက်တွင်သေးငယ်သည့် granites ၂ ခုရှိသည်။ ဒါပေမယ့် Balano မှာလည်းငါအကြာကြီးအနာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အရမ်းယားလွန်းလို့ဆရာ ၀ န်ဆီကိုသွားခဲ့တယ်။ သူကမှိုပဲလို့တွေးတောခဲ့ပေမယ့်ယားယံထွက်လာတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာမသိဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ စပိန်နိုင်ငံမှစာရေးနေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ပြaနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာပြောပြပါ။ ကျွန်တော့်အသားကအရမ်းခြောက်သွေ့ပြီးအက်ကွဲပြီးမကြာခဏယားယံတတ်ပါတယ်။ အဆိုပါလှုပ်ထိုကဲ့သို့သော glans ထုတ်ယူဖို့အရေပြားကိုဖယ်ရှားသည့်အခါတစ်ခုခုနာကျင်စေသော။ ဒီareaရိယာကိုဘယ်လိုရေဓာတ်ဖြည့်သွင်းပြီး၊ သင့်ရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ။ ငါက ၁၄ နှစ်ပဲ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၌နာကျင်မှုကိုသတိပြုမိသည် (မီးလောင်ခြင်းနှင့်ဖရန့်လမ်နမ်ားအောက်ရှိ)ရိယာ၌) ကျွန်ုပ်တို့၌အက်တမ်တစ်ရှူးများရှိသည်။ ငါကဘာလဲဆိုတာငါသိ၏ရန်လိုအပ်သည်, ငါမြင့်တက်ရရန်ရှိသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် frenulum နှင့်အောက်ဘက် glans ၏အောက်ပိုင်းများတွင်လောင်ကျွမ်းစေသည်။ ကျွန်မရဲ့ဂလင်းတွေမှာအရေးအကြောင်းတွေ၊ ထိုးတွေ၊ သူတို့ခေါ်ဆိုသမျှတွေရှိတယ်ဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ၎င်းကိုကုသရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပြproblemနာနည်းနည်းရှိတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်ကလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်၊ ဒီနေ့မှာငါတို့ဟာအဖြူရောင်အစက်အပြောက်တွေ၊ အနီရောင်နဲ့ယားယံခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ အသားတင် အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းသည်နှုတ်ခမ်းများနှင့်အင်္ဂါဇာတ်နံရံများတွင်အနီရောင်နှင့်အစက်အပြောက်များရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အကူအညီလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်မကြာမီကျွန်ုပ်တို့သည်ကြောက်လန့်နေကြသည်
အသင်းအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာဘာလဲ။ ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလောက်မခံနိုင်ဘူးလဲ။ Pliz ခင်ဗျားငါ့ကိုကူညီကြည့်လို့ရပြီ
ငါအံ့ truth စရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားရှိတယ်၊ ငါစိုးရိမ်တယ်၊ လိင်မဆက်ဆံဘူး
မင်္ဂလာပါ ... ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်များသည်အလွန်နာကျင်လာပြီးအစွန်း၌အနီရောင်အဖုသေးသေးလေးကိုသတိပြုမိသည်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာ ၀ န်ဆီကိုသွားခဲ့တယ်။ ငါက ၁၅ နှစ်အရွယ်၊ အချိန်ကနှစ် ၂၀ ရှိပြီ၊ အခုအသက် ၂၀ ရှိပြီဆိုတော့ကူးစက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူကသူကဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ် အဆိုပါ glans အတွက်ရောဂါကူးစက်ခဲ့, ဒါကြောင့်သူကငါ့ကိုငါ့ကိုဆေးပြား, ပantibိဇီဝဆေးပေးပို့ခဲ့သည်။ နှစ်ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ငါပျောက်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ငါအရမ်းအုန်းအုန်းနေတုန်းပဲ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားပြီးသူကငါ့မှာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ၎င်းသည်နောက်တစ်ကြိမ်နာကျင်မှုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဆရာ ၀ န်ထံသို့ထပ်မံသွားခဲ့ပြီးသူတို့သည်ဆီးစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တွင်ရောဂါပိုးမ ၀ င်ပါ။ သူသည်ရောဂါကူးစက်ခြင်းကိုပြင်ပရှိကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ၅ ရက်အကြာမှာငါပြန်လာပြီးသူမကသူမရဲ့ပိုကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်၊ ပြနာကဒီဟာကလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာကိုငါမမြင်တဲ့အတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါတိုင်းပိုပြီးနာကျင်စေတယ်။ ဆရာဝန်ဆီပြန်သွားဖို့ဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်ဆီပြန်မသွားမချင်းဒီမုန့်ကိုဆက်ပြီးဆက်ရမလားမသိဘူး၊ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးမှာမဆိုငါ၌ STD ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ရှိ၍ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာသူတို့ကငါ့ကိုရလဒ်ပေးလိမ့်မယ်၊ ဒီပြproblemနာ။ အထူးသဖြင့်ဒီနာကျင်မှုကြောင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကူးစက်ခံရခြင်းကိုငါကြောက်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုတစ်ခုခုပေးရင်ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာဝန်ကမစွမ်းနိုင်သေးဘူး။ သူကငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့ဆေးပေးတယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေကငါ့ကိုဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေမရှိပဲပို့တာပဲ။ ငါမှာနောက်ထပ်အချက်အလက်ရှိတယ်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီငါ၌လိင်တံ၌ရောင်နေသည့်ဆံပင်ရှိခဲ့ပြီး၎င်းအားငါဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာသည်ကူးစက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ sapphire_1989@hotmail.es
mycosis ခံစားရပြီးနောက် glans ၏အရေပြားသည်တစ်သက်တာလုံးတွယ်ကပ်နေသလား။ Glans အရေပြား၏ sensitivity ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်ပါသလား
အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်ဟာအချိန်အတော်ကြာပြproblemsနာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်၊ ငါကလမိုင်ဒီးယားရောဂါခံစားခဲ့ရပြီးဆရာဝန်အကြံပြုထားတဲ့ဆေးဝါးနဲ့ငါ့ကိုကုသခဲ့တယ်။ အသစ်ယဉ်ကျေးမှုများငါ့ကိုအပျက်သဘောဆောင်သော။ ဆီးနှင့်အားလုံးကောင်းသော။ သို့သော်အချက်မှာကျွန်ုပ်သည်အဆင်မပြေမှုရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ လိင်တံ၏အစွန်အဖျား၌တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးနောက်အနီရောင်ဖြစ်လာပြီး၊ ယားခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်နာကျင်ခြင်း၊ ငါပင်အဆင်မပြေခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ငါဆရာဝန်ကိုသွားတုန်းကသူကငါ့မှာဘာမှမရှိဘူး၊ ပုံမှန်ပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကမဟုတ်ဘူး၊ သူကငါ့ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​ဒါကငါ့ကိုယားတာ၊ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား?
မင်္ဂလာပါ .. ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ကွန်ဒုံးမပါဘဲလိင်ဆက်ဆံသည်။ သူမ cystitis ရှိခြင်းကိုခံစားနေရသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကျွန်ုပ်၏ glans များတွင်အနီကွက်များနှင့်ခြောက်သွေ့သောအရေပြားရှိအရောင်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ယားယံခြင်းသို့မဟုတ်နာကျင်ခြင်းမရှိပါ။ Banalitis သည်ဤရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီသလား၊ ကွန်ဒုံးနဲ့လိင်ဆက်ဆံလို့ရမလား။
တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်ရေကန်သို့သွားပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်နီလာပြီးရေချိုးလိုက်သောအခါမီးပြင်းထန်လာသည်။ ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်၎င်းသည်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုမကြာခဏမပြုလုပ်သော်လည်း၎င်းသည် ၎င်းသည်လောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်မည်သည့်ဆေးကိုသုံးနိုင်သည်ကိုသိလိုပါကသို့မဟုတ်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်နှင့်အတူရှိပါကမည်သည့်ဆရာဝန်နှင့်သွားရမလဲကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးပါ။
Puerto Mont ချီလီ၊ FONASA မှရူပဗေဒပညာရှင်များ (ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒပညာရှင်များ) WORALL CALLAMPA - ဒီဆိုးရွားတဲ့ဟန်ဂေရီ၊ သူတို့မှာအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ဘဲသင့်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ကသင့်ကိုစီမံတယ်၊ မင်း… ပြီးတော့သူတို့ကသင့်ကိုအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ဆီပို့လိုက်တယ်။ AND DERMATOLOGIST ၏ PEGA သည် UROLOGIST ၏တူညီသောအရာဖြစ်သည်။
ငါ (HOSPITAL DE LOS ANDES) … PICHIPELLUCO သင့်ကိုအစေခံမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ယောနိသည်ယားခြင်း၊ အပူလောင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ကြည့်ပြီးအနီရောင်ရှိသည်၊ ၎င်းသည်ဘာဖြစ်နိုင်ပါသနည်း။ ဒေါက်တာဆဲလီရဲ့နာမည်ကအလန့်တကြားဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီဟာကထူးခြားမှုမရှိဘူး။ ငါ panty liners တွေ ၀ တ်တယ်။ သူတို့မှာရေမွှေးရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဒါကဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ငါ့ကိုပြောတယ်၊ သေချာမသိဘူး၊ ငါလည်းလိင်ဆက်ဆံတယ်၊
ကောင်းပြီ၊ ရက်သတ္တသုံးပတ်လောက်ကြာမှလိင်အင်္ဂါကြီးမှာဘောလုံးအချို့ရတယ်။ transvestite ကကျွန်မကိုပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတယ်။ (ငါအရက်မူးတယ်) ။ ဒါကနှစ်ရက်၊ သုံးရက်အကြာမှာပေါ်လာတယ်။ ငါ့ကိုနည်းနည်းကိုက်တယ်၊ သို့မဟုတ်သုံးကြိမ်နှင့်မကြာသေးမီကငါဒီစတင်ကတည်းကနောက်ပိုင်းတွင်ငါဆိုလိုတာကအနီရောင်အစက်အပြောက်တွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကဒါကိုဆပ်ပြာနဲ့ဆေးကြောပြီးခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပေးလို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဖတ်လိုက်တာကမှိုဖြစ်တယ် ရောဂါကူးစက်ခံရတာဒါကြောင့်ငါဆေးကြောပြီးတဲ့အခါမှာငါဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူး။ ငါမကျန်တော့ပေမယ့်သူတို့ပျောက်ကင်းသွားပြီ (ငါ့ကိုကိုက်တာအကြိမ်အနည်းငယ်မျက်စိကအရမ်းနူးညံ့တယ်၊ ခြစ်တယ်) ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ငါအ ah နှင့်အခြားအရာနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုအနီရောင်အစက်အပြောက်အတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အနည်းငယ်အစက်ဖြူသော !! ပထမဆုံးနေ့ရက်များသည်အစက်အပြောက်များတ ၀ က်ထွက်နေသော်လည်းသေးငယ်သောအစက်များနှင့်တူသည်။ ထိုအခါငါလိင်မဆက်ဆံသင့်နေသေးတယ်! သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (၄) ကြိမ်လုပ်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တွင်မလိုအပ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မကြာခင်အဖြေရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Jose Alfredo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ တောင်းပန်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏သံသယသည်အရာအားလုံးနှင့်ပတ်သက်သည်၊ ခြားနားချက်မှာကျွန်ုပ်သည်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုထံသို့သွားခြင်း၊ သူသည်ကျွန်ုပ်အားအကြိမ်ကြိမ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုရန်၊ အရာအားလုံးကောင်းမွန်စွာသွားလာနိုင်ကြောင်း၊ သူသည်ကျွန်ုပ်သောက်ခဲ့သောဆေးတောင့်အချို့ကိုပေးခဲ့သည် (cephalexin) ၁ ဝ ၁၀ ရက်အတွက် ၁ နာရီ ၁၂ နာရီတိုင်းမှာငါ့ရဲ့အနီရောင်အနီရောင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ် (ဒီစာမျက်နှာမှာတွေ့ရတဲ့ပထမပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း၊ အနီရောင်ဝက်ခြံတွေနဲ့ glans ထဲမှာလောင်ကျွမ်းတဲ့မီးပုံငယ်လေးတွေဆက်ဖြစ်နေတာကိုငါသံသယရှိနေတယ်။ 1) % cream canesten, အခြားအဘယ်အရာများကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မည်နည်း။ ဆေးတောင့်ကိုထပ်မံယူရန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလမ်းပြပေးပြီးဆေး၊ လိမ်းဆေးသို့မဟုတ်အခြားအထောက်အကူပြုဆေးဝါးများ၏အမည်များကိုကျွန်ုပ်အားပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Jose alfredo ကိုပြန်သွားပါ
မစ္စတာ Escalante ဟုသူကပြောသည်
နင်ဘယ်လိုနေလဲငါအသက် ၃၄ နှစ်ရှိပြီ၊ ငါဘယ်တော့မှလိင်ဆက်ဆံတာမရှိဘူး၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်အမြဲတမ်းတစ်ကိုယ်ရည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့တယ်၊ တစ်နှစ်လောက်ကြာအောင်သန္ဓေတည်ခြင်းကြောင့်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ ၇ လလောက်တုန်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးမီးလောင်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါနာကျင်မှုနဲ့သုတ်သင်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ငါ၌အဝတ်အချည်းစည်းရှိခဲ့သကဲ့သို့, 34 သွေးဆဲလ်သေးထွက်လာနှင့်အခြားဘာမျှမ, ငါကြောက်ခဲ့သည်, ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုထံသို့သွား။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေကြောင်းသူ့ကိုမပြောခဲ့ပါသူကိုသူကငါ့ကိုစစ်ဆေး ငါ့ကိုမထိဘဲသူသည်ငါ့ကို prostatitis ဖြင့်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်, သူသည်ငါ့ကို migtasol, macrodantin နှင့် prosgut သတ်မှတ်သည်ယနေ့ငါအဆင်မပြေနှင့်အတူဆက်လက်ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အတူဆက်လက်ငါဒေါက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ငါသူ့ကိုအားလုံးကိုပြောပြသည်သူသည်ငါ့ကို urethritis နှင့်အတူရောဂါပြီးတော့ ပလပ်စတစ် banalitis, ငါ့ကိုအဆုံးမဲ့အရေအတွက်နှင့် azowintominol resetting သူကငါ့အဝလွန်ခြင်းကြောင့်သူသည်ဤပြproblemနာကိုလည်းဆောင်ခဲ့တော်မူကြောင်းကို၎င်း, ငါလိင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမဟုတ်ဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရန်နှင့်အရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်, ငါ့ကိုယ်ငါ masturbation မဟုတ်, အရေးတကြီးကပြောပါတယ် ပြည်တွင်းစိတ်ဒဏ်ရာ။ ငါသည်သင်တို့၏မှတ်ချက်များကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မစ္စတာ Escalante မှတုံ့ပြန်ပါ
ဆီလီကွန်အင်္ဂါဇာတ်ကိုဝယ်ယူပြီး VIBRATOR + သင့်ရဲ့ဂလန်းကိုမတော်မတရားပြုပြီးသင်၏လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်များကိုမွေ့လျော်ပါစေ။
ငါလိင်ကစားစရာများကိုအသုံးပြပါ၊ သူတို့သည်ပျော်စရာကောင်းပြီးအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်အားသင့်အားအကြံပေးလိုသည့်အရွယ်အစားနှင့်အရည်အချင်းများ၊ DEmmmmmmmmmmmm ,,mmmmmmmmmm
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၌ယားခြင်းကြောင့်ခံစားခဲ့ရသည်ကိုပြောပြပါ။ ယခုခေတ်တွင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုလောင်ကျွမ်းနေသော ဦး နှောက်များသည် ဦး ရေပြားနားရွက်လည်ပင်းလက်မောင်း ဦး ချိုကျွန်ုပ်လက်သို့ရောက်ခဲ့ဖူးသည့်ဆရာဝန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်ုပ်လာရောက်ခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်ုပ်ကုသမှုအတွက်ကံမကောင်းသောမရေမတွက်နိုင်သောဆေးဝါးများကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ မင်းရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံနှင့် ပတ်သက်၍ ခြောက်လပြmonthsနာရှိသည်။ ငါလယ်ယာလုပ်တဲ့အချိန်ကသုံးရက်လောက်ကြာတယ်။ ဒါပေမဲ့အဝတ်အစားတစ်ထည်လောက်ပဲရတယ်၊ ရေချိုးပြီးတဲ့အခါမှာ ၀ တ်ထားတယ်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်မရဲ့လိင်တံစတင်လောင်ကျွမ်းပြီးနီလာသွားတယ်။ ငါနောက်ပိုင်းမှာယားယံခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးငါအနီရောင်ရရှိရန်နှင့်ငါ့ခေါင်းတစ်ခြမ်းတွင်အနီရောင်အခိုးအငွေ့အချို့ကိုငါ ၁% ထပ်မံအသုံးပြုခဲ့သည်။ အစေ့များနှင့်အနီရောင်များကိုဖယ်ရှားသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုကိုက်နေပါသည်။ ဘာကိုအသုံးပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ
ငါယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့ငါပြီးသွားတဲ့အခါသူ၌လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းသည်အနီရောင်နှင့်လိင်တံ၏ရိုးတံတွင်အရက်ဆိုင်ငယ်နှစ်ချောင်းရှိသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပျိုစင်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကွန်ဒုံးကျိုးသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်မိသည်။
CHANCRO ဆိုတာမင်းတို့ FUCKED လား CACHERAAA က NORIR ကိုသွားမယ် ။;; !!!!!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဂလန်းများဘာကြောင့်ယားခြင်းနှင့်အစာအာဟာရအနံ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုသိချင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံ ၂ ခုဟာအရက်ဆိုင် ၂ ခုလိုပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် ၁၄ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံ၏ပါးစပ်ဖျား၌ပျားများရှိပါသည်။ သူတို့က“ Masturbate” ပြီးနောက်ပေါ်လာပါသည်။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နာရီအနည်းငယ်ကရေကိုပြန်ယူပြီးစမ်းကြည့်ပြီးငါ့မှာဝက်ခြံတွေရှိတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါ့ဂလန်း။ ငါဒီ Balanitis နှင့် Candida Albicans ကိုစလေ့လာပြီးဖတ်ခဲ့တယ်။ ငါတော်တော်လေးစိတ်ပူမိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်ကအရေပြားကအတွင်းပိုင်းမှာပဲနီတယ်၊ Urologist မှသောက်ရန်သို့မဟုတ်သွားရန်တစ်ခုခုကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Atte: oc-ta-vio@hotmail.com ငါမင်းကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ် ငါမျှော်လင့်ပါတယ်ငါ့ကိုကူညီ။
Olle ။ ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မကုသဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ
ဟေ့ငါရေချိုးတာနဲ့ငါ့မှာဝက်ခြံတွေလည်းပြင်းထန်တဲ့အနံ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုပဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ပြီးတော့မင်းကိုပြောရင်ဒါကငါ့ကိုကုပေးတယ်
ကျွန်တော်ကွန်ဒုံးမပါဘဲအမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အနိမ့်အရေခွံဟာနီလာတယ်။ အက်ကွဲတာ၊ အက်တာတွေဖြစ်ပြီးသူကဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ hurologist ကိုသွားတယ်။ သူသည် pomadilla ကိုသာအကြာတွင်သာသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကအခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်စိတ်သက်သာရာရခဲ့သည်။ ထပ်တူဖြစ်ပျက်ပြန်သည်၊ အနီရောင်နှင့်အက်ကွဲပြီးနောက်၊ ငါ့ urethra or duct နာကျင်မှု၊
ငါ balant မှာအစက်အပြောက်နှင့်အရည်ကြည်ဖုများနှင့်အတူပြaနာတစ်ခုရှိခဲ့ပေမယ့်ငါ့ဆရာဝန်ကသူတို့ကိုယခုပျောက်ကွယ်သွားသည်အခြား balantitis ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ balantitis များအတွက်ကုသမှုကိုသိပါစေ, ငါထို့နောက်ငါ glans ၏အရေပြားပေါ်မှာမဲပေးယခုငါရှိသည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံလျှင်သူသည်အနီရောင်ဖြစ်လာပြီးယားယံခြင်းစတင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤကုသမှုလိုအပ်သည်မှာ၎င်းသည် balantitis ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာပါသည်။ သူတို့သည်တူညီသောလက္ခဏာများဖြစ်သောကြောင့် သူတို့မကြာခင်ကျွန်တော့်ကိုဖြေပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တွင်ထိုရောဂါလက္ခဏာများရှိသည်၊ ယားယံခြင်းများစွာရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်လျှောသော်လည်းအချို့သည်ငါလိင်ဆက်ဆံသောအခါနီလာခြင်း၊ balantitis ၏ကုသမှုလိုအပ်သည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားအမြန်ဆုံးဖြေဆိုရန်ကျွန်ုပ်အားအချို့ကုသမှုခံယူခဲ့သည် လိင်တံအပေါ်အစက်အပြောက်များနှင့်အလင်းရောင်ပြင်းထန်သောအရည်များဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဆရာဝန်ကသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ ယခုငါလိင်ဆက်ဆံသောအခါဤစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်နီခြင်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤကုသမှုကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Lauro -21-Mar-10 မှရေးသားခဲ့သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆရာ ၀ န်သို့မဟုတ်ဆရာ ၀ န်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စအိုသည်အလွန်အမင်းယားယံနေပြီးဆိုးဝါးသောအနံ့များကိုခံစားမိသည်။ ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်သာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံယားယံခြင်းများဖြစ်ပွားခြင်းသည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုမသိပါ။ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောရောဂါနှင့်အဘယ်သို့သောအကြောင်းကြောင့်ငါသိသင့်သည်၊ မည်သည်ကိုအသုံးပြုသင့်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်နှလုံးသားထဲ မှနေ၍ တန်ဖိုးထားပါမည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ငါအလွန်တရာဝမ်းနည်းနေတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်တုန်းက penile ပြွန်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ငါ penile ပြွန်ထဲမှာဆီးသွားတယ်။ ဒါကမရှိဘူး။ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။
ငါလိင်တံထဲမှာယားတာလောင်နေတယ်၊ ​​သူတို့ကသေးငယ်တဲ့ပူဖောင်းလေးတွေလိုထွက်လာတယ်၊ သူတို့ဘယ်လိုပေါက်ကွဲခဲ့တယ်၊ သူတို့တွေအရမ်းယားတယ်။ ငါ့အ ၀ တ်တွေလည်းနာတယ်။ အမြန်အကူအညီလိုကောင်းလိုလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Pedro osmany ဟုသူကပြောသည်
အမှန်မှာ Candida albicans (monilia) မှဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်မှုများသည် balanitis ၏မကြာခဏအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသားဓာတ်သည်ရှည်လျားပြီးအသားဓာတ်ကိုတဆေးမှို၏ကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုသောကြောင့်အခြေအနေသည်ပိုမိုပြင်းထန်သည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်ယောက်ျားများကိုကုသရန်အရေးကြီးသည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီနှင့်အပြီးအပိုင်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအားအကြံပြုရန်အကြံပြုသည်။ ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်ဖြေရှင်းချက်ဖြင့်သုတ်ခြင်းသည်ယားယံခြင်းနှင့်ဒေသတွင်းယားယံခြင်းများကိုသက်သာစေသည်။ ဆီးချိုရောဂါသို့မဟုတ်ခုခံအားစနစ်ကိုမမှန်မကန်ဖြစ်စေသည့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်တစ်ခုမှာဖြစ်စေ၊ ဤသည်ဖြစ်စေအခြားနေရာတွင်ဖြစ်စေခံနိုင်ရည်ရှိသော moniliasis (သို့) ဇွဲရှိခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
pedro osmany သို့ပြန်သွားပါ
…ဆီးသွားသည့်အခါလောင်ကျွမ်းသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည် Urethritis မျက်မှောက်၌ရှိနေသည်၊ အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ ကလမိုင်ဒီးယရောဂါကူးစက်မှုများ၊ gonococcal ရောဂါကူးစက်မှုများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန်အရေးကြီးသည်။
ထပ်ခါတလဲလဲ balanitis မှာတော့ရှည်လျားသောသားဖောက်ခြင်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်း glans သင့်လျော်သောတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနှင့် / သို့မဟုတ်အရေဖျားလှီးခြင်းနှင့်အတူဤအခြေအနေအားခွဲစိတ်ပြုပြင်ရန် ... စဉ်ဆက်မပြတ်စိုထိုင်းဆနှင့်ပိုးမွှားအေးဂျင့်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒီရောဂါကူးစက်မှုသို့မဟုတ်အခြားသူများ penile ကင်ဆာကျုံ့သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားဖို့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ဒီရောဂါကိုကုသဖို့အတွက်လူတွေဟာ Canesten ကိုသုံးပြီးပantibိဇီဝဆေးဖြစ်သည့်ဆေးရည်ထဲမှာရှိတဲ့အဆီသို့မဟုတ်အမိုင်စီလီလင်ဟာသင့်ရဲ့လိင်တံကိုကောင်းစွာခြောက်သွေ့အောင်ဆေးကြောပြီးရင်ထုံးကိုသုံးပါ။
ရောဂါသည်ကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပျက်မှုရှိ / မရှိကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်၏ဂလန်း၌အနည်းငယ်နာကျင်မှုခံစားရပြီးအလွန်နီလာပြီးအချို့အစိတ်အပိုင်းများတွင်၎င်းကိုခြစ်ရာများနှင့်ရက်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ နှင့်ခြစ်ပုံရသည်အစိတ်အပိုင်းပျောက်ကွယ်သွားသည် ... ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကငါလုပ်နိုင်တာတွေအများကြီး
ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည် x picason အတွင်း၌ x ယားခြင်း၊ ဘာလုပ်ရမည်၊ ဘာဖြစ်မည်နည်း။
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ယောနိခြောက်သွေ့သောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်ချောဆီကိုအသုံးပြုကြရသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၄၅ နှစ်ရှိပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြproblemနာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းတွင်အဖြူရောင်တစ်ခုခုပေါ်လာသည်၊ ၎င်းသည်ငါကဲ့သို့ချွတ်သောအခါနီခြင်း၊ ငါ့အရေပြားအက်ကွဲတာ၊ glans တွေဖုံးအုပ်ထားတာ။ အဲဒါဘာလဲ၊ ဒါကိုငါဘယ်လိုကုစားရမလဲ။
လွန်ခဲ့သော ၂ လကတည်းကကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး နှင့်အကာအကွယ်မရှိသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ ပထမတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကငါ့ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏ကောင်မလေးရောဂါကူးစက်ခံရပြီးထွက်လာသည်။ သူမသူမကိုဂရုစိုက်နိုင်အောင်၊ သူမပေးတဲ့ကုသမှုကိုကြည့်ဖို့သွားခဲ့တယ်။ သူမခွဲစိတ်ထားပုံရတယ်။ ငါဖြေရှင်းဖို့ဘာလုပ်ရမလဲငါအထွေထွေဆရာဝန်တစ်ယောက်ဆီသွားပြီးသူညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ ငါ quadridem နဲ့ငါလျှောက်ထားနေတုန်းပဲ၊ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ၊ အရေးတကြီးတိုးတက်မှုမရှိဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ ငါ balanitis ရတယ်လို့ထင်ပြီးပထမဆုံးဆရာဝန်ဆီသွားပြခဲ့တယ်။ သူက recoveron နဲ့ bactrimfကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်။ ငါ ၁၀ ရက်လောက်ပြန်ထားတယ်။ ငါတိုးတက်လာရင်ငါပြproblemနာကအမြစ်ပြတ်မပျောက်သွားဘူး။ ဆီးရောဂါပါရဂူနှင့်သူ isox 3d နှင့် afumix ဆေးများကိုသတ်မှတ်သည်။ သူကသုံးရက်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ပြsolနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီ၊ ကောင်းပြီ၊ နှစ်ရက်တာကြာပြီ၊
ဟယ်လိုကျွန်ုပ်၏လိင်တံနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ပြisနာမှာလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကမှပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အချိန်ကာလအားဖြင့်ပိုးအိမ်ပိတ်ခြင်းကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ခေါင်းကိုမတိုက်နိုင်၊ စိုက်ထူသောအခါ၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ပုံမှန်အခြေအနေ၊ ရေချိုးရန်ရေချိုးသော်လည်းနာကျင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်ရကြောင်းနှင့်မည်သည့်ဖြေရှင်းနည်းကဘာလဲဆိုတာသိရန်နည်းလမ်းအချို့ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဂလန်းပေါ်တွင်ယားယံခြင်းနှင့်အနီရောင်အစက်များရှိသည်။ နေ့စဉ်သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်သောအခါသူတို့သည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအခါအနီရောင်အစက်များပြန်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာဖြစ်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ကုသနိုင်မည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤပြproblemနာကိုလေးရက်ခန့်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသင့်အတင့်သာရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်လစဉ်လိင်ဆက်ဆံပြီးတစ်လမှတစ်ကြိမ်မတော်မတရားပြုခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုမူကားလိင်တံ၏အစွန်းတွင်အနီရောင်မှိုတစ်မျိုးပေါ်လာသည် ငါ့အသားအရေကပိန်နေပြီး၎င်းသည်ထူးဆန်းသောအနံ့ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းကိုရပ်တန့်တိုင်းတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အရေပြားကိုချိုးဖျက်သကဲ့သို့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်နေသောကြောင့်နာကျင်စေသည်။ ...
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်နှစ်ပတ်ကြာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည်။ ၎င်းသည်ရှေ့မှောက်မဟုတ်ဘဲနောက်တစ်နေ့တွင်နောက်ဆံပင်တွင်ဆံပင်ရှိခဲ့ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သိလိုက်သည်။ အနီရောင်အစက်အပြောက်များနှင့်ခေါင်းပေါ်တွင်အစက်များပါဝင်သည်။ ပုံမှန်ဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကဗျာဆန်ခြင်းသည်ပုံမှန်လားသို့မဟုတ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုသိလိုခြင်းဖြစ်သည်။
hello eeh ကျွန်ုပ်ဤနည်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏သက်ရှိနှင့်အတူဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကိုသိရန်ဖြစ်သည်။ / ကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ (ဦး ခေါင်း) သည်အလွန်လောင်ကျွမ်းပြီးအနီရောင်ဖြစ်လာလျှင်၎င်းသည် ဦး ခေါင်း၏အစွန်းတွင်ပိုမိုကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏အနာမှာသေးငယ်သောအနာရှိသော်လည်းအနည်းငယ်သွေးထွက်နေပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အခက်အခဲရှိသည်။ ဤပြproblemနာကြောင့်ငါ၏မီးလောင်ခြင်းစတင်သောအခါ ပို၍ ဖြစ်သည်။ : / ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲလို့ငါသိချင်တယ်။ ok ငါမင်းရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေတယ်။
Rodrigo Diaz က de Vivar ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်အသက် ၄၄ နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ အရွယ် မှစ၍ မိန်းကလေးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအခါတစ်ခါတစ်ရံနာကျင်မှုခံစားခဲ့ရသည်။ အသက် ၄၀ တွင်အရေခွံ၏အသားအရေမှာအလွန်နည်းပါးလာပြီး၊ တစ်ခါတလေကျွန်မရဲ့ဂလန်းကိုပျက်စီးစေတယ်၊ ​​အနီရောင်ဖြစ်လာပြီးပွတ်တိုက်မှုကြောင့်skinရိယာ ၁ စင်တီမီတာခန့်မြင့်တက်လာတယ်။ အသားအရေပျက်စီးသွားသည့်အရေပြားကိုတွေ့မြင်လာရခြင်း။
ဒီနွေရာသီမှာငါ phimosis အတွက်ခွဲစိတ်ကုသမှုတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ပြproblemနာက ၅ လလောက်ကြာမှ၊ ငါ glans ကိုထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရလဒ်ကြောင့်ငါ glans (အနီရောင်မျက်နှာပြင်၏ ၁၀%) တွင်နီညိုရောင်ရှိသည်။ သူတို့သည်မနာပါသော်လည်းသူတို့သည်မသွားဘဲနေကြသည်။ ပြီးတော့ငါဒီထက်ပိုပြီးသွားမယ်လို့ထင်တယ်
Rodrigo Díaz de Vivar အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းတိုင်း၊ မင်းကိုကူညီဖို့မင်းကိုလိုအပ်တယ်။ ဂလန်းရဲ့အစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ဒေါသထွက်ပြီးရောင်ရမ်းလာသည်။ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။ ကျွန်တော်ဘာဝတ်လို့လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေတယ်
၎င်းတွင်ရှိသောသူများအတွက်အသားလွှာကိုဖယ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အသုံးမ ၀ င်သော၎င်းအလွှာကိုဖယ်ရှားရန်ခွဲစိတ်ရန်အကြံပြုထားပါသည်။ လိင်တံတွင်အမြဲတမ်းကူးစက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်၊ သင်ဆီးသွားသောအခါဤအလွှာသည်အစိုဓာတ်ကိုစုဆောင်းပြီး၊ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့မိတာနဲ့ဘယ်ဘက်တီးရီးယားတွေကငါတို့ကိုကပ်စေနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာသည်သန့်ရှင်းပြီးအလွန်ထိခိုက်လွယ်သည်ကိုသတိရပါ။ အသားဆေးသည်အသုံးမ ၀ င်သောရောဂါပိုးအမျိုးအစားများကိုရှောင်ရှားရန်ဖယ်ရှားပစ်ရမည့်“ အသားအရေ” ဖြစ်သည်။ ဒီကနေစကြရအောင်။ ဆီးချိုရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားကြည့်ပါ။ သူကမင်းကိုပိုကောင်းအောင်လမ်းပြပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ဒီပြproblemsနာတွေကယောက်ျားတွေကြားမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ်။
THE DEATH Doctor မှအကြောင်းပြန်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအပတ်ကကျွန်ုပ်၌လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်အလွန်ပြင်းထန်သောယားယံခြင်းဖြစ်သည့်အပြင်မျက်လုံးများကိုလောင်ကျွမ်းကာစေးကပ်သောအရာများကိုလည်းထုတ်လွှတ်သည်။ ငါဘာတွေသုံးလို့ရလဲ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေး…။ ဘယ်လောက်ကြာကြာအနာပျောက်အောင်စိတ်မကောင်းပါဘူးငါနှစ်ပတ်ကြာပြီ၊ ပိုဆိုးလာတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါ posipen, isox and ilosone ဆေးတွေကိုသောက်နေတယ်။ ငါ recoveron နဲ့ micostatine creams နှစ်ခုကိုချလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့က ငါဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါ့ကိုမကူညီဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်မဟုတ်ပါ
လိင်အရသုတေသနပြုချက်အရအဆီအိတ်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာ - အချိန်တိုင်းတွင်ဖြစ်သည်
ငါ TRIDERM Cream လို့ခေါ်တဲ့မုန့်တစ်လုံးထဲမှာထည့်ထားတယ် - 0.64 mg dipropionate
betamethasone, 0.5 မီလီဂရမ် betamethasone, 10 မီလီဂရမ် clotrimazole နှင့်ညီမျှ
နှင့် gentamicin အခြေစိုက်စခန်း 1.0 မီလီဂရမ်နှင့်ညီမျှ gentamicin sulfate ။ နှင့်
ငါရှိသည်နှင့်မည်သို့ငါကပျောက်ကင်းအောင်ကုသ။ ငါဆစ်ဖလစ်နှင့်ရေယုန်ရောဂါအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီးပြီ။ သူတို့ထွက်လာတယ်
ကျွန်ုပ်သည် ၄၅ နှစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ထင်ထားသည့်လိင်တံတွင်ဖန်းဂတ်စ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုကုသပေးသည်။ သူသည်အရေပြားကိုတင်းမာ။ ခြောက်သွေ့စေခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်၊ ထို့နောက်သူသည်အလွန်သိမ်မွေ့သော်လည်းနာကျင်သောနည်းဖြင့်စုတ်ပြဲခဲ့ပြီး Glans များကိုကောင်းစွာဆေးကြောရန်အသားကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်း။ မရပါ။ အဖြူရောင်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်လာပြီး၎င်းသည်အစဉ်အမြဲသန့်ရှင်းနေပြီး၎င်းသည်ရောင်လာသည်အထိကျွန်ုပ်မပြန်နိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Ciprofloxacin၊ Terbinatin နှင့် Unitrex ဟုခေါ်သောမုန့်နှင့်ငါးရက်ကြာကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ အရေပြားသည်အလွန်ထိခိုက်လွယ်ပြီးအ ၀ တ်အစားကိုပွတ်တိုက်ခြင်းသည်အလွန်နာကျင်ပြီးနာကျင်သည့်အခါဆီးသွားသည့်အခါအလွန်ပြင်းထန်သည်။ နာကျင်မှုအတွက်မူးယစ်ဆေးရှိမရှိသိချင်တယ်၊ အရမ်းပြင်းလွန်းတယ်၊ ပုံမှန်လား၊ မဟုတ်လားမသိဘူး။
အကယ်၍ သင့်တွင် glans များ၌အစက်အပြောက်များနှင့်အဖြူရောင်ငါးပိရှိလျှင်၎င်းတို့သည်မှိုများဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ ဦး ဆုံးသင်သိသည်မှာမှိုနှင့်ပorိဇီဝဆေးများကိုသောက်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး မှိုများကိုဖမ်းမိသည်။
ကောင်းပြီ၊ သင်သည်ကနေဒါနှင့်ကရီးနင်တို့၏ ဦး လေးများဖြစ်ပြီး၊
ဟေ့ငါ walter ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အရာနဲ့ပြaနာတစ်ခုရှိတယ်
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်မိသားစုနှင့်မိသားစုအဖေကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကိုပျော်ရွှင်စေလို။ ကျွန်ုပ်အား ၅ ရက်အတွင်းအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏မွေးမြူရေးသားများကိုမွေးမြူပါလိမ့်မည်။
OLA AMI ငါ MASTURBATION ကိုနှစ်သက်သဖြင့်၎င်းသည်မကောင်းမှုပြုခြင်းကိုပြုသဖြင့်အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရသည်။
သငျသညျ MASTURBES ဒီနည်းကိုမွေ့လျော်တဲ့အခါနဲ့ ORGASM ကိုသန္ဓေတည်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာ ၊,,, သင်နောက်ထပ်လိုချင်ပါတယ်။
jonnny Daniel ထောင့်သိုးသငယ်ကို ဟုသူကပြောသည်
ငါမှာဒီရောဂါရှိတယ်ထင်တယ်။ အစွန်အဖျားကနီလာတယ်။ ဘောလုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုလောင်ကျွမ်းတယ်
jonnny daniel angulo cordero အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်မေးခွန်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပြtheနာသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက် (သူမသည်ကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းဂရုစိုက်ခဲ့သည်) နှင့်ဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲဆက်ဆံမှုများစတင်ခဲ့သည်။ ယခုသူသည်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်သည်။ .. ငါ့ရဲ့ပြproblemနာကငါ့လိင်တံစပြီးယားလာတယ်။ ယားတာကိုငါသတိထားမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာဘာမှမရှိဘူး၊ ဒီနီရဲတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်သာသူမပြwithနာရှိနေတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ငါရမယ့်အထိဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိချင်ခဲ့တယ်။ prophylactic မပါဘဲလိင်ဆက်ဆံဖို့အသုံးပြု ...
အဲလ်ဆာ palomares ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်မခင်ပွန်းကိုကြည့်ပါ။ သူကလိင်တံ၏အသားနီအနီများနီလာပြီးတစ်ခါတစ်လေအဖြူရောင်ထွက်လာတယ်။ ငါတို့ ketoconasol နဲ့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုယူပြီးသူကကျွန်တော့်လိင်အင်္ဂါကိုငါ့လိင်အင်္ဂါ menstru လာတိုင်းအချိန်တိုင်းလာပေးတယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ ငါတို့မှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ငါသူ့ကို picason ထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းဖို့သူ့ကိုကူညီချင်တယ်။ ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်၊ ငါရောင်းလိုက်ပြီ။
elsa palomares အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်း PENIS LIGUITA သည်မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေသည်ကျွန်ုပ်၏ယောက်ျားသည်အနီရောင်ဆံပင်ရှိလျှင်အဖြူရောင်ရရှိသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည် PUS နှင့် AMI သည်ငါ့ကိုပေးသည် PICASON အမြောက်အမြားလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏အပြောင်းအလဲကာလအတောအတွင်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အချက်အလက်များအားလုံးသည် ထပ်၍ ပိုများလာသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာကျွန်တော့်ကိုအနံ့ဆိုးစေပြီးကျွန်ုပ်ဆွေမျိုးများရှိခဲ့ရင်ငါ့ယောက်ျားကိုစွန့်ခွာစေတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုငါမီးရှို့ချင်တယ်။ ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကူညီပေးပါမယ်။
ဟယ်လိုကျွန်ုပ်သည်တူညီသောပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ အနီရောင်အစက်များ၊ လိင်တံနီများ၊ အဖြူရောင်အဖုံး၊ အနီရောင် glans များ၏နောက်ဆုံးအပိုင်းရှိအက်ကြောင်းများနှင့်အနီရောင် glans များဖုံးအုပ်ထားသည့်အရေပြား၊ ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ ငါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းငါအချို့သောသူတို့ကိုငါဖြေရှင်းနိုင်သည်ထင်, ဒီစာမျက်နှာနှင့်အတူပါလိမ့်မယ်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ပီရူးမှကြိုဆိုပါတယ်။
ငါ့သားလေးနှစ်ရှိပြီ။ မနေ့ကငါရေချိုးတာကသူ့လိင်တံအနီရောင်ဖြစ်ပြီးဆေးရန်ကြိုးစားသည့်အခါ၎င်းသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ မင်းဘာအကြံပြုလိုသည်ကိုသိချင်ပါတယ်
ကောင်းပြီ၊ ငါက ၀ တ်မှုန်အိတ်နဲ့လိင်တံ ဦး ခေါင်းပေါ်မှာအုံတစ်မျိုးရလာတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ အုံများကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်၊ လိင်တံစိုက်ထူသောအခါနှင့်လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းအောက်တွင်အလွန်သေးငယ်သောအနီရောင်ဝက်ခြံများနှင့်တူသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံစိုက်ထူသောအခါငါညှစ်။ ဦး ခေါင်းသည်ခရမ်းရောင်နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့နီရဲလာသည်။ သို့သော်ကျွန်တော်ညှစ်မှသာလျှင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးနိုင်မည်လား ???
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပေမယ့်ငါအကာအကွယ်မသုံးခဲ့ဘူး၊ သူမအတွင်းပိုင်းသုတ်ရည်မဖိတ်ခဲ့ဘူး၊ ငါစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ လိင်တံ၊ ငါ့လိင်တံကနေဘာမှမစီးဘူး၊ သူတို့တောင်မှမစားကြဘူး၊ ငါကရေချိုးဖို့နဲ့ဆေးကြောဖို့အချိန်ယူတဲ့အခါ၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့စီးဆင်းမှုပဲ၊ သူတို့စားတာတောင်မှမစားခဲ့ကြဘူး။ အနံ့ကိုသတိရပြီးသူမ၏လိင်တံတွင်သူမ၏အမွှေးနံ့သာရှိနေသကဲ့သို့ ကျေးဇူးပြု၍ ထိုမနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့ကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ !!!!
မင်္ဂလာပါကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏အရေခွံများလောင်ကျွမ်းသွားပါသည်၊ သို့သော်၎င်းမတိုင်မီတစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းလောင်းများစတင်လောင်ကျွမ်းလာသည်။ ၎င်းသည်အနီရောင်အစက်အပြောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နာကျင်စေသည်။ ဒါနဲ့ဆရာ ၀ န်ဆီကိုသွားခဲ့တယ်။ သူက Herpes လို့ပြောတယ်။ ပြီးတော့သူက acyclovir လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတချို့ကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ glans တွေကအခွံတွေထွက်လာတယ်။ ဆရာဝန်ရဲ့အဆိုအရဒီဆေးလုံးရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ သူမမှာမရှိတဲ့နာကျင်မှုကအဲဒီဆေးတွေကိုငါသောက်ပြီးတဲ့အခါမှာငါ့ရဲ့အသားရေကိုပုံမှန် (ပုံမှန်မဖြစ်မီ) လျှော့ချလိုက်ပြီး၎င်းကိုငါပြန်လည်ဆုတ်ခွာချိန်မှာ၊ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်၏သံသယကိုဖြေရှင်းပေးပါ။
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာည၊ ကျွန်ုပ်ပြproblemနာက sig ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှအပကာကွယ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့လျှင်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်ရေချိုးရန်သွားသောအခါကျွန်ုပ်၏ glans တွင်အဖြူရောင်ကျောက်မှုန့်များကိုသတိပြုမိသည်။ ငါ့ရဲ့စတိုင်ကိုငါဘာမှမလုပ်ပါ၊ လိင်တံအပြင်ဘက်မှာလောင်ကျွမ်းမယ်၊ ဒါပေမယ့်ဂလန်းတွေမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ (မင်းငါ့ကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်) အမှန်တရားကငါအရမ်းထိတ်လန့်သွားပြီးဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် စကားမစပ်ဆရာဝန်၏လိပ်စာကိုသင်သိပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
angel33df ကို Reply
ငါယားခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ ကြက်ဥနှင့်မှိုများအတွက်ခရင်မ် ၀ ယ်ခြင်းကိုနှစ်နှစ်နီးပါးကြာအောင်ငါ AZE ပြောပြပါကကျွန်ုပ်သည်ထိုရောဂါမှသူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားပantibိဇီဝဆေးများထပ်မံပေးခဲ့သည်၊ ငါ eucerin ဆပ်ပြာကိုသုံးတယ်။ ဒါကငါ့အတွက်ကောင်းတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံတိုင်းအချိန်ကာလကငါ့အင်္ဂါဇာတ်နှုတ်ခမ်းနီလာပြီးရောင်လာတယ်ငါရေအေးနဲ့ဆေးကြောလိုက်တယ်၊ ငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့လည်းတူတယ်၊ အစက်အပြောက်အနည်းငယ်ထွက်လာပြီး အရေပြားသည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ခြောက်သွေ့သောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ovule fungi နှင့် javon များအတွက်လိမ်းဆေးများထည့်ပြီးပြီ။ (မှတ်ချက်ပေးရန်မေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အင်္ဂါဇာတ်နှုတ်ခမ်း၏အပြင်ဘက်တွင်အနာအနည်းငယ်သာရရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မကွဲပါ။ ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုတည်းကြောင့်လား? မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကသင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင်တို့အားလုံးကိုငါမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စကိုကျွန်ုပ်ပြောပြနေပြီး၎င်းသည်သင်ပြောသောအရာနှင့်မတူပါ၊ သူတို့ကဘာလဲ၊ ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောနိုင်သည်မှာသေချာသည်။ သို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်က ၁၆ နှစ် ၁၇ နှစ်ဆိုပါစို့ (အဲဒီအချိန်တုန်းကအသက် ၂၀ မပြည့်သေးခင်မှာလိင်ဆက်ဆံမှုမပြုခဲ့ဘူး၊ အဲဒီအချိန်ကရှိပြီးသား) ဆိုပါစို့။ ငါလိင်တံ၏အစမှာ glans မှာမဟုတ်ဘဲ၊ လိင်တံ၏အစပိုင်းတွင်အစပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်သေးငယ်သောအစင်းတစ်ထည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး၊ ခဏအကြာမှေးမှိန်လာသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်။ အဲဒါဘယ်လိုပုံပေါ်လာတယ်ဆိုတာတောင်မှမသိဘူး၊ အရေးမကြီးဘူး၊ ယားတယ်၊ ခြစ်တယ်၊ နီတယ်၊ ဒါပေမဲ့အရေးမကြီးဘူး၊ အဲဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဟာအမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ၊ လတွေ၊ နှစ်အနည်းငယ်အကြာတိုင်း ,,, ငါကစားသောအခါငါလည်းလိင်တံမသာအထက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်လိင်တံ၏အစအ ဦး ၌သာသေးငယ်တဲ့အာကာသ ,, ,, ယခု,3မှ4နှစ်လွန်ပြီငါသတိပြုမိ ကျွန်တော့်လိင်တံ၏ထက်ဝက်နီးပါးနီးပါးကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်ကိုသာယားယံစေသည် ငါ jenera yaga သို့မဟုတ်သင်ပြောသောအခြားရောဂါများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဂလန်းများသည်အရေပြားတစ်ခုတည်းကိုသာသက်ရောက်သည်မဟုတ်ပါ (ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့သည်pekeñoမှဖြတ်တောက်ထားသည့် glans များဖုံးအုပ်ထားသည့်အသားအရေမရှိကြောင်းသတိပြုပါ) ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့ငါထက်ဝက်နီးပါးတိုးတက်ခဲ့သည် ဒါပေမယ့်အဖြူ၊ ယားယံခြင်း၊ နီခြင်း၊ ယခုဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်၌သာမေးသောခရင်မ်နှင့် spastilla ကိုစတင်အသုံးပြုတော့မည်။ သူတို့က wenas လို့ခေါ်တဲ့ ketoconazole 16% -ketofungol antifungal cream နဲ့နှစ်ခု ငါ ၁ ပတ်တစ်ပတ်သောက်ရမည်။ ၄ င်းတို့ကို fluconazole 17% ဟုခေါ်သည်။ esq ငါရှိသည်ဆိုသောအချက်သည် x ai သည်ကွဲပြားခြားနားသောအရာဖြစ်သည်။ ငါမှတ်မိသည်မှာကျွန်ုပ်သည်နှစ်များရှိသည်မှာအတိတ်ကာလများမဟုတ်ပါ။ ဆက်နွယ်မှု ,,, ငါ၌ငါ့အအရေးပါမှုကိုပေးခြင်းမရှိဘဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမပါဘဲငါ့လက်ရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပေမယ့်သူမသူမ၏ရောဂါကူးစက်သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ဘာမှမခံစားရဘူးနဲ့ကျွန်မတစ်နှစ်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းနှင့်အတူငါနှင့်အတူရှိခဲ့ကြကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါ အဖြေတစ်ခုတန်ဖိုးထားတယ်။
jose mario အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လိုငါ့နာမည်လူးဝစ်ငါ PICASON ပြီးနောက် PICASON တွေအများကြီးငါ INCHAZONN နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည် PENIS အိုင်အိုင်အေအများကြီးနာကျင်မှုရှိသည် PICASON နှင့်ဟော်ရာပြည်နယ်ကငါ့ကိုနာကျင်မှုနှင့်ငါ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခါ အများကြီး
ည။ Juan ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ အခုဒုတိယအကြိမ် balanitis လို့ခေါ်တဲ့ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါမေးလိုက်တယ်။ ငါသိချင်တာကမှန်ကန်သော igiene ရှိဖို့ဘယ်လို javon အမျိုးအစားကိုငါ့အားရှင်းပြနိုင်ရင်ငါ့မှာရှိတယ်။ ဒီပြproblemနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလလောက်ကြာတော့ငါဆေးနဲ့အရက်ကိုဆေးပေးတယ်။ ဆေးလုံးတွေအကုန်လုံးပြီးပြီ။ ဆေးညွှန်းကိုသာသူတို့သောက်မယ်၊ ဒီစီစကီလင်လင်းဟိုက်ကိတ်ဒါမှမဟုတ်ငါဝယ်လို့ရတဲ့တခြားအလားတူဆေးပြားတွေရှိရင်သိချင်ပါတယ်။ ဆေးဆိုင်များ။
ကျွန်တော့်ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ လိင်တံဆီးပူလောင်နေရင်လိင်တံထဲမှာအစွန်အဖျားအထိရောက်နေပြီလို့ခံစားရတယ်။ အမှန်တရားကငါ့ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်။ ဒါဟာစအိုကိုဖြတ်ပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှဟုတ်လားဆိုတာငါသိချင်တယ်။
JAIR MARCO မှစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည်ဒံယေလပါ။ ကျွန်တော် balanitis ရှိတယ်လို့ထင်တယ်၊ ငါတွေ့တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကယားယံခြင်း၊ နီခြင်းနှင့်အနံ့ဆိုးခြင်း။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာပျောက်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
ငါတည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်၊ ပါးစပ်ဖြင့်လည်း ... နောက်တစ်နေ့ကျွန်ုပ်၏ glans ပေါ်ရှိဝက်ခြံများကဲ့သို့အစက်အပြောက်များကိုရရှိခဲ့သည် ... ၎င်းသည်အတော်အတန်ယားခြင်းနှင့်အနံ့ဆိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုသို့သွားခဲ့သည် ... ပြီးတော့သူကငါ့မှာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ် ... ငါဆန့်ကျင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုမူဆက်ဆံတာကသူမလုပ်မီကျွန်ုပ်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုချောဆီကိုပြောခဲ့တယ် .. ခြောက်သွေ့ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီပေးတယ် ???
နောက်တစ်နေ့မှာအသားအရေအနည်းငယ်ယားယံတာကိုသတိပြုမိတယ်။ vdd တစ်ဖက်တည်းမှာပဲ vdd အနီရောင်အစက်အပြောက်တွေ၊ စူးစမ်းရှာဖွေတာတွေစတဲ့အရာတွေရှိတာကြောင့်စပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်။ ဒါက balanitis ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင်ကုသခဲ့ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသန့်စင်လိုက်တယ်။ vitacilina ကိုဝတ်လိုက်တယ်။ ငါ့ကို kito လုပ်ပြီးပြီ။ ငါ preokuparme လုပ်သင့်တဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးလား။ ငါ့ကိုသံသယထဲကယူပါ။
သို့မဟုတ်လမ်းဖြင့် .. ကအနံ့ဆိုးခဲ့ပါဘူး, မနာကျင်မှုကသာတစ် ဦး ယားယံခဲ့ကြောင်းဆိုလိုသနညျး
မင်္ဂလာပါ၊ တောင်းပန်ပါတယ်၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကျွန်မကိုပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီး ၂ ရက်အကြာမှာ glans groove ကစတင်နာကျင်လာပြီး၊ ငါသိလိုက်တာနဲ့ကျွန်မဟာ glans groove မှာအနီရောင်နဲ့နာကျင်မှုတွေခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒီရောဂါဆိုတာဘယ်လိုကုသရမလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုဆေးမျိုးကောင်းကောင်းကုရမလဲဆိုတာပဲ
Jorge mmm ဟုသူကပြောသည်
ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ မင်းကိုငါ့ကိုကြိုတင်ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ glans ၏လည်ပင်းမှာကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုသုံးပြီးကတည်းကငါအဖြူရောင်အစက်အချို့ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကသူတို့ကျဆင်းနေသည်ကိုငါမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ပြtheနာမဟုတ်၊ ပြtheနာကကျွန်ုပ်ဆံပင်ကိုအရေပြားအတွင်းပိုင်း (အသားအသားကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်) အစိတ်အပိုင်းတိုင်းသေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများသာမကဘဲကျွန်ုပ်၏ဆံပင်များကိုဖြည်းဖြည်းဆေးကြောပြီးဖြည်းညှင်းစွာပွတ်တိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စင်ကြယ်သော glans နှင့်အနီရောင်အစက်အပြောက်များတွင်ငါစအိုနှင့်ပါးစပ်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်နှင့်ထိုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဘာမှမရှိဘူး, ငါ 1 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ဤစာမျက်နှာများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
jorge mmm အားပြန်ပြောပါ
ဟဲလိုဆရာဝန် KIERO K ငါ့ကိုအဖြေ။ ။ သုံးရက်ပတ်လုံးငါနဲ့အတူငါနဲ့လိင်တူချင်းဆက်ဆံခဲ့တာငါပဲကောင်ပဲ EYA နဲ့ EYA ကိုငါနဲ့အတူအိုင်တီဖြစ်ခဲ့တာ ၃ ရက်အကြာမှာငါရေချိုးပြီးငါ PEN DL PREPUCIO OSP တွင် PEN DL PREPUCIO တွင်မီးလောင်ခဲ့တယ်။ အောက်ခြေမှဂလင်းသည်ကျွန်ုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးမှုတ်ထုတ်နေသောအသေးအဖွဲတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးနောက်အခြားအနိမ့်များသို့ထွက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဗလာနီပါတ်အချို့ရှိကြသည်။ AYYA L L သည်တစ်နှစ်အတွင်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အပြင်ကက်သလစ်တစ် ဦး တည်းသာလျှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖြစ်သည်။ EYA L ကို PICA .K MERECETAN ငါ့ကို KI GET ပြောပြသည်။ SMITHRIGOBERTO92@YAHOO.COM ME K သည်ကျွန်ုပ်ကိုစာရေး။ ကူညီနိုင်သလား
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Javier Kisieran၊ ကျွန်ုပ်ကိုသုံးလကူညီပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ကျွန်ုပ်ရေချိုးပြီးကျွန်ုပ်၏ PENIS PARD DL တွင်သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သည် OSEA DOWN DL GLAND ကိုအောက်ခြေတွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အဖြူရောင်မီးဖိုကြီးတစ်စင်းပြန့်နှံ့သွားသည်။ VI K အချို့သောအရည်ကြည်ဖုများမ PIKAN သည် M PIKA ကိုမွေ့လျော်ပါ။ incha မရ .k ငါ့ကို reset
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည်ကာရယ်၊ အခြေအနေကောင်းပါတယ် .. လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းက၎င်းသည် picason အဆင့် ၃ ရက်အကြာတွင်ထွက်လာပြီးကျွန်တော့်ကိုကိုက်နေတုန်းပဲ။ ငါ glans ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာဒဏ်ရာရခဲ့တယ်။ အဲဒါကမီးလောင်သွားပြီးအခု ၆ ရက်နီးပါး။ ဆိုလိုတာကတစ်ပါတ်နီးပါးငါအရမ်းဆိုးတယ်၊ ငါမှာပုံမှန်အရာအားလုံးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုဖြစ်ပျက်လာတာကငါ glans အနည်းငယ်ယားခြင်းနှင့်အနည်းဆုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိမိသောအခါစိတ်အေးသွားစေရန် ပိုဆိုးတာကဒါဟာငါကိုအထင်ကြီးစေတယ်။ ငါခြစ်ပြီးခြစ်လိုက်တယ်။ picason ကငါ့ကိုပေးတာဒုတိယအကြိမ်ပဲ။
ငါသံသယရှိတယ်ကောင်းပြီ၊ ငါမကြာခဏပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတတ်တယ်။ ပြီးတော့အနံ့ကငါ့အရေခွံမှာပဲရှိနေတယ်။ ငါသုတ်ရည်ကနေအရေခွံကနေအဖုထွက်လာတယ်။ အဲဒီအဖုကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမှန်းကျွန်တော်မသိဘူး၊ အခုမီးလောင်နေပြီ၊ ငါ clotrimazole စမ်းကြည့်ပြီးပြီ။ ကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ glans သည်အနီရောင်ဖြစ်ပြီးမပျောက်ချင်အောင် ၁၅ ရက်ကြာကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်ဘာလဲဆိုတာမသိပါ။ ၎င်းသည် ets ဟုတ်မဟုတ်သိလိုလျှင်ဝက်ခြံအချို့ရှိပါသေးသည်။ ဆီးသွားတဲ့အဆီးအတားလိုမျိုး၊ ပိုက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာကငါ့ကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ penme ဆံပင်ကိုရလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဖြေသေးတာကိုဖြတ်နိုင်တဲ့သေးငယ်တဲ့အတိုလေးရှိတာကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်။
ဒါကြောင့်တစ် ဦး လုပ်နိုင်တဲ့3ပေါ်တွင်တင် gonorrhea pepe ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်၌ပြproblemsနာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အလွန်ကောင်းသောစိုက်ထူခြင်းမခံရမီကျွန်ုပ်တွင်အခါအားလျော်စွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းများရှိသည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ထိုစိုက်ထူခြင်းအမျိုးအစားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး ၁၀၀% ပင်မစိုက်ထူခြင်းမရှိတော့ပါ။ ယခုမူကားငါမသိရ ... ငါဘာလုပ်နိုင်လဲငါ့ကိုကူညီ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ; ငါဟာ ၀ က်ဝံနဲ့လိင်တံခြေထောက်တွေမှာခြစ်ရာဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့ယားယံတာကိုအလယ်အလတ်ကကျွန်တော့်ကိုအလွန်အသည်းအသန်နှိပ်စက်ပြီးကုသပေးဖို့ဆေးဝါးအချို့ကိုသိချင်တယ်။ ငါမှနှစ်နှစ်ခန့်ဖန်းဂတ်စ်မှိုဆေးများ၊ မှိုများ၊ ပြီးတော့ယားတာကပိုပိုပြီးပြင်းထန်လာတယ်၊ ငါကအချိုကိုပိုသုံးလေလေ၊ ယားယံခြင်းကိုရှုပ်ထွေးစေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတောင်းပန်ပါတယ်၊ တောင်းပန်ပါတယ်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုကောင်းကောင်းပြောရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာသိရင်တောင်းပန်ပါရစေ။ ငါနင့်ကိုပေး ဦး မည်။ ငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ကိုပေးမည်။ ဤယားယံခြင်းသည်အပူတပြင်းဖြစ်သောကြောင့်အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ထံသို့သွားသည်။ ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်အသိပေးပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလားဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ ရှိပါပြီ။ လိင်တံ၏အသွင်အပြင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အထူးသဖြင့် glans များပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောမုန့်သို့မဟုတ်ဆီမွှေးရှိမရှိမေးလိုပါသည်။
ငါ glans ၏ယားယံခြင်းနှင့်အနီရောင်ခံစားနေရပြီးတစ်ခါတစ်ရံအလွန်ဆိုးရွားသည်။ ငါဆီးချိုရောဂါနှင့်သွေးတိုးရောဂါဖြစ်ပြီးငါသကြားနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုထဲကရသောအခါယားယံထင်ရှားဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သွေးထဲတွင်ပုံမှန်သကြားဓာတ်ပမာဏကိုထိန်းချုပ်သောအခါ၊ ယားယံမှုသည်တစ်ခါမျှမဖြစ်ဖူးသကဲ့သို့လျော့နည်းသွားသည်သို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့« DONOMIX »မုန့်ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်
ကောင်းပြီကျွန်ုပ်၌ဤရောဂါရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဖြစ်ပျက်သောအရာကရက်အနည်းငယ်အတွင်း၌ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံ၌ပြင်းထန်သောယားယံခြင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် pc ကြွက်သားမှလိင်တံ၏အစွန်အဖျားအထိဖြစ်သကဲ့သို့၎င်းသည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းထက်အနီရောင်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်လည်း၎င်းကဲ့သို့အထိခိုက်မခံနိုင်သကဲ့သို့၎င်းကိုကုစားရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ငါ balanitis ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကူညီနိုင်မလားဆိုတာသိချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါလက်မှာ ၅ လလောက်ရှိပြီးပြီ။ ငါစစ်ဆေးလိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့်ဆေးတွေကပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါဝယ်လို့ရမယ့်ဆေးတွေရှိလားဆိုတာငါသိချင်တယ်။ ဆေးဆိုင်သို့မဟုတ်သူတို့အားဆေး၏အမည်ကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည် ၄ ​​င်းကိုကျွန်ုပ်ဆေးသိုလှောင်ထားဆဲဖြစ်သော်လည်းတခါတရံအလုပ်မလုပ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်အစက်အနီများကထွက်ပေါ်လာသောကြောင့်ဆေးညွန်းစာကို doxycyclinehyclate ဟုခေါ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသိလိုသည်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နိဂုံးချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အဖြေကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်
Danilo nunez ဟုသူကပြောသည်
လိင်တံ၏အပြင်ဘက်ရှိအရိုးများပေါ်တွင်တစ်ကြိမ်ထက်မကသောငါသည်ဒိုမီနိုနံပါတ် ၆ နှင့်တူသောဘောလုံးကိုပြန်လည် remilletico တစ်ခုရသည်။ ဒါကြောင့်ငါက venereal ရောဂါရှိမရှိမသိသောကြောင့်, ငါစိုးရိမ်တယ်။
danilo nunez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကိုယ့်ပြသနာကိုလေးလေးနက်နက်ပဲမှတ်ချက်ပေးချင်တာလား။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၂ ​​နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် apollites အချို့ကိုလေးလအနည်းငယ်ကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်ရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ယားယံခြင်းနှင့်အမြောက်အများသည်ငါ၏အဆုတ်ရောင်၏ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါထွက်သွားပြီးသူတို့ထွက်သွားကြသည်။ ရက်အနည်းငယ်နှင့်ငါ picason ယူသွား။ ငါ Apollitas ကထွက်လာသည်အဖြစ်မကြာမီသူတို့ခန်းခြောက်ခန်း, တဖန်ငါအရေပြားပေါ်မှာတဖန်ထွက်လာ။ ယခုသူတို့ psodo aviuan, ငါဘာမျှမရှိသည်သော, ငါပြန်ပေါ်လာ ငါ၏အလိင်တံ၏ပင်စည် .. ငါတစ်ခုခုကိုထိုက်တန်စေချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါလုပ်နိုင်တာကိုပြောချင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနည်းငယ်လောက်ကငါနဲ့ဘယ်သူမှမရှိဘူး၊ ငါဒါကိုပျောက်အောင်ကုပေးချင်တယ်၊ လွန်ခဲ့သော m ကကျွန်ုပ်၌ဘာမျှမရှိကြောင်း mesalio သို့ဆိုလျှင်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအဖြေကိုစောင့်ပါ။
ငါ့ကလေးကငါ့ကိုရိုက်နှက်ပြီးရင်ဒီအဆင်မပြေမှုကနေငါနီလာခြင်းနဲ့အတူနာကျင်မှုကိုစတင်ခဲ့တဲ့အတွက်နာကျင်မှုကိုစတင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ငါ balanitis ရှိသည်ဟုထင်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာငါဒီအဆင်မပြေမှုကနေစပြီးအနီရောင်နဲ့စတင်ခဲ့တယ်။ နာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘဲအခုတော့ဆီးနဲ့သုတ်ရည်ထွက်လာတဲ့တွင်းထဲမှာအက်ကွဲသွားတယ်။ ဆီးသွားတဲ့အခါမှာယုတ္တိနည်းစွာနာကျင်စေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာအရေပြားကျသွားတဲ့နေရာကနေအနံ့ဆိုးမရှိဘဲထွက်သွားတာကြောင့်ငါဟာဘာလဲ လုပ်နေတာက clotrimazole ကို ၁% cream နဲ့ ketoconazole ကိုသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့်သူအကြံပြုထားတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုငါမတွေ့ရဘူး။ သူကငါ့ကိုပြောနိုင်တာလား၊ အထူးကုဆရာဝန်ပြောတာလားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားမယ်။ တနင်္လာနေ့သွားမယ်
နှင့်ငါ့ glans ဒီသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းဒီထက်ကြည့်ရှုသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော်ကိုအမြန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ၊ ကြည့်ရှုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်စွဲလမ်းသည်၊ သို့သော်လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းခွံများ၌အနီရောင်အပေါ်ယံလွှာရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ဝှမ်းယားယားယားများဖုံးလွှမ်းနေသောအရေပြား၊ nostalglos လို့ခေါ်တယ်၊ ငါဘာလုပ်သင့်တယ်၊ ငါ့ဇနီးကိုမကူးစက်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမင်းပြောနိုင်တယ်
ကျွန်ုပ်၏အမှုမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်တွင်အစတွင်အစဉ်အမြဲတည်ရှိနေသော်လည်းစိတ်အနှောင့်အယှက်မရှိသောယားနာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုဂရုစိုက်ရန် glans များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်၎င်းကိုပွတ်သပ်သောအခါအဖြူရောင်အမှုန်များသည်wholeရိယာတစ်ခုလုံးမှထွက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည်။ အစပိုင်းတွင်၎င်းသည် prepusio တွင်ကျန်ရှိနေသေးသောဆီး၏ကျန်ရှိမှုကိုခြောက်သွေ့စေရန်ဆီးသွားပြီးနောက်မကြာခဏအသုံးပြုသည်ဟုအိမ်သာစက္ကူမှအကြွင်းအကျန်ဟုထင်သည်၊ ၎င်းကိုငါမသုံးတော့ဘဲရပ်တန့်သွားသည်။ ပြproblemနာဆက်ရှိနေခြင်းမရှိဘဲအရေပြားသည်အရေပြားကိုခြောက်သွေ့နေသော်လည်းဤအမှုန်များသည်စိုစွတ်သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Oscar Mora အားစာပြန်ပါ
ငါ (ကာကွယ်မှုမပါဘဲနှင့်ဆန့်ကျင်ဆေးကြောသူများနှင့်အတူ) မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူ5နှစ်ကြာတည်မြဲသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်ငါအစဉ်မပြတ်ငါသှားလြှောကျခဲ့သကဲ့သို့ငါပြု။ , နှင့် + သို့မဟုတ် - သူမကသူတို့ကိုပြန့်နှံ့စေကြောင်းအင်္ဂါဇာတ်တဆေးကူးစက်မှုခံစားခဲ့ရတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် သငျသညျသောရောဂါလက္ခဏာအချို့ အသေးစိတ်။ ဘာလုပ်လဲ ????? သူသည်မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးထံသို့သွားပြီးကုသမှုခံယူသည်။ ဤမက်ဆေ့ခ်ျများ၌လှည့်စားမနေပါနှင့်၊ ဆရာဝန်များနှင့်ကစားခြင်းနှင့်အဝိဇ္ဇာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလိုသောကစားခြင်းကိုကစားပါ။ ယောနိသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရေစိုသောကြောင့်အရေပြား၏ PH အချက်များကြောင့်မှို၏အချိန်နှင့်အမျှမှပုံမှန်ဖြစ်လာသည်။ ဆရာ ၀ န်ကိုသွားဖို့မကြောက်ပါနဲ့။ သူတို့ဟာ ၉ ​​နှစ်ပညာသင်ကြားထားတဲ့လူတွေပါ၊ မင်းလိုဘောလုံးနည်းနည်းများများပါ။ အာဂျင်တီးနားမှကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။
သင်ပို။ မယ် သူတို့က ၁၉၅၀ မှာအင်တာနက်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ် ဒါပေမယ့်ငါတို့ ၂၀၁၁ မှာရှိနေတယ်။ shitty bagos ကိုစလေ့လာပါ။ Ahhhh ... ငါမေ့သွားတယ်။ "ငါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုမကူးစက်အောင်ကုသချင်တယ်" ... မင်းရဲ့တွဲဖက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ သင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကုသမှုသည်အမြဲတစေမဟုတ်ပါ၊
မင်္ဂလာပါ၊ ပြyouနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏အရေသည်အလွန်ခြောက်သွေ့ပြီးအက်ကွဲပြီးမကြာခဏပြင်းထန်စွာယားယံတတ်သည်။ အဆိုပါလှုပ်ထိုကဲ့သို့သော glans ထုတ်ယူဖို့အရေပြားကိုဖယ်ရှားသည့်အခါတစ်ခုခုနာကျင်စေသော။ ထိုareaရိယာကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရေဓာတ်ဖြည့်သွင်းပြီး“ အော်သံများ” ၏အနာပျောက်စေသောအရှိန်ကိုရနိုင်မည်နည်း။ သင့်ရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Manuel Martis ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါကျွန်ုပ်သည် ၁၅ ရက်ခန့် aldol နှင့်မသက်မသာဖြစ်ခြင်းနှင့်လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းနှင့်ထိုအတွက်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်သောကြက်တစ်ချောင်းတွင်ရှိသည်။
manuel martis သို့ပြန်သွားပါ
Giorgio Corazzari ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် glans များနှင့်လိင်တံအောက်၌အနည်းငယ်အနီရောင်ရှိသည်။ ၎င်းကိုငါတို့ထိသောအခါသို့မဟုတ်၎င်းသည်ဆေးကြောသောအခါလောင်ကျွမ်းသည်။ ငါလိမ်းဆေးအချို့အသုံးပြုပေမယ့်သူတို့ကဘာမှမလုပ်ဘူး ငါကောင်းစွာဆေးကြောပြီးလျှင်မုန့်ကိုမတင်သော် သာ၍ ကောင်း၏။ ဒါပေမယ့်ဒီမတိုင်ခင်တစ်လလောက်မှာဖြစ်ခဲ့တာ။ ငါဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားရတော့မယ်၊ အခုငါ့မှာပိုက်ဆံသိပ်မရှိဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Giorgio Corazzari ကိုပြန်ပြောပါ
နေကောင်းလား။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းကြည့်ပါ၊ ဒါကငါ့ရဲ့ကိစ္စပါ။ ငါမှာကြေးနီ IUD ရှိတယ်။ သူတို့ကမနေ့ကယူသွားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကို ၅ နှစ်ကျော်ကြာအောင်မလုပ်နိုင်လို့ပါ။ ငါပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတယ်၊ နောက်တစ်နေ့မှာသူလည်ချောင်းနာနေတယ်။ ငါကသူ့လိင်တံကိုစပြီးစတင်ခံစားလာတာနဲ့အမျှသူမခံစားခဲ့ရတဲ့အရာကစေးစေးတစ်ခုခုကိုစွန့်ပစ်လိုက်လို့ပဲ။ မနေ့ကငါသူရှိခဲ့သည့်လက္ခဏာကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၌ရှိသည့်မှိုကြောင့်ဖြစ်သလား၊ တစ်ခါတစ်ရံတက်ကြွစွာလိင်ဆိုင်ရာဘဝရှိခြင်းကြောင့်လားဆိုတာမနေ့ကငါမသိဘူး။ ကိုယျ့ကိုယျကိုဂရုမစိုက်ဘဲ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ဤတွင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှသွေးဆောင်မှုထဲသို့မကျရောက်ခြင်းနှင့်လူတစ် ဦး တည်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် gyne သို့သွားပြီးအောက်ပါတို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ငါ့အတွက် ၁ Trexen Duo Ovules ၁ လေးထောင့်ကွက်တစ်နေ့မှာ ၁ ရက်လျှောက်ပါ။ Vaginal x x အိပ်ရာဝင်ချိန်ည။ 1-Afumix တက်ဘလက် ၂ ဘူး။ ၁၂ နာရီလျှင် ၂ ခွက်ယူပါ။ 1-Canesten လိမ်းဆေးခရင်မ် ၁ ပြွန်ရှစ်ရက်ရေချိုးပြီးတစ်ရက် ၂ ကြိမ်ဆေးကြောပါ။ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ နားလည်နိုင်တယ်ဆိုတာရှင်းပြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီမှာကျွန်တော့်စာရင်းထဲမှာဈေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဆေးတွေဖြစ်တယ်။ Afumix ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်၎င်းအားဆေးဝါးများအတွက်ကုန်ကျသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ဆေးဝါးများအတွက်ကုန်ကျသည်။ (ငွေစုမှ) $ 1 PESITOS ။ Ovules $2ပီဆို။ နှင့် canesten $2ပီဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ PS လိင်မှတဆင့်ကူးစက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ပါသည်။ သူ၌ငါ၌လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များစွာရှိသလောက် (aticonseptive method) ဖြစ်သော IUD သည် ၅ နှစ်ကြာပြီးနောက်၎င်းသည်ကူးစက်မှုများကိုပါသယ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်၎င်းကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်၎င်းနှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်ကောင်းပါသည်ဤသည်ဗက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တက်ရောက်ခဲ့သည့်ဆရာဝန်သည်အထူးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချသည်။ တူညီသော (အလားတူ) ပြproblemနာရှိသူတစ် ဦး ဦး ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စကိုသာတင်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဖက်နည်းနည်းလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ သင့်ရဲ့ PENIS အပေါ်လျင်မြန်စွာကဲ့သို့။ ငါနှစ် ဦး စလုံးမခံစားရဘူး။ အနံ့အရောင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတည်းသာကျွန်ုပ်၏စီးဆင်းမှုသည်ဤမျှလောက်မများပါ။ နှုတ်ခမ်းနှင့်ဘုရားသခင်သည်သင့်ကိုဂရုစိုက်သည် !!! pation ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုမပြောဖို့ရပ်လိုက်တယ်။
ခွင့်လွှတ်နောက်ဆုံးမှတ်ချက်။ ငါ့ထံမှယူသောတီးဝိုင်းသည်ကြေးနီဖြစ်၏။ AND ငါစွန့်ပစ်သော။ TALEX သည်မှန်ကန်သောစကားလုံးမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်အမှုအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကိုဘာကြောင့်အကြံပြုသလဲဆိုတာဆိုတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကိုဘာကြောင့်အကြံပြုသလဲဆိုတာပဲ။ ကောင်းစွာနူးညံ့သို့မဟုတ် OR ကိုင်တွယ်။ ဒါပေမဲ့မျက်လုံးမှောင်မိုက် !! ဒီနည်းဟာအရမ်းအားကောင်းနေရင်၊ သူတို့သည် Wings GIRLS ကိုမေးမြန်းရန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ရေအားလုံးသောက်သုံးခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သန့်ရှင်းသော URINARY လမ်းကြောင်းများပေါ်တွင် မူတည်၍ သန့်ရှင်းပြီးကောင်းမွန်သော FUNCTION တွင် KIDNEYS နှင့်ဤကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲများစွာသောနေ့များ။ နှစ် ဦး စလုံး၏ SEMEN ၏အနံ့နှင့်အရသာနှင့်ငါတို့ OFF ရသောအရာကို။ BYE ကျွန်တော်တစ် ဦး ကွန်ဒိုအသုံးပြုသည် !!!! ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ယောက်ျား - ဘာကြောင့်ငါတို့ယောဂီတာကိုနစ်မြုပ်စေချင်တာလဲ။ ငါသိပ်မကြိုက်ဘူး၊ အမှန်တရားပင်နိစ်ရဲ့အရသာသို့မဟုတ်သန္ဓေသားကိုဖြစ်လိုသော်လည်းငါ့အတွေ့အကြုံကငါ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေကငါ့ကိုအရမ်းခံတွင်းတယ်။ ငါကနောက်မှငါအမေရိကန်အချို့ကိုဒီလိုမျိုးငါသိတယ်ငါသိတယ်ဒါဝေးသေးဘူးတခြားသူတွေလိုပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်မှတ်ချက်များချင်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အရသာရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အနံ့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါကမသိပါ။ …ရိုးရိုးအရသာတစ်ခုထက် ပို၍ ရှင်းပြပါ။
ယောက်ျားတွေဘယ်လိုနေလဲငါထပ်တူပြproblemနာရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏ရိုးတံပေါ်ယားယံနေပြီး၎င်းသည်အနီရောင်နှင့်အက်နေသည်။ ငါက ၂ ပတ်လောက်ဆေးသောက်ပြီးနေပြီ။ သူတို့မပျောက်သွားဘူး၊ ဒီဆေးတွေကိုငါ့ဇနီးမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကပေးတယ်။ ငါကုသမှုပြီးဆုံးခါနီးပြီ၊ အဆင်မပြေမှုတွေမပျောက်သေးဘူး။ သူပြောရင်ငါအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားမှာပါ။ အချိန်မကုန်ပါစေနှင့်၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံတွင်တစ်ခုခုရှိခြင်းကြောင့်ဤဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရန်ဆရာ ၀ န်ထံသွားသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဝှေးစေ့ကိုအရည်ပျော်ကာများစွာယူပြီးအေးဆေးငြိမ်သက်သွားသည်။ သို့သော်မပျောက်ကွယ်သွားပါ။ ကျွန်ုပ်နေမကောင်းဖြစ်သည့်အခါခြေထောက်တွင်ယားယံနေပါသည်၊ ကျွန်ုပ်နာကျင်ပါလိမ့်မည်၊ ငါဆေးသောက်နိုင်တယ်၊
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသည်ထင်သည်မှာကျွန်ုပ်သည်လိင်တံ ဦး ခေါင်း၌ဝက်ခြံအနည်းငယ်သေး။ သင်ဤသတင်းစကားကိုပေးပို့ခြင်းကြောင့်၎င်းသည် balantinis ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ရတယ်, ငါ glans န်းကျင်ဝက်ခြံကဲ့သို့အစက်အပြောက်အချို့တယ်နှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုအဘယ်သို့ပြောနိုင်မသိရပါဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ သူတို့ကလိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းပတ်ပတ်လည်မှာအလွန်သေးငယ်သောအနီရောင်ဝက်ခြံများဖြစ်ကြောင်းသိလိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံစိုက်ထူသည့်အခါကျွန်ုပ်ညှစ်ပြီးခေါင်းကိုခရမ်းရောင်နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့နီရဲလာသည်။ သို့သော်ကျွန်တော်ညှစ်မှသာလျှင်တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်ပါသလား ???
မင်္ဂလာပါ ၃ ပတ်ကြာအောင်ကျွန်တော်ယားတာကိုတင်ပြခဲ့တယ်။ လိင်တံမှာ ... ပြီးတော့အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ပေမယ့်သူကကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ homgo ပေးထားပြီးရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့နံရံပေါ်မှာငါ့လက်တွေကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့တယ်။ cotrimazole cream ကိုအသုံးပြုသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမကူညီနိုင်ပါ၊ ဤယားနာသည်ကျွန်ုပ်ကိုဖျားနာစေသဖြင့်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
မိုက်ခ် ဆွာရက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြသနာကလိင်တံ၏အပြင်ဘက်ပိုင်းတွင်ယားယံခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဘာလဲဆိုတာကိုမကြာခဏသိချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုရှင်းပြနိုင်ရင် xfa ကကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ။
နှစ်ဖက်စလုံးရှိဝှေးစေ့များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ယားယံခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သို့သူတို့အဖြေကိုပို့ပေးနိုင်သည်ကိုသိလျှင်၎င်းသည်ဘာလဲဆိုတာကျွန်ုပ်မသိပါ။ miclo_barce2011@hotmail.com
Mike Suarez ကိုပြန်ပြောပါ
အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်သည်တစ်နှစ်လုံးနီးပါးကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၌ယားယံမှုခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားရက်ပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးအချိန်နှင့်အမျှယားယံနေသော်လည်းပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပိုမိုဆိုးဝါးလာသည်။ k သည်ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းကျွန်ုပ်သည်ယင်းကိုစိတ်ဆိုးစေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်ဟုခံစားရသည်။ ဆိုးရွားသည်မှာကျွန်ုပ်၏ flaka အင်္ဂါဇာတ်နှင့်စအိုရိုက်ချက်ကိုတွေ့သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သောကွန်ဒုံးကိုအသုံးမပြုပါ။ ငါ့ကိုဆေးထိုးရန်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ထံသွားရန်ရှက်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုတစ်ခါတစ်ရံလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှထွက်ပေါ်လာခြင်းမှသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်၊ သို့သော်နှစ်ရက်ကြာလျှင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းရောက်သောအခါလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခွဲခန့်ကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၌အနီရောင်ဝက်ခြံအချို့ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်လေ့လာမှုအချို့ပြုလုပ်ရန်သွားပြီးနောက်သူတို့သတ်မှတ်ထားသည့် balanitis ဖြစ်သည်။ ငါနင့်ကောင်မလေးနဲ့ဆက်နွှယ်နေပေမယ့်ကွန်ဒုံးကိုသုံးပြီးငါသာရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါ့ကောင်မလေးနဲ့အတူအဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူနှင်းဆီပန်းအချို့ခဲ့ကြပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်မ၏လိင်တံသည်အမျက်ဒေါသအဖြစ်နီလာခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူကအဖြူရောင်အထည်ကမနာကျင်သလိုထွက်လာတယ်၊ ဒါကအနာမပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒါကပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့ဆက်စပ်တယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ငါဟာကွန်ဒုံးမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံမှုပြုတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်လို့သင်ထင်သလား။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ glans တွင်အစက်အပြောက်များရှိသည်။ အရေပြားအနည်းငယ်သာထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အနီရောင်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်အလွှာများ၊ ငါ prepusio ပတ်ပတ်လည်အဖြူရောင်မုန့်ကိုယူလာပြီဆိုလျှင်ယခုငါနာကျင်စပြုလာသည်။ လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်း !! ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ!! ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားဖို့အရမ်းရှက်တယ်။
မင်္ဂလာပါ ... ငါပြောမယ်။ ရက်အနည်းငယ်ကငါစပြီးမီးစတင်လာပြီး glans တွေအနီရောင်ထွက်လာတယ်။ မကြာခဏဆိုသလိုယားယံနေတယ်၊ ​​အဲဒါဘာလဲဆိုတာကိုသိချင်ခဲ့တယ်။ ဤအရာကိုရှောင်ရှားရန်သင်တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်နိုင်ပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။
camilo herrera ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လိုကျွန်ုပ်သည်ဂလန်းပေါ်တွင်သေးငယ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အနီရောင်အစက်အပြောက်များနှင့်ယားယံခြင်းများစွာရှိသည်။ ပြproblemနာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ မည်သည့်ဆေးဝါးများကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသင့်သည်ကိုအကူအညီပေးရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည်။
camilo herrera အားပြန်ပြောပါ
Juan Camilo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ စပိန်နိုင်ငံမှစာရေးနေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ပြaနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါ။ ကျွန်တော့်အသားကအရမ်းခြောက်သွေ့ပြီးအက်ကွဲပြီးမကြာခဏပြင်းထန်စွာယားယံတတ်ပါတယ်။ အဆိုပါလှုပ်ငါ glans ထုတ်ယူဖို့ငါအရေပြားကိုဖယ်ရှားသည့်အခါတစ်ခုခုနာကျင်စေသော။ ထိုareaရိယာကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပြီး“ အော်သံများ” ပျောက်ကင်းစေနိုင်သနည်း။ မင်းရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကပုံမှန်ဖြစ်သည့်အချိန်ကာလအုန်းသီးပိတ်ခဲ့ပြီးယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ခေါင်းကိုမတိုက်နိုင်၊ စိုက်ထူသောအခါ၊ ငါရေချိုးဖို့ရေချိုးပေမယ့်နာကျင်နေတုန်းပဲ၊ ပုံမှန်အခြေအနေမှာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ၊ အဖြေကဘာလဲဆိုတာသိဖို့နည်းလမ်းအချို့ရှိတယ်။
juan camilo အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်လိင်တံပြန်လည်ခြောက်သွေ့မှုနှင့်နာကျင်မှုများနှင့်အတူငါ balanitis တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီနှင့်အက်ကြောင်းများ၌အတူတူလက္ခဏာများဖြစ်ကြပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံငါဒီအကြောင်းကြောင့်ဟုတ်လျှင်ငါသိလိုဝှေးအတွက်နာကျင်မှုရှိသည် ဒီရောဂါသို့မဟုတ်ငါနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အမှန်တရားကငါ့ကိုအများကြီးခြောက်လှန့်သောဤအမှုသို့မဟုတ်အခြားအမှုနှင့်ငါအဘို့ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အဘယ်သို့အကြံပြုနိုင်ကြောင်းသိလိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ၏အမှု၌သင်၏ချက်ချင်းပူးပေါင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ရှိပါသလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၌ balanitis ရှိသည်၊ ကျွန်မမဆုံးရှုံးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင် ၃ ရက်ရွှေရောင်အရက်ကိုသောက်ပြီးအရက်မသောက်တော့ပါ။ အနီရောင်အစက်များမှည့်လာခြင်းမှသာအကူအညီပေးပါ !!!!!
ငါမင်္ဂလာပါရက်အနည်းငယ်ငါအနီရောင်နီခြင်းနှင့်ယနေ့ငါအဖြူရောင်အစက်အပြောက်ရတယ်, ငါ့ရင်သားကင်ဆာလည်းအက်ကွဲပြီ, ငါ chamomile အဝါရောင်ပacterိဇီဝဆေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (ဆပ်ပြာ) နှင့်လိင်အင်္ဂါအသုံးပြုမှုအတွက် antifungal clotrimazole 2%, ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ပါသလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၃ ပတ်ကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လေးရက်ဆက်တိုက်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီး၎င်းမှအနီရောင်ကိုဆက်လက်ထားရှိပြီး arino နှင့် Pus သို့မဟုတ် magma ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုရသောအခါနာကျင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ ငါ့ကိုဒီကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ပါတယ်
ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ရည်းစားကခေါင်းငိုက်စိုက်ထားတယ်၊ ပုပ်နေတယ်၊ ​​သေချာပေါက်ကပ်ဘေးတစ်စုံတစ်ရာရှိတယ်၊ သူဟာမင်းကိုတံပိုးခတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ ငါသံသယမရှိဘူး၊ ကောင်းပြီနှင့်သောသင်၏ guic wey ကြမ်းတမ်းသောသော guacha အများအပြားလာကြတယ်သွင်းထား ,,
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကဂန္ဓာအနီရောင်အစက်အပြောက်အချို့ကိုတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်က canesten ကိုဆေးကြောပြီးလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအေးဆေးငြိမ်သက်စေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားတွင်အစားအစာများလည်းရှိသည်ဟုထင်ရသည်။ ငါဒီဆေးကို canesten ဆေးဖြင့်သာသောက်နိုင်သည်။ ယားယံနေတယ်
လွန်ခဲ့သောတစ်လလုံးက ၀ မ်းနည်းပူဆွေးခြင်းအနီရောင်အစက်အပြောက်များသည်အရိပ်နှင့်အသားသားထဲတွင်ရောင်ရမ်းနေပါသည်။ ... ketoconazole cream နှင့် ciprofloxacin 500 mg နှင့်ကျွန်ုပ်အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ketoconazole ကိုတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့သည်။ မျက်နှာသုတ်ပဝါများမပါ ၀ င်သောစက္ကူဖြင့်ကောင်းစွာခြောက်သွေ့အောင်ဆေးကြောခြင်းနှင့်အထက်ပါဖော်ပြသောဆေးပြားများကို (၄) ရက်လျှင် (၄) ရက်လျှင် (၈) ရက်အတွင်းသည်းခံစိတ်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ပြproblemနာပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အားလုံးအတွက်ကံကောင်းခြင်းနှင့်အောင်မြင်ခြင်း
ဟိုင်း၊ ငါ့နာမည်ကမာကိုပါ၊ ငါကလိင်အင်္ဂါနှစ်ဖက်စလုံးမှာအစာစားတာသိပ်မစားဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုခုမကောင်းလား၊ တစ်ခုခုကောင်းလား၊ ငါ့ကိုပြန်ပြောပါ၊ ငါ့အီးမေးလ်ကအန်တိုနီပဲ။ _marcox@hotmail.com ကျေးဇူးပြု
မင်္ဂလာပါမနေ့ကငါဆိတ်တစ်ကောင်ကိုဖမ်းလိုက်ပြီ။ ခရမ်းသီးနဲ့တူတယ်။ ငါမော့လိုက်ရှာနေတဲ့အတွက်ငါမြန်မြန်ပြန်ကောင်းလာချင်တယ်၊ ငါလည်းကျေးဇူးတင်တယ်
ကျွန်ုပ်၏နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုလက်ခံရရှိပါရန်။ ဤတိုတောင်းသောလိုင်းများသည်သင့်အားညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရန် .... ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၅၆ နှစ်သာရှိသေးပြီးကျွန်ုပ်၏တည်ငြိမ်သောပါ ၀ င်မှု (၂၅ နှစ်သက်တမ်း)၊ (၁၀) ရက်အကြာတွင်ထိုတိုးတက်မှုသည်လွန်ခဲ့သောကာလ (၇) နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ပင်နာ (PENIS) နှင့်ကြုံခဲ့ရသည်။ ... သူမအနေဖြင့်ကြာကြာမခံစားလိုတော့သည့်နေ့ရက်များနှင့် ၂ ရက်တာမတိုင်မှီကျွန်ုပ်သည်ဂလန်းတွင်မီးလောင်ရာအနည်းငယ်သာမီးမွှေးနေရသည်ကိုသတိပြုမိပြီး၊ ငါသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုရှိခြင်း၏အရှိန်အဟုန် ... လတ်တလောငါဆိုးရွားသောခံစားချက်ကိုခံစားခဲ့ရပြီး၊ GLရိယာတစ်ခုလုံးရှိအရာ ၀ တ္ထုများ) ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားသည့်ပထမ ဦး ဆုံးအချိန်တွင်၎င်းအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏အရေပြားသည်အနီရောင်အရောင်နှင့်အလွန်အမျက်ထွက်နေပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်သွေးထွက်နေသည်ဟုယူမှတ်သည်။ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အရာ ၀ တ္ထုများသည်အဆိုးရွားဆုံးသောမည်သည့်အရာမျှမရှိပါ ... ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုမော့စ်ဘရ်မဟုတ်ပါ၊ ငါသည်မည်သည့်အချိန်၌မဆိုသုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိသောကာလကြာရှည်စွာတည်ရှိနေသော၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာကိုသီတင်းပတ်များကစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ခြေထောက်တွင်ရောဂါကူးစက်ခံထားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
CESAR AUGUSTO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနံနက်၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏ဇနီးမဟုတ်သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏ထောင့်ပတ်လည်တွင်ဝက်ခြံအနီများရောက်ရှိလာပြီးကျွန်တော်ဆီးသွားသောအခါမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ ငါးပိ Lassar အမည်ရှိဆီမွှေးတစ်ခုထည့်လိုက်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပဲအထက်ပါဖျားနာမှုများပျောက်ကွယ်သွားသည်၊ သို့သော်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဝှေးစေ့များတွင်အလယ်အလတ်ရှိသော်လည်းကြာရှည်ခံသည်။ ဝမ်းဗိုက်၏အမြင့်သို့မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှနာကျင်မှုသည်ဝမ်းဗိုက်အမြင့်သို့မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ၀ မ်းဗိုက်အမြင့်သို့မြင့်တက်လာခြင်း၊ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်းရဲ့အာရုံစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းသောနံနက်ခင်းငါဘာကောင်းလဲဆိုတာသိချင်တယ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုယူပြီးနောက်မှာ၊ ငါ့လိင်တံကအနီရောင်ဖြစ်လာတယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုနည်းနည်းလေးမှအားမပေးလို့ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၅ နှစ်ရှိအမျိုးသားဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်လိင်တံ၏တူညီသောနေရာ၌လိင်တံ၏သွေးပြန်ကြောတစ်ခုမှ ၂ ကြိမ်တွေ့ရှိရသည် - ပထမ ၁ လအကြာ; အဆိုပါတွေ့ရှိမှုကိုအနာထွက်အရာရှိ groove သို့မဟုတ်လိုင်းများရှိပါတယ်တဲ့အနာကဲ့သို့ရောင်ရမ်းခြင်း, ထိုအခါငါအ ၀ တ်ကဲ့သို့ဖယ်ရှားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးအပေါ်တွင်အဖြူရောင်အလွှာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်အမင်းယားယံခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စေသည်။ သို့သော်၎င်းမတိုင်မီကျွန်ုပ်ခြေရင်းနားရှိလိင်တံ၏အထက်ခြေတွင်အစက်အပြောက်တစ်ခုရရှိသည် - အစက်အပြောက်သည် ၃ သို့မဟုတ် ၄ ရက်တိုသောကာလဖြစ်ပြီးအဓိကအနာပျောက်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်သည်။ အနာသည်ခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်လျှောက်ထားသည့်လိမ်းဆေးဖြင့်၎င်းသည်သေးငယ်။ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိဘဲပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါမဖျားနာသို့မဟုတ် lymph node များရှိသည်အနာဖေးမဟုတ်, သို့သော်ဤနောက်ဆုံးသောကာလ; ငါ့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာအရည်တစ်ဖုံပေါ်လာတယ်။ ရေပြည့်ဝနေပြီးနာကျင်မှုမရှိဘူး၊ ငါက urethra ကနေထွက်လာတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေမရှိဘူး၊ ငါကရေယုန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအရမ်းကိုကြောက်တယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကငါ့ကိုပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ငါလာသည်။ စအိုအနီးအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောတစ်ချိန်တည်းတွင်သေးငယ်သောဘောလုံးငယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမြင်နိုင်တာ၊ ကျွန်တော့်ကိုမလောင်စေတဲ့အတွက်အရက်ကိုသောက်လိုက်တယ်
Armando Gonzalez placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
ငါ၌လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်း၌မီးသီးသေးသေးလေးများရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခါအားလျော်စွာယားယံနေပြီးကျွန်ုပ်သည်အရေဖျားလှီးခြင်းခံရ၏။ ငါအနည်းငယ်ကြောက်တယ်
Armando Gonzalez အားပြန်ကြားပါ
ကျွန်ုပ်အသက် ၄၃ နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်လိင်တံ၏အစွန်အဖျား၌၎င်း၊ ငါနှင့်အတူတစ်ပါတ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်အရာမျှမယူပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုသင့်ကိုဖြေခိုင်းပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်၊ ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းမှဝေးရာသို့ထွက်သွားပါစေ၊ အမှန်တရားကျွန်ုပ်၏ဂလန်းတွင်အနီရောင်အချို့သောအချက်များရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ဂလန်းများဒေါသထွက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားဖြေ ဆို၍ လျှောက်ထားပါကပြောပါ။ Ketoconazole ဆီမွှေးသည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သလားသို့မဟုတ်ဆားငန်ရေဖြင့်သုတ်နိုင်သည်။ ဆေးကြောပြီးလျှင်ဆီမွှေးကိုအသုံးပြုပါ
ကျွန်ုပ် pichooooo တွင်အနီရောင်အစက်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် wuaaaaa ယူဆောင်လာသည့် k ကုန် my k မှလည်ချောင်းနှင့်ခေါင်းသည်နာကျင်ကိုက်ခဲသည်။
mother foker အားပြန်ပြောပါ
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒစ်ခ်ကိုပြုတ်ကျပြီး chikas culonas ကိုရှာဖွေပြီးကွန်ဒုံးနဲ့အမြဲတမ်းမျက်စိများစွာကိုကူညီပေးတဲ့ခွေးကြီးထွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော့်လိင်တံ၏အစွန်အဖျားသည်အလွန်ခြောက်သွေ့သည်၊ ၎င်းသည်အက်ကြောင်းများနှင့်သားရေကိုဆွဲချတိုင်းအချိန်ကတည်းကခက်ခဲသည်။ ထို့နောက်အက်ကြောင်းအလယ်၌၎င်းသည်အခွံမာလာပြီးသွေးကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ \_ t ဒါပေမယ့် Stuck၊ ငါအသဲကွဲနေတယ်၊ ​​Stuck လိုအရိုးမရှိဘူး၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။
ယောက်ျားတွေ… .. ငါ balanitis ခံစားခဲ့ရပြီးသင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေငါကြမ်းပြင်ပေါ်လိမ်းဆေးလိမ်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှမအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူး၊ ငါနှစ်နဲ့ချီပြီးပြောနေတာ !! ………ဘာမှမ… .. နောက်ဆုံးတော့အဲဒီမှာရှိခဲ့တာကိုငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ် ကျွန်တော့်ကိုစိတ်ထိခိုက်စေတဲ့ဆပ်ပြာတံဆိပ်တစ်ခု! နှင့်အခြားအရာတစ်ခုမှာလိင်တံကိုဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ရေဖြင့်အခြားအရာများဖြင့်ဆေးကြော။ မရသင့်ပါ။ ကျွန်တော့်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကကျွန်တော့်ကိုအတည်ပြုပေးတယ်။ သူကအဲ့ဒီဆပ်ပြာမထည့်ဖို့ပြောလိုက်တယ်။ ရေပဲ။ ……ငါသတိထားမိတာကအဲဒါကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒီမှာဖတ်ပြတာကကျွန်တော့်ရဲ့လိင်တံကိုတစ်ခါသုံးထားလိုက်တဲ့အပူတပြင်းနေ့တစ်နေ့ပါပဲ။ အိုင်အိုဒင်းအနည်းငယ်ပါဝင်သောရေခွက်နှင့်ချက်ချင်းပင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကိုသတိပြုမိပြီး၊ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သောအစည်းအဝေးအနည်းငယ်တွင်ထိုအဆင်မပြေမှုကို ထပ်မံ၍ မသိသောကြောင့်၎င်းကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ စိတ်ပျက်အားလျော့မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်သုတေသနပြုလေ့လာခဲ့စဉ်ကလေ့လာခဲ့ရသောနောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာဆီးသွားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုမလှည့်မကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ထိုဆီး၏အစက်များသည်ဘက်တီးရီးယားများသို့မဟုတ်မှိုများကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာကြီးထွားစေနိုင်ပြီး၎င်းကိုခြောက်သွေ့စေရန်ပင်ကောင်းစွာလှုပ်နိုင်သည်။ အိမ်သာသုံးစက္ကူ။ ဒါ့အပြင်သတိပြုရမယ့်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုအဲဒီတံစို့ကိုအမြဲလှည့်ပေးနေတာပါ။ မင်းကိုရိုက်နှက်တဲ့မိန်းမကိုကွန်ဒုံးနဲ့ပြောင်းပါ။ hahaha .... အမြဲတမ်းဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟား .... ဒီအကြံဥာဏ်တွေကမင်းကိုအကျိုးပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ၂ ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ ဦး ခေါင်း၌အနီရောင်အစက်အပြောက်များနှင့်ယားယံခြင်းကိုသတိပြုမိပြီးကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံသည်။ xfa ဖြစ်လာသောအခါသင်၏အဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းသည်။
ငါဟောင်းဖြစ်ခဲ့သည့်ကြီးမားသောအခြေအနေနှင့်အခြားအမျိုးသမီးများသည်အခြားယောက်ျားများကိုသူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအထိကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ခြင်းမခံရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောစွဲလမ်းမှုဖြစ်လာသည်ဟုထင်မြင်သည်။ နောက်ကွယ်မှထိုးဖောက်ခံရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုမခံစားရပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးရှိရန်နှင့်စကားလုံးတိုင်း၏အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်ရန်မျှော်လင့်သောကြောင့်ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
အသက် ၇၉ နှစ်ရှိပါပြီ၊ မစားပါနဲ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီကိစ္စက ... ငါရည်းစားက Candia ကူးစက်ခံထားရတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားပြီးသူကငါ့ကို macril နဲ့တော်တော်လေးစျေးကြီးတဲ့ဆေးတချို့ကို ၄ ရက်မှ ၇ ရက်အထိပို့လိုက်တယ်။ ဆေးသောက်လိုက်တာတစ်ပတ်ပဲ။ ဒုတိယကနေငါ့ကိုကုသပေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့မျက်လုံးတွေအရေပြားပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါငါရတနာရသွားတယ်။ နောက်တစ်ခါရောဂါကူးစက်ခံရတယ်။ ငါကုသမှုကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ကျရင်ရုတ်တရက် .. ယားယံလာတယ်။ အရင်လိုလိုပဲ .. ငါမှာမရှိတော့တဲ့ဆေးတွေလို .. တစ်နေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ပဲမုန့်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ .. ငါ ၂ ရက်လောက်ဝတ်ခဲ့တယ် .. အခုအခုတော့ငါဟာမုန့်ပဲရှိသေးတယ် .. ဝတ်တာ ၂ ရက်ရှိပြီ .. အသားအရေပျက်စီးသွားပြီလားမသိဘူး .. ဒါမှမဟုတ်ငါမုန့်ကိုသိုထားတယ်။ ငါကဖယ်ရှားပစ်လို့မရဘူး .. ယားယံနေပုံရတော့တယ်။ ငါနားလည်တဲ့အရာကနေမင်းကိုအေးဆေးငြိမ်သက်သွားစေတယ် .. ဆေးတွေကမှိုကိုသေစေတယ် .. ဒါပေမယ့်ငါမလိုချင်ဘူး .. tmp ငါပြန်သွားချင်တယ် သငျသညျအကြှနျုပျကိုပြောပြသည့်အခါတူညီသောကုသမှုရန် gio .. ငါ့ရဲ့ glans အသားအရေနှင့်ငါ့အသားအရေပြောင်းလဲကတည်းက
PS: သူတို့ကဒီနေရာမှာ Candia (သို့) Candiasis (သူတို့အတူတူပဲလို့ထင်တယ်) ကိုမိန်းမကထုတ်ပေးတယ်။ X အကြောင်းပြချက်အရစအိုမှဘက်တီးရီးယားသည်လိင်အင်္ဂါနှင့်ထိတွေ့သောအခါ ...
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ငရဲများအောက်တွင်ညာဘက်ခြမ်းစားခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းများရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၌ဘာမျှမရှိခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းများကျွန်ုပ်သည် ၅ ရက်နီးပါးကြာပြီဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဖြစ်ပျက်သော်လည်းပြန်လာပြီးကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုခြစ်ရာမချနိုင်ပါ။ သုံးစက္ကန့်မပြည့်ခင်ငါပြန်ပြီးယားလာတယ်၊
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးနှင့်မရင်းနှီးသောဆက်ဆံသူတိုင်းကိုကြိုက်ပြီးယခုကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည် ဦး ခေါင်းတွင်များစွာယားယံသော်လည်း၊ သူတို့ဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေတဲ့ဖြတ်တောက်မှုတွေလို Hogos လိုပဲထွက်လာကြပါတယ်။ တကယ်တော့ငါမှာဝက်ခြံအနည်းငယ်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့တာဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့သူတို့ကငါ့ကိုချွတ်ပစ်လိုက်ပြီ၊ ငါခြစ်ရာတွေပြန်ထွက်လာတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးပါ။
ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Seville ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းပြီ၊ glans တွေပေါ်မှာအဖြူရောင်နောက်ခံအနီရောင်အစက် ၄ ခုလိုထွက်လာတယ်၊ အမှန်တရားမှာ၊ သူတို့ကကျွန်မကိုယားယံတာ၊ အနှောင့်အယှက်မပေးတာမျိုးပေါ့။ ငါ balanitis xo ရောဂါခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါတိုးတက်မှုကိုသတိမပြုမိသည့်အချိန်တွင်တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် xo ဆီမွှေးရနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေတွင်ရှိသူတစ် ဦး ဦး ။
jose antonio sevilla အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အနည်းငယ်ရောင်နေပြီးအရေပြားအထက်ပိုင်းသည်အလွန်နီနေသည်။ ကျွန်ုပ်မပြန်နိုင်ပါ။ glans များဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါနာကျင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်နောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်မသည် glans ၌အစက်အပြောက်များရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်အရည်ကဲ့သို့အဖြူရောင်အရည်နှင့်စတင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလွန်ယားပါသည်။ ၎င်းသည်မှိုသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုဖြစ်ရမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အခုတော့အားလုံး glans လုံးဝအနီရောင်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်ကအများကြီးနှောင့်အယှက်, ငါအဖြေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဘာဝယ်၊ ဝယ်နိုင်၊
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၄ နှစ်သာရှိပြီဖြစ်ပြီး၊ စုံတွဲများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏တစ် ဦး တည်းသောနေ့ ၅ ရက်နေ့သူမသည်ပထမအဖြစ်အပျက်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ယောဂသည်ဂျိုဂျီနာတွင်မီးလောင်ခြင်းအမြောက်အများခံစားခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီညအတွင်းမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့လမ်းခရီးတစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပေမယ့်အခြားသူတွေနဲ့မပေါင်းဘူး။ ဒီပြPROနာမျိုးကိုငါမတွေ့ဖူးသေးဘူး။ ငါ့ရဲ့ပင်နာန်တွေနဲ့မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာမရှိသေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ? ကျွန်ုပ်ဘာကိုယူသင့်သလဲ၊ မည်သည့်လိမ်းဆေးကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောလပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည်အမျိုးအစား ၁ လိင်အင်္ဂါရေယုန်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသူတို့က acyclovir ကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ကိုယူပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအထိပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်မှာကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အနီရောင်ဖြစ်လာပြီး၊ တွန့်တွေလိုအက်ကြောင်းတွေရှိတယ်။ လိင်တံရဲ့အနားစွန်းတွေမှာလိင်တံကိုစိုက်ထူတဲ့အခါမှာမျက်လုံးသေးလေးနဲ့တူတယ်၊ အသားအသားရဲ့အစိတ်အပိုင်းကငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တာထက်အနီရောင်အစက်အပြောက်တွေရှိတယ်။ ထို့နောက်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်ဆီးထွက်လာသည့်အပေါက်မှာ၎င်းသည်အဖုထွက်လာပြီး၊ ဆီးသွားသည့်အခါအနည်းငယ်လောင်ကျွမ်းသည်ဟုထင်ရသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုအများဆုံးစိတ်ပူရသည့်အရာမှာအနီရောင်နှင့်အညစ်အကြေးသည်လိင်တံနှင့်အနီစက်များဖြစ်သည်။ ထွက်လာကြပြီးတစ်ခါတစ်ရံကိုက်တတ်။ မင်းရဲ့အဖြေမိတ်ဆွေများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အနီရောင်အစက်အပြောက်များနှင့်ကျွန်တော့် glans ပေါ်ရှိအရေးအကြောင်းများပျောက်ကွယ်သွားဖို့ကျွန်တော့်ကိုအကြံပေးမယ်ဆိုရင်ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောငျး DOC ။ ငါရောဂါလက္ခဏာများရှိသည်ဟုထင်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကျွန်ုပ်သည် PENIS ၏အကြံပြုချက်ကိုစတင်လေ့လာခဲ့သည်။ အနီရောင်နှင့်ငါ့အရေခွံများထွက်လာသည်။ တူညီသောမေးခွန်းတစ်ခု။ ငါဒီနေ့သုံးရက်ကြာစတုန်းကငါနဲ့မပတ်သက်ဖူးဘူး .. ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့ရေချိုးခြင်းပြီးနောက်ငါမတော်တဆမှုတစ်ခုကြုံခဲ့ရပြီးအဲဒီ့အသင်းကိုကောင်းစွာမဆေးကြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါသည်လည်းစိတ်ပျက်စရာဆပ်ပြာကိုသုံးသည်။ သို့မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကြွယ်ဝသောကြောင့်ငါ့ကိုကွောကျရှံ့။ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဖက်နှင့်စကားပြောရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအတွက်နောက်ဆက်တွဲဆက်နွယ်မှုများမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုကုသရန်ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုပေးနိုင်သနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မင်္ဂလာပါ။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏ဒရာမာအကြောင်းသင့်အားစာရေးခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်အားမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာတစ်ခုခုကိုပြန်ပြောပြရန်ယနေ့ကျွန်ုပ်အား ထပ်မံ၍ စာရေးနေပါသည်။ မကြာသေးခင်အချိန်အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုနည်းပါးလာတာဟာငါ့အတွက်ဖြစ်ပျက်သမျှအရာအားလုံးကြောင့်၊ ငါ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာတောင်မှပဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကငါဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာတွေးပြီးငိုတော့တာပဲ။ အခုတော့သူငယ်ချင်းတွေ၊ ငါပျော်တယ်၊ ပျော်ရွှင်နေတယ်၊ ​​မင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝကမပြီးသေးဘူး၊ ဘ ၀ ကဆက်ပြီး၊ သူတို့ကပိုသိချင်နေကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြproblemsနာတွေကိုအဖြေရှာရင်ငါ့အမှုကိုဖတ်ပါ၊ ရလဒ်နှင့်ယခုငါမည်သို့ငါမသိပေမယ့်ငါပိုခံစားရတယ်, ယုံကြည်သို့မဟုတ်မမှော်အားဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားလက္ခဏာတွေပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့်ငါမှော်၌မယုံကြည်ကြဘူးငါသိ၏, ဟုတ်သလော ကောင်းပြီ၊ ငါကိုယ်တိုင်လည်းဇွဲရှိရှိနဲ့ဆရာ ၀ န်ကောင်းကောင်းတစ် ဦး ကိုကြွေးတင်နေတယ်။ သေခြင်းမှအပအရာအားလုံးတွင်အဖြေတစ်ခုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်သူတို့ကိုသာပြောလိုက်သည်။ ယခုငါကျွန်ုပ်လုပ်ရမည့်အကြောင်းကျွန်ုပ်ဆရာဝန်ကရှင်းပြခဲ့သည့်ကုသမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီးနောက်တွင်အသေးစိတ်ကိုသင်ပြောပြလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ဝဘ်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၅ နှစ်ကြာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးကွန်ဒုံးမရှိဘဲအမြဲတမ်းလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ မှို၊
Monurol 3gr ကိုတစ်ပါတ်လောက်သောက်နေတယ်။ ဆီးထဲမှာရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ဆေးညွှန်းမပါဘဲရတယ်။ ဂျက်လေယာဉ်ထွက်လာတဲ့အခါနာကျင်မှုပျောက်သွားတဲ့အခါရက်အနည်းငယ်အကြာမှာသန့်ရှင်းတဲ့ဆေးကိုသောက်ပြီးတဲ့နောက်နာကျင်မှုပျောက်သွားတယ်။ ယခုကျွန်ုပ်၏လိင်ဆက်ဆံမှုများ၌ပင်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုကြာကြာယူနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်အတွက်အရာရာတိုင်းသည်ကောင်းမွန်သည်။ ယခုမူကားငါသည်ငါ့ frenulum အောက်မှာအဖုရရှိပါသည်နှင့်အများကြီးယားယံ။ သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သင်ဘာအကြံပြုသလဲ။ ပြီးသားမှစ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ရံဖန်ရံခါဆက်ဆံခြင်းခံရပြီး၊ ရက်အနည်းငယ်အကြာ၌ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းတစ်ချက်တွင်အနီရောင်အစက်များပေါ်လာပြီး၊ နှစ်ပတ်အကြာမှာဆရာ ၀ န်ဆီကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။ သူတို့ကစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ဘာမှမထွက်လာဘူး။ သူတို့ကငါ့ကို ciprofloxacin 500 x ဆယ်ရက်သောက်ဖို့နဲ့ azithromycin x တစ်ကြိမ် ၁ ဂသောက်ဖို့နေဆဲပဲ။ မီးလောင်သွားပြီ၊ သို့သော်အနီစက်များမဟုတ်ပါ။ နှစ်ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဆရာ ၀ န်ဆီကိုပြန်သွားတယ်။ သူကငါ့ကိုဂလန်းကိုသောက်ဖို့ antifungal cream ကိုပေးလိုက်တယ်။ အခုဆိုရင်အစက်အပြောက်တွေပျောက်သွားပြီလို့ထင်ရပေမဲ့၊ ငါဂရုတစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဟာပျော့ပြောင်းပေမယ့် glans တွေရဲ့အရောင်နီးပါး။ ပြနာကမီးလောင်ရာပြန်လာပြီးငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ငါ့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်သူလဲ။ မင်းရဲ့အာရုံကိုငါတန်ဖိုးထားတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (monurol 1g ဆိုတာဘာလဲ၊ အဲဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်လား၊ ဆေးညွှန်းမပါဘဲရောင်းတာလား။ )
မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ဆက်ဆံရန်အချိန်များစွာယူပြီး ၁၅ ရက်ခန့်မှကျွန်ုပ်အစာအနည်းငယ်စားလာသည်။ သို့သော်အနီရောင်ကိုသတိမပြုမိသောကြောင့် Balanitis လားကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သူတို့ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်
လွန်ခဲ့သောနှစ်များကကျွန်ုပ်၏ဆရာဝန်သည် afumix ကို သတ်မှတ်၍ တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်ဓာတ်သတ္တုရေဖြင့်ဆေးကြောပေးသောကျွန်ုပ်၏ဆရာဝန်၏ယားယံခြင်း၊ နီခြင်း၊
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သိလိုသည်မေးခွန်း ... ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ (သို့) ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည် glans ၏အောက်ပိုင်းပိုင်းတွင်ထက်ဝက်မျှကျနေပြီးနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းသည်ကျွန်တော်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အနီရောင်ဖြစ်လာပြီးအရေပြားဆုံးရှုံးသွားသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်။ အဖြေများအတွက်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်
ငါ့ကိုပြောသူကယူနီနာကို PREIS အတွက်ပြန်ပေးချေမှုနှင့် PICASON အတွက်ကောင်းမွန်သောခရီနှင့်အချို့သောစာရွက်စာတမ်းကောင်းများရှိပါက PENIS သည်စင်ကြယ်သော GRACIASSSSSSSSSSSSS ………။
မင်္ဂလာပါလွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ်၏ glans များတွင်ဝက်ခြံငယ်လေးတစ်ခုပေါ်လာသည်။ တစ်လတည်းသောဝက်ခြံပြန်ရောက်လာပြီး ၂ ပတ်အကြာတွင်ပျောက်သွားသည်။ ယခုငါလိင်တံ၏ ဦး ခေါင်း၌အနီရောင်အစက်လည်းများများတွေ့ရသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ အဲဒီဝက်ခြံတွေကိုလိင်တံကနေပျောက်ကွယ်သွားအောင်လုပ်ဖို့အကြံပေးလိုတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ဆရာဝန်ထံသွားပြီးကျွန်ုပ်ဘာတွေဖြစ်နေသည်ကိုသူပြောပြသည်။ သူက Fuconazole 150 mg တစ်ခုတည်းဆေးနှင့် Medifungol Clotrimazole 1% ဟုခေါ်သောမုန့်ကိုနံနက်ယံ၌နှစ်ကြိမ် x နှင့်တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် x အိပ်ရာမဝင်ခင်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ (ကြိုတင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းမတိုင်မီ) နှင့်ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းလုပ်နိုင်တာကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်ဆီသွားပြီးရှက်ဖို့မလိုပါ။ မင်္ဂလာပါ
Hellooo … ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာခဲ့လဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော်ခဏတာဆီးချိုရောဂါပါ။ ak ကသူတို့ပျောက်သွားတဲ့အံဆွဲထဲမှာအမှတ်အသားတွေရတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်လာကြပြီ။ သူတို့ဟာပျောက်ကွယ်မသွားအောင်တစ်လလောက်ကြာပြီ။ ကျွန်မဟာမုန့်အမျိုးမျိုးကိုထည့်ပြီးဘယ်သူကမှငါ့အတွက်အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ငါစိုက်ထူခြင်း၌ပါဝါဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါ့သုတ်ရည်လုံးဝလုံးဝကျဆင်းသွားခြင်း, ငါဘာလုပ်နိုင်တယ်
သင်၏ pitilin သည်ကောင်းမွန်စွာကြည့်သည်အထိကုသမှုခံယူခဲ့သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤဖြေရှင်းချက်များကိုဖတ်ပြီးပြီ။ မင်္ဂလာပါ၊ ၎င်းသည်ယားယံခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အားလိင်တံကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အဖုအပိန့်များလိုပါသေးသည်။ တစ်ခုခုကိုပြန်လည်စတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, ငါကအောက်ပါပြPROနာရှိသည်ကြောင့်ငါမှတ်ချက်ပေး, ငါရှည်လျားသောနှစ်ပေါင်းငါတစ် ဦး ကန္တာရနှင့်မသက်ဆိုင်သောဆက်ဆံမှုနှင့်အခြေအနေများနှင့်မသန်မစွမ်းဖြစ်နေသည်ကိုသတိပြုမိခြင်း၊ နောက်လာမည့်နေ့ရက်ကာလသည်ကျွန်ုပ်၏ယူရေနီယမ်သည်ပြန်လည်နိုးကြားမှုရှိကြောင်း၊ ။
ငါနှင့်ထပ်တူထပ်တူဖြစ်ရပ်မျိုးကျွန်ုပ်တွင်ကွန်ဒုံးမရှိဘဲလိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုခဲ့ပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်း၌၎င်းတို့ထဲမှအများစု၏လက္ခဏာများရှိခဲ့ပြီး၊ ယေဘူယျခွေးများဝယ်ခဲ့သည်။ သငျသညျမုန့်ပြွန်ထဲကကုန်သည်တိုင်အောင်သင်၏ glans ပေါ်မှာသုံးပါ။ ကျွန်တော့်အမှားကိုယုံပါ။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီး ၂ ပတ်အကြာတွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။ သင်၏လိင်တံသည်ယခင်ကဲ့သို့ကျန်းမာပြီးပန်းရောင်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့လျှင်ပင်သော့သည်အဓိကဖြစ်သည်။ ကုသမှုကိုရပ်ဆိုင်း။ မထားပါနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်ဆက်လုပ်ပါ တစ်လကြာမှကုသမှု၊ မှိုများကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာယုံကြည်သည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းသည်ရောဂါကူးစက်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ သို့သော်အသုံးပြုပါက၎င်းသည်ကုန်သွားသည်အထိအသုံးပြုပါ၊ ကျွန်ုပ်နှင့် USE CONDON သင်ခန်းစာကိုအမြဲတမ်းလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ မင်းထုတ်ဝေတာကိုကြည့်ပါ၊ မင်းကိုကူညီနိုင်မလားငါကြည့်ချင်တယ်၊ ငါသူတို့မှာသားရေပုဆစ်နဲ့ငါထင်တဲ့အစွန်အဖျားကြားမှာငါကွန်ဒုံးမရှိဘဲကွန်ဒုံးမရှိဘဲသူနေထိုင်ခဲ့ချိန်ကတည်းကသူထင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ
ချစ်သူသူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီးသင်တို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောကြားပြီးကျွန်ုပ်၏ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အား ထပ်မံ၍ စာရေးသည်။ ငါ Genital Herpes ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့အတူ ၅ နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒီဟာကငါကိုနာကျင်မှု၊ အဆင်မပြေမှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေဖြစ်စေတယ်။ အထူးသဖြင့်အနာတွေပေါက်လာရင်စိတ်မကောင်းစရာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျစရာကောင်းတယ်၊ ငါ့စိတ်ထဲမှာထွက်ခွဲထွက်။ ဒါဟာပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပြီးကျန်တစ်သက်လုံးအတွက်လည်းငါ့အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ချက်ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နောက်ဆုံးအရာ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဆုံးမှာအလင်းရောင်အမြဲရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ။
ချစ်သူသူငယ်ချင်းများကိုနှုတ်ခွန်းဆက် သ၍ သင်တို့အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Genital Herpes ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်မှာ ၅ နှစ်ခန့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုနာကျင်မှု၊ ဒီ "သူကပြောတယ်" ဗိုင်းရပ်စ်ဟာပျောက်ကင်းအောင်မလုပ်နိုင်တာကြောင့်ကျန်တစ်သက်တာအတွက်အနာတွေပေါ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ချက်ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နောက်ဆုံးအရာဖြစ်တယ်၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဆုံးမှာအလင်းအမြဲရှိတယ် သူငယ်ချင်းများ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ။
ဂရုတစိုက်ဖတ်။ ငါပေးမည့်လမ်းညွှန်များကိုလိုက်နာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာငါပြောခဲ့သလိုဒီအိပ်မက်ဆိုးကလွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကစခဲ့တယ်၊ ငါရုတ်တရက်စအိုနဲ့လိင်တံစပ်ကြားမှာယားယံတယ်။ ငါထင်တာကအင်းဆက်ပိုးကိုက်တဲ့အရာလို့ထင်ပေမယ့်ယားတာကိုစစ်ဆေးတာကအတွင်းပိုင်းက x ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ ရက်အတော်ကြာပြီးတဲ့နောက်ငါလိင်တံရဲ့လိုဏ်ဂူထဲမှာအနာကြီးတဲ့အနာလိုမီးလောင်ပြီးယားယံသွားသလိုခံစားရတယ်၊ ငါရုတ်တရက်၊ ငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ရဲ့သွားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပွတ်တိုက်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာ၊ မကြာခင်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေအားလုံးကငါလိင်အင်္ဂါရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်တာကိုရိုးရိုးလေးပဲ။
ငါဆရာဝန်တွေအများကြီးသွားခဲ့တယ်။ တစ်ယောက်ကဆစ်ဖလစ်ကိုပြောတယ်၊ သူကကျွန်တော့်ကိုအမ်ပီစီလင်ဆေး (၂.၅၀၀) သန်းထိုးပေးဖို့အမိန့်ပေးတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ရောဂါကူးစက်မှုပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းတစ်လအကြာမှာတော့ကူးစက်ရောဂါပျောက်သွားလို့ထပ်မံရောက်ရှိလာတယ်။ အစွမ်းသတ္တိရှိပြီးသူတို့ကလိမ်းဆေးများကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။ ဥပမာ - Germiderm, Toprem၊ clothimazol ။ etc etc နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုမိုပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဘာမျှ။ အိပ်ရာပေါ်မှာအကြိမ်ကြိမ်ငိုခဲ့ဖူးတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေဖို့တောင်စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့လိင်မှုဘ ၀ ကမတူဘူးလို့ထင်ပြီးကမ္ဘာကြီးဟာငါ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာငါမြင်ခဲ့လို့ပဲ။
ဗိုင်းရပ်စ်သည်အဆင့်သုံးဆင့်ရှိပြီးတက်ကြွ၊ တက်ကြွသော၊ တက်ကြွမှုမရှိသော၊ ပထမတစ်ခုမှာပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်သင်၌အနာများပေါက်ခြင်းနှင့်အခြားသူများအားရောဂါကူးစက်ရန်အန္တရာယ်များသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုကသင်ယားယံခြင်း၊ ယားခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခံစားရပြီးတတိယအချက်ကတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကိုယ်ခံအားစနစ်ကခြိမ်းခြောက်ပြီးအာရုံကြောစနစ်ကိုဖျောက်ရန်ပြေးပြီးအိပ်ပျော်သွားပြီးတိုက်ခိုက်ရန်အခြားအခွင့်အလမ်းကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဆရာဝန်ကငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြတယ်၊ ငါပြောတော့သူကကျွန်တော့်ကိုညွှန်းတယ်။ ဤအပိုင်း၌သင်ဤရောဂါမှသက်သာရာရစေရန်သင်ရောက်ရှိနေသောပြည်နယ်တွင်နေထိုင်ပါကသင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကောင်းစွာရေးချရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသည်။
လိင်အင်္ဂါမှ herpes အနာများစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ACICLOVIR 200 mg ကိုဆေးပြားတစ်လုံးတည်းကိုတစ်နေ့ ၄ နာရီတိုင်း ၅ ရက်သောက်ပါ။ ယင်းကအနာများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအနာပျောက်စေသည်။ သင့်တွင်အနာများရှိနေသည့်အချိန်တွင်လိင်မလုပ်ပါနှင့်။ သူတို့ကိုခန်းခြောက်အောင်အမြဲတမ်းကွန်ဒုံးသုံးပါ။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အနာများခြောက်သွေ့ပြီးနောက်လိင်အင်္ဂါရေယုန်၏ထုတ်ကုန်, balanitis သို့မဟုတ် balaposthitis ပေါ်လာမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုလုပ်ပါ။ သင်၏လိင်တံကိုအေးမြသောရေနှင့်လျှော်ပါ၊ ရေမွှေးဖြင့်မိနစ်အနည်းငယ်မျှစိမ်ပါ။ ပြီးလျှင်လေကိုခြောက်စေပါ။ သင်အနီးကပ်inရိယာ၌ရေချိုးသောအခါဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ခေါင်းလျှော်ရည်အမျိုးအစားများကိုမသုံးပါနှင့်၊ ၎င်းသည်ဒဏ်ရာများကိုကူးစက်စေပြီးပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည့်ဓာတုပစ္စည်းအချို့ကိုမသုံးပါနှင့်။ သင်၏လိင်တံကိုလေမှုတ်ခြောက်စေပြီးနောက် ALERSONA, ဤမုန့်ကိုထည့်ပါ။ အနီရောင်areasရိယာများသို့မဟုတ်ယားယံရာနေရာကိုမျက်စိမှိတ်ထားပါ၊ တူညီသောအနာများ၌ဘယ်တော့မျှမဖြစ်သင့်။ ယားယံခြင်း, အခြားဘာမျှမဖုံးလွှမ်းသောအလွှာ။
ထို့နောက်တင်းကျပ်သောဘောင်းဘီကိုမသုံးပါနှင့်၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းareaရိယာကိုပွင့်လင်းစွာအိပ်စက်ပါက၎င်းသည်သင်၏လိင်တံကိုလေထဲသို့ပေးသည်။ အဏုဇီဝဗေဒများသည်aခန္ဓာဖြစ်၏။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရှက်ဖို့မရှက်ပါနဲ့။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျန်းကျန်းမာမာအစားအစာများ၊ သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအားကောင်းစေသည့်ထုတ်ကုန်များကိုစားသည်။ ကောင်းပြီ၊ ဆရာဝန်ကကျွန်တော့်ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့ဆေးမရှိဘူး၊ အဲဒါအတွက်ဆေးမရှိဘူး၊ ငါတို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကဒီကံမကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုရပ်တန့်စေတယ်၊ ၎င်းသည်အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှစတင်သည်၊ ထို့နောက်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏တိုက်ခိုက်မှုများသည်နည်းလာပြီးအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှလျော့ကျသွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်သည်ယင်း၏လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ငါဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမင်းပြောချင်တယ်၊ အဲဒါကငါတို့ရဲ့လိင်မှုဘ ၀ ကိုစွန့်လွှတ်သင့်တယ်၊ အချိန်တန်ရင်မျှော်လင့်ချက်ရှိမယ်၊ မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်စိတ်ပျက်စရာမလိုဘူးဆိုတာပဲလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ရှည်ရှည်ထား။ ငါ့အတွေ့အကြုံကမင်းကိုတစ်ခုခုကူညီပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တစ်နေ့တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများအတွက်အထူးကုဆရာ ၀ န်ကောင်းတစ်ယောက်ထံသွားရန်ကံကောင်းသည်။ ထို့နောက်သူသည်ကျွန်ုပ်၏စကားကိုနားထောင်ရန်နှင့်ဖုံးကွယ်ရန်အခက်တွေ့ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်မှာ Genital Herpes Simplex သို့မဟုတ် HSV အမျိုးအစားရှိကြောင်းသိခဲ့ရသည် 1 သူကဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာပျောက်ကင်းစေတဲ့ကုသမှုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာအမြဲတမ်းရှိနေနိုင်တဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ဆေးမရှိဘူးဆိုတာသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ထိတ်လန့်စရာမလိုပါဘူး၊ herpes သည်သေစေလောက်သော၊ ပို၍ နာကျင်စေသော၊ herpes အမျိုးအစား ၂ ဖြစ်သည်။ လူသားအားလုံးသည်ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇနှင့်တုပ်ကွေးရောဂါတွင်သယ်ဆောင်ထားကြောင်း၊ အချို့လူများ၌အခြားသူများထက် ပို၍ ထင်ရှားနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကလေးငယ်တစ် ဦး သည်ပါးစပ်ထဲသို့အနာတရဖြစ်သွားနိုင်သည်။ သင်မသိသောတစ်ချက်သည်ပင့်ကူကိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူမကိုယ်တိုင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
... တစ်နေ့တိုင်အောင်ငါလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများအတွက်အထူးကုဆရာဝန်ကောင်းတစ် ဦး ထံသွားရန်ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်သူသည်ကျွန်ုပ်၏စကားကိုနားထောင်ရန်နှင့်ဖုံးကွယ်ရန်အခက်အခဲကြုံတွေ့ရစဉ်ကကျွန်ုပ်သည်လိင်အင်္ဂါ herpes simplex ရောဂါရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် သို့မဟုတ် HSV အမျိုးအစား ၁ နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့သည်။ သူသည်ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌ပျောက်ကင်းစေသည့်ကုသမှုမရှိသောကြောင့်ပျောက်ကင်းနိုင်သည့်ကုသမှုမရှိကြောင်းရှင်းလင်းစွာပြောခဲ့သည်။ သို့သော်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ၊ herpes simplex သာဖြစ်သည် ပိုပြီးဆိုးဝါးပြီးနာကျင်မှုပိုရှိသောအခြား Herpes တစ်ခုရှိသဖြင့်၎င်းမှာ herpes အမျိုးအစား ၂ ဖြစ်သည်။ သူကလူအားလုံးကိုမျိုးရိုးဗီဇနှင့်တုပ်ကွေးရောဂါတွင်ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသယ်ဆောင်ထားကြောင်းပြောခဲ့သည်။ အခြားသူများတွင်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးငယ်တစ် ဦး သည်ပါးစပ်ထဲသို့အနာအချို့ထွက်လာပြီးသူမသိသောကြောင့်ကလေးငယ်သည်ပင့်ကူကိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ယင်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ဘယ်လိုစမ်းသပ်မှုများသွားခဲ့၊ သွားကြတာလဲ။ အားလုံးကောင်းသွားပြီလား
လွန်ခဲ့သော ၂ လခန့်ကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံစည်နှင့်ကြက်ဥများကိုအနည်းငယ်ပြွန်များရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအစားအစာများစွာပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ခြစ်ရာများသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန့်လုပ်သည်။ ငါလိင်မဆက်ဆံဘူး။ ခါးပန်းပဲ။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။
ငါပြaနာတစ်ခုရှိတယ်၊ ငါဟာအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သုတ်ရည်မပေးခင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အခါငါဆီးသွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲငါမသိဘူး၊ ငါဘယ်တော့မှလိင်မဆက်ဆံဘူး၊
Formica သည်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ပတ်ကြာပြီးနောက်တွင် .. အလုပ်များနေပြီးသန့်ရှင်းသောဆေးဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်း၌ပန်းရောင်အစက်အချို့ရရှိသည်။
ကျွန်တော့်ရည်းစားကသူ့လိင်တံမှာခြင်ထိုးတဲ့ pikete လိုဝက်ခြံအချို့ရခဲ့ပေမယ့်သူကတစ်လကျော်ပြီဖြစ်လို့သူတို့မသွားကြဘူး၊ သူတို့တွေအရမ်းယားတာ၊ သူပေါ်လာတဲ့အခါတိုင်းသူတို့ရောင်ရမ်းလာတာလား။
လက်ဝဲဘက်ရှိဝှေးစေ့များတွင်ခြောက်သွေ့မှုပုံစံကိုကျွန်တော်မြင်ရသောအစက်အပြောက် (ပုံတစ်နည်းနည်းဖြင့်ဖော်ပြရန်) သေးငယ်သည့်အစွန်အဖျားပေါ်မှမကြာခဏမြင်ရသည့်ညာဘက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ ခြောက်သွေ့သွားသည်။ ၎င်းသည်အနီရောင်အရောင်ဖြစ်လာပြီးရောင်ရမ်းလာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ pus နှင့်အတူဆင်တူသော်လည်းအဖြူနှင့်အစိမ်းအကြားသိပ်သည်းမှုနည်းပါးခြင်း၊ လိင်တံ၏အကာအကွယ်သားရေကိုဆီးနှင့်အပြန်အလှန် run သောအခါနာကျင်မှုဖြစ်စေသည်။ အဲဒါလား ထိုအဘယ်သို့ငါပြုမူဆက်ဆံရမည်နည်း ... ငါ၌ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရှိသည်နှင့်ဤသူသည်သူမ၏အဘို့အပြcauseနာအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေချင်ကြဘူး ... ! ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်စအိုဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ပြီးထို နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံတွင်ယားယံခြင်းသို့မဟုတ်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာရှိပြီးအချိန်ဖြုန်းတိုင်းအဖြူရောင်အရည်ကိုထုတ်လွှတ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ တနင်္လာနေ့ကတည်းကကျွန်ုပ်သည်လိင်တံ၏အစွန်အဖျားကိုစတင်နှောင့်ယှက်လာပြီး၊ လိင်တံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်၌အနီရောင်ပိုများပြီး“ စိုစွတ်စေသောစကား” စိုစွတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ ငါအင်တာနက်ကိုကြည့်နေရင်းလိင်အင်္ဂါ herpes simplex အတွက်အစားထိုးကုသနည်းကိုရှာဖွေနေသည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ လူများသည်ဤအမှားနှင့်ကူးစက်ခံရသည့်အခါတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်လိမ်လည်လှည့်စားသူများဖြစ်ကြသောသူမအားလိမ်လည်လှည့်စားသူများနှင့်ဤရောဂါမှခံစားနေရသူများကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချလိုသူများလည်းရှိသည်၊ သူတို့မှာဆေးရှိသည်ဟုပြောခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသော၎င်းသည်မကုသနိုင်သေးသော်လည်းကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေများသည်အရာရာတိုင်းကိုမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေကြသည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ဆိုးဝါးစေသောဤဆိုးသွမ်းမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်အလင်းအမှောင်တစ်ခုကိုဖွင့်ပေးသောအလွန်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ US မှသိပ္ပံပညာရှင်များကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အချက်အလက်များမှာသုတေသီများကဤအေးဂျင့် (hsv1) သည်မျက်နှာအာရုံကြောများ၌ပုန်းခိုခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပင်မလှုပ်မရှားဖြစ်နေပုံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကောင်းစွာမှတ်သားထားသည့်အဆင့်တွင်ပထမအဆင့်ဖြစ်သော“ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ” သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အရာမှာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရေယုန်ကိုတွေ့ရှိပြီးအရေပြားကိုအနာများနှင့်အနာများဖြင့်အနာများပွားများစေခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားအဆင့်မှာ "ငုပ်လျှိုးနေ" သည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ၄ င်းတို့၏အလုပ်ကိုလုပ်ရန်လီဖိုဆဲလ်များကိုလွှတ်လိုက်သည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောကြောင့်၎င်းဗိုင်းရပ်စ်သည်အရေပြားအမြှေးပါးအောက်တွင်ပုန်းအောင်း။ ပြေး ဝင်၍ ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရောဂါပိုးမွှားများ၏သွေးကိုသန့်ရှင်းရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ဖီလိုဖိုက်များ၌ပင်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရန်အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်သည် ၄ ​​င်းကိုတက်ကြွစေသည့်အရာသို့မဟုတ်တိတ်တဆိတ်တည်ရှိနေသောအရာဝတ္ထုများကိုထုတ်လွှတ်ကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်များကကောင်းစွာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဆရာဝန်များပြုလုပ်နေသည့်လေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိပြီးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်းကိုသတ်ပစ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဆေးအသစ်များကိုဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအသက်ဝင်စေမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်လှစွာသောသူငယ်ချင်းများသည်သည်းခံခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းတို့သာလိုအပ်သည်။
၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် Herpes သည်ဘယ်တော့မျှပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ MELALEUCA ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီသို့မဟုတ် TEA TREE ဟုသိကြသောသဘာဝထုတ်ကုန်တစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်အားအလွန်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိခဲ့သည် (၎င်းသည်လက်ဖက်ရည်မဟုတ်ပါ၊ သြစတြေးလျားစက်ရုံ၏ထုတ်ယူမှုတစ်ခု) - တစ်နေ့လျှင်ရေအနည်းငယ်မကျစေဘဲသင့်ကိုလောင်ကျွမ်းစေလျှင် - လုံလောက်ပါတယ်။ ၎င်းကို Naturopathic ဆေးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်သည်။
မေးခွန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ငါ glans ၏ကန့်သတ်ချက်သည်အဖြူရောင်အစက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ငါ့မှာရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရှိနေပြီ၊ သူတို့မဖယ်ရသေးဘူး၊ အနံ့ဆိုးလေးနဲ့လိုက်ပါနေတယ်၊ ​​ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်လဲ ???
မင်္ဂလာပါ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုဖြေပါ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံနှင့်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်ရောဂါကူးစက်ခံထားရသောကြောင့်သူမသည်ကျွန်ုပ်အားကာကွယ်မှုမပေးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်သူမ၏ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါကူးစက်ခံထားရသောအချိန်ကြာခဲ့ပါပြီ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ကျွန်ုပ်ကိုယားယံပါသည်။ ) တစ်ခါတစ်ရံဆီးသွားသည့်အခါ၎င်းသည်အနည်းငယ်လောင်ကျွမ်းစေပြီးအဆိုးဆုံးအရာမှာကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံရာနေရာ၌လိင်ဆက်ဆံလျှင်၎င်းသည်အိတ်များကဲ့သို့တက်လာပြီးပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မီးလောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုငါကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လောင်ကျွမ်းသည်မဟုတ်ဘဲလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိသည့်နေရာတွင်ပင်ငါသွေးထွက်ထွက်သည်။
David Oscar ဟုသူကပြောသည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်အားဤအရာကိုကူညီနိုင်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းသည်ယားလာသည်၊ အနီရောင်ဖြစ်လာသည်၊ ကျွန်ုပ်ကိုခြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ရောက်သည်ဟုထင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်များစွာကပ်နေသည်။ ?
david oscar အားပြန်ပြောပါ
Wilson garcia က ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ။ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းရပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကိုချစ်မြတ်နိုးသောအခါကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အလွန်စိတ်ထိခိုက်သည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်မျိုးနွယ်ကဒါကိုခြစ်ပြီးငါ့ကိုသိချင်လို့လား
Wilson Garcia သို့ပြန်သွားပါ
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းကောင်းသောအဖြေကိုကျွန်ုပ်လိုချင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ယားယံခြင်းများကိုခဏခဏခံစားခဲ့ရပြီး၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးသုတ်ရည်သည်အဝါရောင်ထွက်လာသည်။ ငါဆိုလိုတာကသိချင်တဲ့ဂလင်းတွေအမြဲရှိတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် prepusio ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီး glangio သည်အလွန်အနီရောင်ဖြစ်ပြီးလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကျွန်ုပ်ကိုခွဲစိတ်ပြီးတစ်လခွဲထားခဲ့သည်
oscar nicolas အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းတို့၊ စာမျက်နှာကကောင်းတယ်၊ ငါတစ်ပတ်လောက်ဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်ကလိင်တံနှင့်ဝှေးစေ့ယားယားယားယားယားယားယားယံလာတယ်၊ ငါအရမ်းစိုးရိမ်တယ်၊ ဆေးကုသမှုခံယူချင်တယ်၊ ငါမှိုတွေလို့ထင်တယ်၊ ငါအရမ်းကြောက်လန့်နေတယ်၊ ​​တကယ်တော့ဒီဟာကငါ့ဘဝမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊
Ruben Dario ဟုသူကပြောသည်
သင်ဆရာ ၀ န်သို့သွားခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးမသောက်ခြင်းနှင့်သင်ဆရာ ၀ န်သို့သွားစဉ်သင်၌ရှိသည့်အရာဖြစ်ကြောင်းသေချာစွာမပြောမချင်းမည်သူ့ကိုမျှဆက်ဆံခြင်းမပြုသင့်ပါ။ သင်နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသူကိုစကားပြောပါ၊ သို့မှသာသူတို့အတူတူအဖြေရှာနိုင်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကုသမှုခံယူရတာဟာအချည်းနှီးပါပဲ။ သူမကမလုပ်ဘူး၊ သင့်လက်ကိုဆေးကြောပြီးညစ်ပတ်တဲ့ပန်းကန်မှစားတာနဲ့တူတယ်။
ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်မမှာရှည်လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတစ်ကိုယ်ရည်အင်္ကျီအောက်ကနေပထမဆုံးထွက်လာတယ်၊ သူတို့ကငါ့ကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်။ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုလား၊ ရေယုန်လားလားမသိဘူး၊ ဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ ကိုယ်က
ငါသိချင်တာတစ်ခုကဖြစ်ပျက်တာကအချိန်ကြာမြင့်တာ၊ ငါ့လိင်အင်္ဂါထဲမှာအရမ်းယားယံတာ၊ ကျွန်တော့်လိင်အင်္ဂါမှာအူသိမ်အူမများဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဆရာဝန်ကကျွန်တော့်ကို fluconazole နဲ့ neclobet ကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်၊ ဆေးတွေကိုသောက်လိုက်တယ်၊ ငါငြိမ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ပိုဆိုးလာတယ်။ ငါမျက်လုံးတွေထဲမှာဝဲတွေများလာတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခြစ်ရာခြစ်ခြစ်လိုက်တယ်။ ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာမသိဘူး။
မင်္ဂလာပါ။ PN ၏အသားအရေအားဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ထွက်လာသည်။ လူကြီးတွင်အဝတ်လျှော်သောအခါအရေပြားခြောက်သွေ့ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သားအိမ်အသားပြတ်ခြင်း၊ ကျွန်မရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ပါပြီ၊ အခုအသားကိုခြစ်ခြစ်ခြင်းကဲ့သို့နာကျင်စေပြီးနာကျင်စေပါတယ်။ အဲဒီမှာသာအဲဒီပြproblemနာရှိနေပါတယ်။ ဆီးသွားရန်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာသောအရာ၊ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကအမြဲတမ်းဖြစ်လေ့ဖြစ်သော်လည်းဤတစ်ကြိမ်တွင်သူသည်ကျွန်ုပ်ကုသရန်သုံးသောအခြားအချိန်များထက် ပို၍ နာကျင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လူအများစုအတွက်မညီမညာဖြစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်စိုးရိမ်မိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းသောလူသားအားဘုရားသခင်ပေးသောအကြီးမြတ်ဆုံးသောကောင်းချီးသည်ပင်! ယခုသင်သိသည့်အတိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သူများသည်သူတို့အသက်ကြီးလာသောအခါဆိုးဝါးသောပြစ်ဒဏ်များခံရမည်ဟုသက်သေပြသည်။ ဒုစရိုက်ကိုမပြုဘဲကျင့်သောသူသည်ထာဝရဘုရားအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရလိမ့်မည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အတွက်အများကြီး။ ငါ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်ကြည့်ရှုပါ။
နှစ်ရက်သာလိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ glans တွေယားယံလာတယ်။ ယားတာကိုမခံရပ်နိုင်ဘဲပြောက်တွေလိုတစ်ခုခုရတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကို ၀ ယ်သင့်တဲ့အရာကိုအကြံပေးပါ။ ဤရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်မည်သို့ကုသသင့်သည်ကိုကူညီပါ။ '(မဆိုးပါစေနှင့်။ * ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် poems = (
sarita ... ♥ ဟုသူကပြောသည်
ဒီ Jahir ကိုကောင်းကောင်းတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းက hahaha ကိုထိုးလိုက်တာပဲ
sarita ... to ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
ဟေးမင်းသိလားဟေ့ငါခလေး balanitis xk ငါနဲ့ ၂ ရက်ကြာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်။ p လိင်တံနဲ့ kada km ရေချိုးခန်း m ကခေါင်းဖြူတဲ့အဖြူရောင်အလွှာ ၁ ခုကိုကီတိုလို့ခေါ်တယ်။ နောက်တစ်နေ့ထပ်တွေ့ရင်သူတို့ပြောတာက Kita သည် canesten ပါ ၀ င်သော်လည်းမည်မျှလျှောက်ထားရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ သို့မဟုတ်အခြားမုန့်သို့မဟုတ်ဆေးပြားအချို့လား။
ငါသတင်းအချက်အလက်အလွန်ကောင်းသည်ထင်သောကြောင့်, ယခုငါ့အယောက်ျား၏အမျက်ဒေါသသည် ... မည်သူမဆိုဤပြproblemနာကိုအဘို့အဖြေတစ်ခုသိတယ် (နှင့်)